၁။ တိုင်းရင်းသားများ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် ပေါင်းစည်း တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီ သဘောထားထုတ်ပြန်
၂။ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း AA ထုတ်ပြန်
၃။ မူဆယ် SNLD ပါတီ စည်းရုံးရေး ကား ရွှေလီမြစ်ထဲကျ ၃ဦး သေဆုံး၊ကလေးတဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲ
၄။ စစ်တွေမြို့၌ ပြုလုပ်သည့်ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဦးဆောင်ကျောင်းသားအချို့ ဖမ်းဆီးခံရ
၅။ KPP ၀န်းရံသူ ၂,၀၀၀ ခန့် ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည်အင်အားပြ
၆။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး KBC ဥက္ကဌ ဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
၇။ ပလက်ဝမြို့တွင် ဒေသခံနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရ
၈။ ပြည်သူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်နေသော လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်အမည်ခံ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာမှ အမြန်ဆုံးကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသင့်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ကြေညာချက်ထုတ်
၉။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံး
၁၀။ နယ်မြေတည်ငြိမ်သည့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်မပြု
၁၁။ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ကျောင်းဆရာ ၁ ဦး လက်နက်ကြီး ထိမှန် သေဆုံး
၁၂။ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ
၁၃။ ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့်နေအိမ်များကို ပြန်ပြင်ပေးမည်
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ကရင်ရေးရာ မဲဆန္ဒရှင် ၁၀ သိန်းခန့်ရှိ
၁၅။ ကချင်ပြည်နယ်က ကျေးရွာအုပ်စု ၁၉၂ စု ဘာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပလဲ
၁၆။ ဒီးမော့ဆိုတွင် ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီ ၂ ခု၏ ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးခံရ
၁၇။ ဖားကန့်နှင့် မိုးညှင်းတွင် Stay at Home အမိန့်ထုတ်ပြန်
၁၈။ မြ၀တီမြို့တွင် KNDP ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် လူဦးရေသောင်းချီ၍ အင်အားပြလှည့်လည်
၁၉။ ကျောက်မဲမြို့နယ် လူထုနေအိမ်ဝင်းထဲ ဗုံး/မိုင်း (၁) လုံးထပ်မံ တွေ့ရှိ
၂၀။ တိုက်ပွဲမဖြစ်သည့်မြို့နယ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခြင်း လက်ခံနိုင်စရာမရှိဟုဆို
၂၁။ မြောက်ဦးတွင် လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်၍ ကလေးငယ် ၁ ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
၂၂။ တိုင်းရင်းသားပါတီ ထောက်ခံသူတွေ အပြန်အလှန် ဝန်းရံပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံး
၂၃။ Covid-19 ကြောင့် ဖားကန့်တွင် မဲရုံထပ်တိုးပေးရန် တောင်းဆို
၂၄။ ပဋိပက္ခမဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ်တချို့ကို မဲပေးခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆို
၂၅။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့် ပေး မပေး စဉ်းစားရာတွင် နိုင်ငံရေးအရ စွက်ဖက်၍ မစဉ်းစားရန် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ပြောကြား
၂၆။ မြဝတီနယ်စပ် မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂)တံတား ယာယီပိတ်သွားရန် စီစဉ်
၂၇။ မြစ်ကြီးနားတွင် ဒီဇင်ဘာလအထိ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်
၂၈။ မင်းပြားမေလွမ်းရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်၊ ရွာအနီးကျည်ကျ၍ ရွာသားများကြောက်လန့်ထွက်ပြေး
၂၉။ မိုင်းခုတ်တွင် ကျပ်သိန်း ၈၀၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ သယ်သူမမိဘဲ သိမ်းဆည်းရမိ
၃၀။ ပါတီဖျက်သိမ်းခံရမှု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ နှင်းဆီပါတီ စာပို့ကန့်ကွက်မည်
၃၁။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ANP ပါတီ အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရမှု ၈ ခုထိရှိလာ
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခြေရှိသည့်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) အနေဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် ပေါင်းစည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ UEC မှ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမပြုမည့် နယ်မြေများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့အပြီး ၎င်းတို့မှ ယခုလို သဘောထားထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုး သား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDP ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။ KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက “ကရင်(ပြည်နယ်)မှာက ယခင်ပိတ်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ကိုပဲ ထပ်ပိတ်လိုက် တော့ သိပ်ပြောစရာမရှိဘူး။ ရခိုင်၊ ရှမ်းတို့မှာ ပိုပိုပြီး ပိတ်လာတဲ့အခါ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ မဲပေးခွင့် ရရှိရေးအတွက် သဘောထားထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်။” ဟု အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပြည်နယ် ၅ ခုမှ ပေါင်းစည်း ပါတီများမှာ ကရင်ပြည်နယ်မှ KNDP၊ KSPP-က ချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ၊ KySDP-ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ CNLD-ချင်းအမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ MUP-မွန်ညီညွတ် ရေးပါတီတို့ဖြစ်သည်။
KSPP ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၂) ကွမ်ဂရောင်အောင်ခမ်းကလည်း “ကျနော်တို့ ကချင်မှာ ကျေးရွာအုပ်စုတွေလောက်ပဲ ဖျက်သိမ်းတာဖြစ် တယ်။ ရခိုင်မှာဆို ၉ မြို့နယ်တောင် ဖျက်သိမ်းတော့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီး ဖြစ် လာနိုင်တယ်။ ဒါကို အမြန်ဆုံးပြည်လည်ပြင်ဆင်ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်စေချင်ပါတယ်။” ဟုပြောသည်။ UEC မှ ယခုလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအား ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တရားမျှတရေး၊ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတို့တွင် ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလည်း ကွမ်ဂရောင်အောင်ခမ်းက ပြောသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)တာဝန်ရှိသူကို ကေအိုင်စီမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖြေကြားရန် မအားလပ်သေးကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခွင့် ရစေသည့်နည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံရေး ဘောင်ကို ချဲ့ထွင်ရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသည့် အနေအထားတွင် UEC ၏ ထုတ်ပြန်ချက်သည် ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း မပြုမည့် နယ်မြေများမှ တိုင်းရင်းသားများအား လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများ ရွေးချယ်လာစေရန် တွန်းပို့ရာရောက် သည်ကို ရှုမြင်ပါသည်ဟု ထပ်မံပါရှိသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေစိုက် တိုင်းရင်သားပါတီ အများအပြား ရှုံးနိမ့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်ပြည်နယ်များရှိ ပါတီအများအပြားမှာ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၌ တစ် ပါတီတည်းအဖြစ် ပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်သလို အဆိုပါ ပေါင်းစည်းပါတီ ၅ ပါတီမှာလည်း အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%90%e1%80%ad %e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA က ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး သွားခဲ့အပြီး ငါးရက်အကြာမှာ AA က အခုလို ဝန်ခံပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်ညပိုင်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ… NLD အစိုးရ အနေနဲ့ ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီအမတ်လောင်း သုံးယောက် ကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ AA က ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ AA အနေနဲ့ စစ်သုံ့ပန်း လဲ လှယ်ရေးမူကို ဆက်ပြီးဆုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဖမ်းဆီးထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး AA အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခိုင်သုခကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ရာမှာ… NLD အစိုးရဟာ ရခိုင့် တပ်တော် ကို အမြတ်ဖြတ်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ ရခိုင်မှာ အစိုးရတပ်မတော်က စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နိုင်အောင် အမိန့်ပေးနေ ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့တပ်မတော်အပေါ် အရေးမယူနိုင်အောင် NLD အစိုးရက အကာအကွယ် ပေးနေကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကာလမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့ NLD အစိုးရက လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဒါကြောင့် ဒီကိုယ် စားလှယ်တွေကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ကြောင်း RFA ကို ပြောပါတယ်။
AA အဖွဲ့ရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ပါတီ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က… ဒီလို စစ်သုံ့ပန်း လဲလှယ်မယ်ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံဖို့ ခက်ခဲသလို၊ တပ်မတော် ကို NLD အစိုးရက အမိန့်ပေး စေခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ AA ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင့်တပ်တော် AA ဘက်က ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA က ဆက်သွယ် မေးမြန်း နေပေမယ့် အခုထိ ဆက်သွယ်လို့ မရသေးပါဘူး။ အလားတူ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေး ကို RFA က မေးမြန်း ထားပေမယ့် ပြန်လည်ဖြေဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်နီနီမေမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဦးမင်းအောင်တို့ သုံးဦး တောင်ကုတ် မြို့နယ် ဖောင်းခါးကျေးရွာမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းနေချိန် အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် AA က ဒီကနေ့မှာ တရားဝင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-detains-toungup-nld-10192020090901.html
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကားတစ်စီး ရွှေလီမြစ်ထဲသို့ ထိုးကျပြီး အမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံးကာ၊ ကလေးတဦး ပျောက်ဆုံးနေဆဲဟု သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၈)ရက် မနက် ၉ နာရီ တွင် မူဆယ်မြို့ ဖိုင်ကျောင်းကျေးရွာ နောင်ဟင်လှေဆိပ်တွင် ကားတစီး ရွှေလီမြစ် ထဲသို့ ထိုးကျကာ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် လိုက်ပါသွားသည့် အမျိုးသမီး (၃)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ကလေးငယ်တဦး ယခုချိန်ထိ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဟု SNLD မှ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းကျော်သိန်း က သျှမ်းသံတော် ဆင့် ကို ပြောသည်။ အဆိုပါကားသည် (SNLD) နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို လိုက်ပါ အားဖြည့်ပေးသည့် ကား ဖြစ်သည်။
ထိုကားပေါ်တွင် လူ(၇) ပါရှိကာ ၃ ဦး အသက်ရှင်ပြီး၊ အမျိုးသမီး ၃ ဦး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည် ဆယ်ယူလာနိုင်ခဲ့ပြီး ကလေးကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စိုင်းကျော်သိန်း က ပြောသည်။“ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ချိန်မှာ (၃) ယောက်ကတော့ ထွက် လာနိုင်တယ်။ ကျနော်ဝိုင်းပြီးတော့ ကယ်ကြတယ်။ ကျန်တာက (၃) ယောက်သေဆုံးသွားပြီး ကလေးငယ် တစ်ဦး ပျောက် ဆုံးနေတယ်”ဟု စိုင်းကျော်သိန်းက ပြောသည်။ လက်ရှိပျောက်ဆုံးနေသည့် ကလေးငယ်သည် အသက် (၅)နှစ် အရွယ် သာ ရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ပြီး စိုင်းကျော်သိန်းက “ စက်လှေက ဟိုဖက်မှာရှိနေတာ။ ဒီဖက်မှာ ကျနော်တို့ ကား ၃ စီးကရပ်ထားတယ်။ စက်လှေ စောင့်နေတာ။ အဲဒါကို ဒီဖက်ကနေကျော်တက်သွားပြီးတော့ ရေထဲထိုးကျသွားတဲ့ သဘောဖြစ်သွားတယ်” ဟု ပြောပြသည်။ အမျိုးသမီး (၃)ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို မူဆယ်မြို့ပြည်သူဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ဂရုဏာ လူမှုကူညီရေး အသင်းမှ ဦးသောင်းထွန်းက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ SNLD မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကား ပါ။ အရှိန် ကြောင့် ရေထဲ ထိုးကျသွားတယ်။ အမျိုးသားတဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ဦးကတော့ အသက်ရှင်တယ်။ အမျိုးသမီး ၃ ဦး ရုပ် အလောင်းကို တွေ့တယ်။ ကလေးကိုဆက်ရှာနေတယ်”ဟု ဦးသောင်းထွန်း ကပြောသည်။ https://burmese.shann ews.org/archives /18945
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က ရက္ခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ဦးဆောင်၍ တောင်းဆိုဆန္ဒဖော် ထုတ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားအချို့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် စစ်တွေမြို့ အတုလမာရဇိန် ပြည်လုံးချမ်းသာဘုရားကြီးရှေ့မှ စတင်ကာ မြို့တွင်းရှိ လမ်းအချို့တွင် လှည့်လည်ခဲ့ပြီး အင်းဝဘဏ်ရှေ့နားတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရက္ခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ တွဲဘက်သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုဦးသန်းနိုင် က “ကျွန်တော်တို့ ၉ လပိုင်း၊ ၉ ရက်နေ့က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြပြီးရင်လည်း အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ကို ဖမ်းဆီးတယ်။ ဖမ်းဆီးတာကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ ထားလိုက်တော့။ နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေက ထပ်ပြီးတော့ သေနေတယ်။ လက်နက်ကြီးကျလို့ သေနေတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှသေနေတယ်။ ဒါတွေ ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အခုလိုမျိုး ထပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုလိုဆန္ဒပြရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မီဒီယာများကို ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွင် ရက္ခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ အဓိက ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် စစ်တွေမြို့မှ ပြည်သူအချို့ကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ကျောင်းသားများသည် Burmese Government Get Out၊ Burmese Army Get Out၊ ရခိုင် သည် ကျွန်မဟုတ် စသည့်အချက်များကို ကြွေးကြော်တောင်းဆိုကြသကဲ့သို့ ဆိုင်းဘုတ်၊ ပိုစတာများကိုလည်း ကိုင်ဆောင် ကာ စီတန်းလမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ရက္ခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကိုဦးသန်းနိုင် (သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ)၊ ကိုမြတ်စိုးဝင်း (ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ-ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်-တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)၊ ကိုကျော်နိုင်ဌေး (သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ) နှင့်ကိုကောင်းထွန်း (သမဂ္ဂ-တက္ကသိုလ်များ ရန်ကုန်၊အဖွဲ့ဝင်) တို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.co m/article/195866
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ ကရင် ပြည်သူ့ပါတီ -KPP ၀န်းရံသူ လူအင်အား ၂,၀၀၀ ခန့်မှ မြို့တွင်းအပါအ၀င် KPP ကို ထောက်ခံသည့် နယ်ကျေးရွာများ အတွင်း အင်အားပြလှည့်လည်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ကရင်ပြည် သူ့ပါတီ -KPP မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသာ ၀င်ရောက် အရွေး ချယ်ခံကြမည်ဖြစ်ပြီး အခြား ကရင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားပါတီ-KNP မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အင်အားပြလှည့်လည်မှုများအတွက် စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် စလောင်းလောင်းက“ ဒီကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ်ထဲ မှာရှိတဲ့ ကရင် ဒေသခံတချို့ဆို ကိုယ့်ကရင်ပါတီရှိတယ်ဆိုတာတောင် မသိကြဘူး။ တချို့လည်း ကရင်ပါတီရှိ တာကို သိပေမယ့် ကိုယ့်ကရင်ပါတီအတွက် မဲထည့်ဖို့ကို မသိကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အဲဒီအတွက်ကို စီစဉ် တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရက်ပေါင်းရင် ၀န်းရံသူပါ အပါ နှစ်ထောင်လောက်ရှိမယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ အင်အားပြလှည့်လည်မှုများကို အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ် အမှတ်(၁)မဲ ဆန္ဒနယ်၊ ၁၅ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ပုသိမ်ကားလမ်းမကြီး တစ်လျှောက် မြင်းခါးဆိပ်မှ ဒါးကနှင့် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ် အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်ကျေးရွာများအထိ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီများဖြင့် အင် အားပြလှည့်လည်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့လှည့်လည်ရာတွင်လည်း လိုက်ပါသူများအား ဆိုင်ကယ် ၁ စီးလျှင် ၂ ဦးနှုန်းဖြင့်သာစီးနှင်းရန် သတ်မှတ် ထားသည့် အပြင် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်ပါက အင်အားပြလှည့်လည်ရာတွင် ပါဝင်ခွင့်မပေးဘဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ Mask (နှာခေါင်းစည်း) တပ်ဆင်ခြင်း၊ လက်သန့်ဆေးရည်များပေးဝေခြင်း စည်း ကမ်းချက်များဖြင့် လှည့်လည်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စလောင်းလောင်းက ပြောသည်။ ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ -KPP မှ မန်းစံ ထွန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် မန်းစံစီဖိုးက ကန်ကြီးဒေါင့် မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ နှင့် မန်းစောလင်းက ကန်ကြီးဒေါင့် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ နေရာများအတွက် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org /2020/10/kpp%e1%81%80%e1%80%94%e1%80%b9%e1%8 0%b8%e1%80%9b%e1
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများ မဲပေးကြရန် တိုက်တွန်းသော ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး KBC အသင်းချုပ် ဥက္ကဌ Rev.Dr. Hkalam Samson ကို ကချင်သတင်းဌာန KNG က မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ KBC ကနေ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မဲထည့်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ဆရာ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အသင်းတော်ကလူတွေ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီဆို မေးခွန်းမေးလာတတ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ ဘာသာရေး ဦးဆောင်သူတွေကိုလည်း ဘယ်ပါတီကို မဲထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး မေးတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့ KBC ကနေလည်း အားလုံးခံယူထားတဲ့အတိုင်း တူပါစေဆိုပြီး ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကတော့ သူဟာနဲ့သူ တော့ရှိပါစေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့က အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ ပညာပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလုပ်ရအောင်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ခန့်က ကျနော်တို့ KBC ရဲ့ EC ကနေ အရေးပေါ်အစီးအဝေးမှာ ဒါကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိကြိုက်တာ ကိုပြောတာတော့ ပြဿနာ မရှိဘူးပေါ့။
မေး။ ။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ကြိုးစားမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် ဆရာ့အနေနဲ့ အမြင်လေးသုံးသပ်ပေးပါ။
ဖြေ။ ။ NLD နဲ့ ကျနော်ပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာ NLD က ညွန့်ပေါင်းအစိုးရလုပ်ဖို့အတွက် အစီစဉ်မရှိဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ USDP တွေကတော့ ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ အရင်သူတို့လက်ထက်တုံးကလည်း တခြားတိုင်းရင်းသား ပါတီ တွေနဲ့လည်းသူတို့လက်တွဲခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာတော့ USDP တွေအနေနဲ့က အမှတ်ရနေတာပေါ့။ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေနဲ့ အတူလက်တွဲနိုင်တာက ကောင်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ဦးဆောင်ပြီး NLD က လုပ်ရမဲ့ အဲ့တာဝန်ကို မလုပ်နေဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မိတယ်။
မေး။ ။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပိုပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရပ်တည်ရာနဲ့ ရွေးချယ်စရာဆိုတာထက် ပြည်သူတွေကို အသိပေးပြောပြချင်တာရှိရင် ဖြည့်စွက်ပြောပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲက အဖြေမှာ ကျနော်တို့က သင်ယူပြီး ဒီနေ့ကျနော်တို့ WMR အနေနဲ့လည်း အပြင်က ဘာဖြစ် လာမယ်ဆိုဒါကို မှန်းဆပြောဆိုတတ်တဲ့ ကျနော်တို့ ရပ်မိရပ်ဖတွေက ပညာများများယူပြီး ကချင်ပါတီတွေ ပေါင်းစည်းကြပါ ဆိုပြီး အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ ကချင်ပါတီတွေအားလုံး မစည်းရုံးနိုင်သေးဘူး။ ပြီးတော့ လူမျိုးစုပါတီတွေ လည်း မစုစည်းနိုင်သေးဘူး။ ကျနော်တို့ WMR အနေနဲ့ကတော့ KSPP ဖြစ်ဖို့အတွက် နာမည်သတ်မှတ်ပေးတယ်။ Logo တွေ အလံတွေကို အတည်ပြုပေးတာဖြစ်တယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါတီပေါင်းစည်းရေး ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ၁၇ ဦးမှာ ပါတယ်။ WMR အနေနဲ့ စုစည်းလိုက်ရင် ကောင်းတယ်လို့ အမြင်ပေးတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်တိုင် မဲကို ထည့် ဖြစ် အောင်ထည့်ပါ။ ဒီနေ့ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒီမဲထည့်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းအာနည်းနေသေးတယ်။ မဲစာရင်းမှာ ကိုယ့်နာမည်ပါလား မပါလားတောင် သွားမကြည့်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် မဲထည့်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။ https://burmese.k achinnews.com/2020/10/19/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့၊ ပလုပ်တောင်ရပ်ကွက်မှ အမျိုးသားနှစ်ဦးကို တပ်မတော်သားများမှ ဖမ်းဆီးသွား ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးမှာ ဦးကျော်မင်းအောင် (၃၂)နှင့် ဦးဌေးလွင် (၃၃)နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီး အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ရေတင်းခွန်ကျေးရွာမှ ပလက်ဝသို့ ကုန်ပစ္စည်းသယ်လာစဉ် လမ်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပလက်ဝ ဒေသခံ ဦးအောင်အောင်ကပြောသည်။ “စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက် ရေတင်းခွန်ကိုကုန်ပစ္စည်းသယ်ဖို့သွားကြ တာပါ။ အဲကပစ္စည်းတွေ သယ်လာတဲ့လမ်းမှာ တပ်မတော်သားတွေက ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ အခုတော့ ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်း ထားပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးမှာ ကြုံရာကျဗန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူများဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို ပလက်ဝ ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်းထားသည်ဆိုသော်လည်း မိသားစုဝင်များ တွေ့ခွင့်မရသေးကြောင်း ဖမ်းဆီးခံ ရသူ ဦးကျော်မင်းအောင်၏ ဇနီး ဒေါ်မြရီသန်းကပြောသည်။
အဆိုပါလမ်းတွင်သွားလာမည်ဆိုပါက တပ်ရင်း ၂၈၉ တွင် ခွင့်ပြုစာတင်ရကြောင်း၊ ယင်းသို့ခွင့်ပြုစာတင်ပြန် ငွေကြေးအခက် အခဲရှိသဖြင့် စာမတင်ဘဲသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်မြရီသန်းက ဆက်ပြောသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးကို ပလက်ဝ ရဲစခန်းတွင် ယာယီထိန်းသိမ်းထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ တပ်မတော်သားအချို့မှ ဖမ်းဆီးထားသူနှစ်ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပလက်ဝမြို့နယ် ရဲခစန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဝင်းလွင်က ပြောသည်။“တပ်က ခဏလာအပ်ထားတာပါ။ အခုပြန်ခေါ်သွားပြီ။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူနှစ်ယောက်က အရက်ဆီတွေ သယ်လာ ကြတယ်။ လမ်းမှာ တွေ့လို့ သူတို့ကိုခေါ်သွားတာပါ။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ကို အမှုဖွင့် တရားစွဲတာတော့ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် စက်တင်ဘာလအတွင်းက ကျောက်တော်မြို့နယ်ဘက်သို့ ကုန်ပစ္စည်းအငှားသယ်ယူပို့ဆောင်သူ ၄၁ ဦးအား တပ်မတော်ကဖမ်းဆီးကာ တပ်ရင်း(၂၈၉)သို့ခေါ်ဆောင်းသွားပြီး တစ်ရက်ခန့်ကြာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ သည်။ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများရှိနေသည့် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ဒေသခံများမှ စားဝတ် နေရေးအခက်အခဲကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းအငှားထမ်းရန်သွားစဉ် မကြာခဏဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရမှုများ ရှိနေသည်။ https://www .bnionline.net/mm/news-76367
ပြည်သူ့စစ်ဟုအမည်ခံကာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်၍ ပြည်သူတို့၏အသက်အိုအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေး၊ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အသင်းအဖွဲ့များအား သက်ဆိုင်ရာများမှ အမြန်ဆုံးကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးရန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“လက်နက်ချအဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအထူးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး နာမည်အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြပါတယ်၊ အခုဟာက နိုင်ရာဇာတို့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့၊ မလွှဲတောင်ပေါ်မှာ မနှစ်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ စိုးသန်းနိုင်တို့လို ၅ ယောက်တစ်ဖွဲ့ ၁၀ ယောက်တစ်ဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လက်နက်ချအလင်းဝင်တွေကို ဂိတ်ဖွင့်ခွင့်ပြုထားတာ တစ်ပုံကြီးရှိနေတယ်၊ ရပ်ရွာတွေမှာ သေနတ်တွေကို နားလည်မှုနဲ့ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားတယ်၊ ချဲဒိုင် ဘောလုံးဒိုင်လိုမျိုး တရားမဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက လစဉ်ကြေးတောင်းတယ်၊ သူတို့ရံပုံငွေဆိုပြီး လောင်းကစားပွဲတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်၊ အကြွေး တွေကို သေနတ်ပြပြီး အငှားလိုက်တောင်းပေးတယ်၊ ရပ်ထဲရွာထဲ အာဏာပြ သေနတ်ပြခြိမ်းခြောက်နေတာကို သူတို့ ဆရာကြီးတွေက မျက်စိမှိတ်ပေးထားလို့ရပေမယ့် အခုလို လူသတ်တဲ့အဆင့်အထိ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လာရင်တော့ ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူခံရတာပေါ့”ဟု အမည်မဖော်ပြလိုသော ရေးမြို့ပေါ်မှ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း တစ်ဦးက ပြောသည်။
အာယုတောင်ကျေးရွာအုပ်စု စုံနံ့သာကျေးရွာအနီး ခံသင်းတံတားအနီး အခြေစိုက်သည့် မွန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ရာဇာ ဆိုသူက အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် M-16 သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် ခွင့်ပြန်လာသည့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ခရိုင်ကော်မတီဝင် ဗဟိုသုတေသနဌာန ဒုတိယတာဝန်ခံ နိုင်ဇော်လတ်(ခေါ်) နိုင်ဂေးမရော့ သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် အပေါ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့စွဲဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ဇော်လတ် နှင့် နိုင်ရာဇာတို့အဖွဲ့သည် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာအနီးတဝိုက်တွင် အခြေအတင်စကားများခဲ့ကြသည့် အသံများ ကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းနောက် သေနတ်ပစ်ခတ်သံများကြားခဲ့ရကြောင်း၊ နိုင်ရာဇာကိုင်ဆောင်သည့် M-16 အမျိုး အစား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုပ်အလောင်းတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ကျည်ဖူးမှတဆင့် စစ်ဆေး အတည် ပြုနိုင် ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူး နိုင်ခင်အေး တရားလို ပြုလုပ်၍ ရေးမြို့မရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားသဖြင့် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ အမှုကြီးအမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၂၀) ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး တရားခံ နိုင်ရာဇာအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း ရေးမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် အခြေအတင်စကားများပြီးနောက် နိုင်ရာဇာမှ ၎င်းကိုင်ဆောင်ထားသည့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို လီဆယ်၍ ယင်းအစား မိမိတို့၏စခန်းအား လာရောက်ပစ်ခတ်၍ ခုခံပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လက်ဦးမှုရယူကာ လိမ်လည်၍ သတင်းထုတ်ပြန်စေခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ရာမညတိုင်း(မ်) သတင်းအေဂျင်စီကို လီဆယ်၍ သတင်းဖြန့်စေခဲ့ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက သုံးသပ်ထားသည်။“ရာဇာကို မနေ့က ရဲဖမ်းလိုက်ပြီး သူတို့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့လက်နက်တွေကို စစ်တပ်က သိမ်းထားတယ်လို့ကြားတယ်၊ လူသတ်မိတယ်ဆိုတာနဲ့ သတင်းဌာနတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့စခန်းကိုပဲ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဝင်ပစ်သွားသလို သတင်းလွှင့်လိုက်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမှုမှန် ပေါ်သွားပြီဆိုတော့ သူတို့ငြင်းလို့မရတော့ဘူး”ဟု အထက်ပါ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းက ဆက်ပြော သည်။ ပြည်သူ့စစ်အများစုသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များဖြစ်ကြပြီး ရပ်ရွာကာကွယ်ရေး ပြည်သူ့စစ်၊ တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် စသည့်ပုံစံမျိုးစုံနှင့် ရပ်တည်နေကြကြောင်း သိရ သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/10/17/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းက လက်နက်ချခဲ့တဲ့ မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဗိုလ်မှူး နိုင်ရာဇာအဖွဲ့ဟာ မွန်ပြည်သူ့စစ်အသွင်နဲ့ ဂိတ်စခန်းချထားတဲ့ မော်လမြိုင်-ရေး ကားလမ်းအနီးနားမှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ရေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူး သိန်းဇော်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“သူတို့ချင်း အချင်းချင်း ဖြစ်ကြတာတွေ၊ ပစ်တာခတ်တာတွေဖြစ်တော့ တစ်ယောက် သေနတ်ထိမှန်ပြီး သေတယ်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက၊ အဲဒါလေးက တပ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီ မလွှဲသေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာတိုင်ချက်လေး တော့ အကြမ်းကောက်ထားတယ်၊ ဥပဒေအရတော့ ဥပဒေနဲ့အညီတော့ ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့၊ တစ်ဖက်ကတော့ မွန်အဖွဲ့ တွေပါပဲ။ သူတို့က ပြည်သူ့စစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်က လက်နက်တွေ ထုတ်ပေးထားတာပေါ့၊ ဟိုဘက်က တော့ သူတို့မွန်ဘက်ကလည်း သေနက်ပါတယ်လေ၊ ပစ္စတို၊ ပစ်တာကတော့ အဲသေဆုံးတဲ့သူအဖွဲ့က ပစ်သွားတာ၊ ဒီဘက် က ဗိုလ်မှူး နိုင်ရာဇာအဖွဲ့က မမှန်ဘူး။ မမှန်တော့၊ ဒီဘက်က ပစ်လိုက်တာ မှန်သွားတာ ဒါပဲ”သေဆုံးသူဟာ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ သုတေသနဌာနရဲ့ ဒုတိယ တာဝန်ခံဖြစ်သလို ခရိုင်ကော်မတီဝင်အဆင့် တာဝန်ရှိသူ နိုင်ဇော်လတ် ဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ရေးမြို့နယ်ထဲက သူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ကော့ဒွတ်ကျေးရွာပြန်ဖို့ အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းက မွန်ပြည်သစ်ပါတီ မှာ ခွင့်ယူထားသူဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် သေဆုံးသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က သေနတ် ဒဏ်ရာအပေါ်မှာ သံသယရှိမိတယ်လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက နိုင်အောင်မငေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ညနဲ့ နောက်နေ့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာ မွန်ပြည်သူ့စစ်ဆိုသူ ဗိုလ်မှူး နိုင်ရာဇာထံ RFA သတင်းဌာနက ဖုန်းဆက်သွယ်ရာမှာ ဖုန်းမကိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ်မှူး နိုင်ရာဇာကို မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပယ်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတော် တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေအနေနဲ့ လိုအပ် သလို အရေးယူနိုင်ကြောင်း မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က ကော့တုံ ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ကြေညာထားပါတယ်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကနေ ခွင့်နဲ့ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ဖို့ လုံးဝ ခွင့်မပြုထားသလို သေဆုံးသူအလောင်းအနီးမှာ ထားရစ်ခဲ့တဲ့9MM အမျိုးအစား လက်နက်ငယ်ဟာလည်း မွန်ပြည်သစ် ပါတီက လက်နက်မဟုတ်ဘူးလို့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသူမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့သေနတ်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီက သေနတ်မဟုတ်တဲ့အပြင် သေနတ်မောင်း မဖြုတ်ထားသလို သေနတ်ကျည်ဆံ ၁၄ လုံး အပြည့်ရှိနေတာနဲ့ သေနတ်ပြောင်းမှာ ယမ်းငွေ့မရှိဘူးလို့ စုံစမ်းသိရှိထားတဲ့အကြောင်း နိုင်အောင်မငေး က ပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ရေးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ နိုင်ဇော်လတ် ရုပ်အလောင်းကို အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဝယ်ဇဉ်တပ်စခန်းကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တနေ့မှာ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/nmsp-member-shot-dead-10182020215014.html
နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားသည့် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တခုလုံးကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်မပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တခုလုံး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့် မပြုသည့်အပေါ် မဖြစ်သင့်ကြောင်း မိုင်းကိုင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းဆိုင်မိုင်း ကပြောသည်။“ကျနော်တို့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ နယ်မြေအခြေနေဆိုး နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲ့တွက်ကြောင့် ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူး။မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ” ဟု စိုင်းဆိုင်မိုင်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။“မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးစေ တယ်။ တကယ်လို့သာ သူ့တို့သာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မဲပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖန်တီးပေးရမယ်။ ရှေ့ဆက် ကျနော်တို့တော့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ တိုင်ပင်နေပါတယ်” ဟု စိုင်းဆိုင်မိုင်း ကပြောသည်။
လက်ရှိ မဲဆွယ်ကာလတွင် RCSS/SSA မှ တအာင်းအမျိုးသားပါတီ (TNP) ကို မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံး မရ အောင် အနှောက်အယှက် ပေး နေကြောင်း လည်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် TNP ဥက္ကဌ မိုင်းနုမ်ဟန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြော သည်။ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး မှ RCSS/SSA အနေဖြင့် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်သည့် နေရာမှာ စည်းကမ်းချက်များ အကန့်အသတ်များ စစ်ဆေးသည့် ကိစ္စများရှိကြောင်း ပြောသည်။“မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ကာလမှာ အဟန့်အတားလုပ်တာ မရှိဘူး။ အဲ့ဒီ ဒေသမှာ အခြေနေ ငြိမ်သက်နေတယ်”ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က ဆို သည်။ အရပ်သားအစိုးရ လက်တက်တွင် သျှမ်းပြည်အပေါ် လက်ရှိပြုမူမှုသည် အရပ်သားအစိုးရကို အယုံအကြည် ကင်းမဲ့ သည့် အနေအထားဖြစ်သွားကြောင်း သျှမ်းပြည်သူများက မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည်။
သျှမ်းပြည် အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်မပြုသည့် မြို့နယ်များမှာ မိုင်းလားမြို့နယ်၊ ပန်ဆန်းမြို့နယ်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ် ၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ် ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တို့ မှ မြို့နယ် တခုလုံးဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ (၁၆)ရက် တွင် ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျောက်မဲမြို့နယ် ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ နမ့်ဆန်မြို့ နယ် ၊မန်တုံမြို့နယ်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မူဆယ်မြို့ နယ်၊ မက်မန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ် ကုန်ကြမ်းမြို့နယ် နှင့် ဟိုပန်မြို့ နယ်တို့မှ ကျေးရွာအုပ်စုများစွာ ကျင်းပခွင့်မပြုကြောင်းလည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ https://burmese.shannew s.org/archives/18933
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကေ ကျေးရွာမှ မူလတန်းပြ ကျောင်းဆရာ ၁ ဦး သည် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက လက်နက်ကြီး ထိမှန်၍ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ အသက် ၂၀ အရွယ် မူလတန်းပြ ကျောင်းဆရာ ကိုမျိုးဆက်နိုင်ဦးသည် ရွာအနီးရှိ လယ်ကွင်းတွင် နွားရေတိုက်ရန် သွားရောက်စဉ် လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန် ထိမှန်ခဲ့ကာ ဝဲဘက် မျက်လုံး ဖောက်ထွက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သည့်အတွက် ရသေ့တောင် ဆေးရုံမှ တဆင့် စစ်တွေဆေးရုံသို့ စက်လှေဖြင့် ပို့ဆောင်စဉ် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ဝန်းကျင် အချိန်၌ လမ်းတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရသေ့တောင်ဒေသခံ ကျောင်းဆရာတဦးက “သူက ကျောင်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ မိဘ ကူတဲ့အနေနဲ့ ရွာအနီး မှာ နွားကျောင်းရင်း၊ နွားတွေကို ရေသွားတိုက်တဲ့အခါမှာ လက်နက်ကြီးလာကျတာ။
ဒဏ်ရာက တော်တော်ပြင်းတော့ စစ်တွေဆေးရုံကို သယ်လာတဲ့အချိန် လမ်းမှာပဲ ဆုံးသွားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရသေ့တောင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က “ကျနော်ကို ရွာသားတွေ ပြောပြ တာကတော့ တိုက်ပွဲလည်း မရှိဘူး။ လက်နက်ကြီးက ရသေ့တောင်တပ်ရင်းက ပစ်တာလို့ ပြောတယ်။ လက်နက်ကြီးမှန်တဲ့ ကျောင်းဆရာ ကတော့ မျက်လုံးဖောက်ထွက်ပြီးတော့ ဦးနှောက်ထိသွားပြီးတော့ လမ်းမှာ ဆုံးသွားရှာတယ်” ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီမှ တပ်မတော်သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းအား ဆက်သွယ် ခဲ့ရာ ယနေ့ အဆိုပါ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းများ မရှိသလို မည်သည့် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုမှလည်း မရှိကြောင်း ပြောသည်။ သေဆုံးသွားသူ ကျောင်းဆရာ ကိုမျိုးဆက်နိုင်သည် ကျောက်ဖြူ ပညာရေး ကောလိပ် ကျောင်းဆင်းတဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းသေဆုံးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ မိသားစုနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့် တပ်မတော်၏ လုပ်ရပ်များကို အားပေး အားမြှောက်လုပ်နေသော အစိုးရအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကြောင်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တပ်မတော်နှင့် AA တို့၏ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့် ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် တို့တွင် စစ်ရှောင်အရေအတွက် ၃ သောင်းကျော် ထပ်မံ တိုးပွားလာကာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်များတွင် စစ်ရှောင်အရေအတွက် ၂၂၀၀၀၀ ကျော်ထိ များပြားလာကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်း အရုံး (REC) က အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/ 19/231962.html
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ရာမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ပါတီနဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့က အများဆုံး ကတိပြုထားတယ်လို့ လေ့လာချက် တခုက ဆိုပါ တယ်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မြန်မာ (FEM) အဖွဲ့က လုပ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်မှာ လက်ရှိအာဏာရပါတီ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ခေါင်းစဉ် ၇ ခုထဲက ၁ ခုမှာပဲ တခြားနှိုင်းယှဉ်ပါတီတွေထက် သာလွန်ပြီး ၆ ချက်မှာတော့ သိသိသာသာ ကို လျော့နည်းနေပါတယ်။ အထွေထွေသောလူ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အမုန်းစကား၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက် ရယူဖြန့်ဝေနိုင်ခွင့်နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ခေါင်းစဉ် ၇ ခုအကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေမှာ ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ ဆိုတာကို လေ့လာထားတာပါ။ အန် အယ်လ်ဒီဟာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်း အချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်တို့ကို ဘာကတိမှာပေးမထားဘဲ အမုန်းစကားနဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်တို့ အပေါ်မှာတော့ အားအလွန်နည်းတဲ့ ကတိပေးထားပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကတော့ လူ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တို့ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကိုပဲ ကတိပြုထားပြီး အမုန်းစကားနဲ့ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အားအလွန်နည်းတဲ့ ကတိ၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင် ခွင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးတို့ကို ဘာကတိမှာ မပေးထားပါဘူး။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တို့ကို နိုင်ငံတကာစံမီကတိပေးထားပြီး သတင်းအချက်အလက်ရ ယူပိုင် ခွင့်နဲ့ အမုန်းစကားတို့အပေါ် အသင့်အတင့်ခိုင်မာတဲ့ ကတိကဝတ်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသင့်အတင့်အားနည်းတဲ့ကတိပေးထားပါတယ်။ တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတော်တော်များများဟာ ဒီခေါင်းစဉ်တွေအပေါ် မှာ ကတိပေးထားတာ မရှိကြဘဲ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ လီဆူအမျိုးသား ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ကပဲ တချို့ကို တစိတ်တပိုင်း ကတိပြုထား တာတွေ့ရပါတယ်။
FEM ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်ရတနာသိန်းကလည်း “ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေအကြောင်း ပြည့်စုံတဲ့၊ အချက်အလက်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထားတဲ့၊ ကတိကဝတ် တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြပေးထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကတိ ကဝတ် ပြုထားခြင်း မရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေထံ ပေးပို့ဖို့ပါပဲ။ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေဟာ ရှင်းလင်းသေချာတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ရရှိလိုတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်နိုင်ဘဲ၊ ဝေဝေဝါးဝါး အာမခံချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/417960
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ နမ့်မဟင်ရွာမှာ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးဖို့ ရှိနေတယ်လို့ မြို့နယ်သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီက သိရပါတယ်။
အခု အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတွေထဲမှာ တပ်မတော်နဲ့ RCSS-SSA ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နမ့်မဟင်ရွာမှာတော့ အိမ်ခြေပေါင်း ၃၅ အိမ်ရှိတဲ့ နမ့်မဟင်ရွာမှာ အိမ်တိုင်းနီးပါး ပျက်စီးနေတဲ့အပြင် နေအိမ်တွင်း ပစ္စည်းတွေပါ ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးတာတွေ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွဲ၊ နွားတွေလည်း သေဆုံး ခဲ့တာ ကြက်၊ ဝက် ပျောက်ဆုံးတာတွေအားလုံး စာရင်းပြုစုခိုင်းထားပြီး ဘေးစီမံကော်မတီက အလုံးစုံမဟုတ်တောင် အတတ် နိုင်ဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးကာ ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ မြို့နယ်သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် ကိုသားဇော် က ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို လှူဒါန်းဖို့သွားရင်း နမ့်မဟင်ရွာကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ တပ်မတော်က ရှိနေတာကြောင့် ဝင်ခွင့်မသာခဲ့ပါဘူးလို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ တာဝန်ကျလုံခြုံရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ အခုမှ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနစ်နာမှုအတွက် သူတို့အနေနဲ့ ကျပ် ၃ သိန်း ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးပြီလို့ ကိုသားဇော်က ဆိုပါတယ်။ တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကြီးထိမှန်ကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေကိုလည်း ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေးစေ ချင်တယ်လို့ ကျောက်မဲဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးတိုက်နယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လက်ကျန်စစ်ဘေးရှောင် ၁,၀၀၀ လောက်ခိုလှုံနေကြပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archiv es/417861
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာအတွက် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ကရင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေမှာ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့စာရင်းအရ ၁၀ သိန်းခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သူ ကရင်အမျိုးသားပါတီ -KNPမှ မန်းမင်းရဲထွေးက “ တိုင်း ကော်မရှင်ကို ဒီနေ့ စုံစမ်းကြည့်တော့ အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ စာရင်းအရ ကရင်ရေးရာ မဲဆန္ဒရှင် က စုစုပေါင်း (၉၉၉,၅၃၁) ဦးလို့ သိရတယ်။ အချုပ်ကတော့ မလာသေးဘူး။ အတိုး အလျှော့တော့ရှိမယ်။ အတိုးနည်းနည်း အဆုတ်နည်းနည်းပါပဲတဲ့။ ၁၀ သိန်းလောက် တော့ဖြစ် ကောင်းဖြစ် သွားနိုင်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ထို့အပြင် ၎င်း ရရှိထားသည့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ စာရင်းများအရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ကရင်လူမျိုးအများစုနေ ထိုင်ရာ မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ပန်းတနော်တွင် ကရင်မဲဆန္ဒရှင် ၁ သိန်းကျော်၊ ၀ါးခယ်မ ၉၂,၀၀၀ ကျော်၊ မြောင်းမြ ၈၅,၀၀၀ ထောင်ကျော်၊ ကျုံပျော် ၈၁,၀၀၀ ထောင်ကျော်၊ အိမ်မဲ ၇၅,၀၀၀ ကျော်၊ ညောင်တုန်း ၆၇,၀၀၀ ကျော်၊ ငပုတော ၆၅,၀၀၀ ကျော်၊ ကန်ကြီးထောင့် ၆၂,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု အကြမ်း ဖျင်း သိရှိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို ဇူလိုင် ၂၅ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိကို နောက်ဆုံး အကြိမ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် ၎င်းကာလအတွင်း မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေအပြောင်းအလဲအနည်းငယ် ရှိနိုင်သည်ဟုလည်း ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ အတွင်း ရေးမှူး ဦးမြင့်နိုင်ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ပထမအကြိမ် ကရင်ရေးရာ မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်းမှာ( ၉၈၆,၉၈၄ )ဦးရှိသည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူထားသည့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၆ မြို့နယ်ရှိသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကရင်အပါအ၀င် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆,၁၈၄,၈၂၉ (ခြောက်သန်း) ကျော် ဦးရှိသည်ဟု သိရပြီး လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကရင်ရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆ ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံမည်လည်း ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%a7%e1%80 %9b%e1%80%ac%e1 %81%80%e1%80%90%e1%8
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် နေရာများ သတ်မှတ်ခြင်းကို နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လုံခြုံရေးအပေါ် မူတည်ကာ သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကချင်ပြည်နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲရုံး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ခိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဦးထွန်းအောင်ခိုင်က “ဒီတိုင်း စိတ်ကူးနဲ့ ထည့်ချင်ထည့်၊ မထည့်ချင် မထည့်ဘူးဆိုပြီး ဘလချီးနန်းလုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်ကျေးရွာအုပ်စုလဲပြောရင် ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာ ပြောပြလို့ရတယ်။ ဝေဖန်တာက သူတို့အလုပ်ပဲ။ ထင်ကြေး နဲ့ လျှောက်ပြီး ဝေဖန် နေတာ ထင်ရာမြင်ရာပဲ။ တိတိကျကျပြောဆို ထွက်မလာတော့ဘူး။ တို့ လုပ်ထားတာက သေချာ စီစစ်ပြီး လုပ်ထားတာ”ဟု ပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ သတ်မှတ်ရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) က အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ အလိုက် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် စာရင်းများကို တောင်းပြီး သုံးသပ်ကာ ကြေငြာခြင်း ဖြစ်ပါ သည်ဟု ဦးထွန်းအောင်ခိုင်က ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် နေရာများမှာ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၁ စု၊ ဆွမ်ပရာ ဘွမ် မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၁ စု၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃ စု၊ ဆော့လော်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၈ စု၊ ချီဖွေမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၉ စု၊ မချမ်းဘောမြို့နယ်မှကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ စု၊ မိုးမောက်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၁ စု၊ ရွှေကူမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၉ အုပ်စု ၊ မံစီမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၂ စု၊ တနိုင်းမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၂ စု နှင့် ခေါန်လန်ဖူးမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၁ စု တို့ဖြစ်သည်။ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဂဲနက်စ်က “၁၃ နေရာမှာ ၈ နေရာ၊ ၉ နေရာက ရွာပျက်တွေ လူမရှိတဲ့ နေရာတွေလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ ပုံစံအတိုင်း သတ်မှတ်ပြီး ဖျက်ချသွားတာက အေးချမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့ နေရာတွေ ၃ ခု ၊ ၄ ခု ပါသွားတော့ နေထိုင်တဲ့ လူဦးရေတွေ မဲပေးနိုင်တဲ့ လူဦးရေက ရာဂဏန်းရှိပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ဆို ဇီးကျွန်း၊ စန်ပိုင်ပါသွားပါတယ်။ မဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော် နစ်နာသွားပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ တဦးဖြစ်ပြီး ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက UEC က ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပ နိုင်သည့် နယ်မြေများမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီများ အားကောင်းပြီး အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အား မကောင်းသည့် နယ်မြေများ ဖြစ်သည်ဟု ဝေဖန်သည်။ ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်း က “အခုလို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်တာက အနာဂတ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၊ တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို တင်ဖို့ကတော့ ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ကျနော်တို့ အနာဂတ် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်း အလှမ်းဝေးစေတဲ့ အချက်တွေ ပါပါလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု NLD က လုပ်တဲ့ပုံစံက ကျနော့်အတွက် မနှစ်မြို့စရာ ၊ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြစရာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြော သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/1 7/231847.html
ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းက ကယန်းအမျိုးသားပါတီနဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တီပါတီ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတွေရဲ့ မဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အနောက် ခြမ်းက ဆောင်ဒူရွာက ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးသူတွေဟာ ရပ်ကျေးအဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်း ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်က ပါတီရုံးအဖွဲ့မှူး ခွန်းသောမတ်က ပြောပါတယ်။“ဟုတ်တယ်သူ က ရပ်ကျေးက ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဟုတ်သလို အန်အယ်ဒီပါတီရဲ့ အမာအခံလည်းဟုတ်နေ တယ်ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေ၊ တချို့ရွာသားတွေရဲ့ ပြောစကားအရဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်နေ တယ်ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ဆီမှာတော့ အသံဖိုင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ သက်သေအများကြီးရှိတာပေါ့။ ”
အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခွန်းမြင့်နိုင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်အယ်လ်မာနဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောခူးတလေ (ခ) ပိုးရယ်တို့ရဲ့ ရုပ်ပုံနဲ့ အကြောင်းတွေရေးထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီဆိုင်း ဘုတ်ကို အောက်ခြေကနေ ခုတ်လှဲထားတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရပ်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကို အသိပေး ထားပြီးဖြစ်ပြီး နောက်နောင်ဒါမျိုး တွေမလုပ်မိအောင် တိတိကျကျ သတိပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနဲ့ ကော်မရှင်ဘက်လည်း ရဲအရေးပိုင် အမှုဖြစ်တာကြောင်း ရဲကိုတိုင်ဖို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာသားချင်းဖြစ်တာမို့ အမှုမဖွင့် ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်းဘီထူးက “ ရွေးကောက်ပွဲက ပြိုင်နေတဲ့ဟာတွေ ပြင်းထန်လာတယ်။ ကျနော်တို့နားလည် သလောက်ပြောရရင် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက အခြေအနေတွေကောင်းလာတယ်။ အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ တခြား ပါတီဘက်က ကျနော်တို့ကို ပြိုင်ဖို့ အားနည်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကျနော်တို့ပေါ်မှာ ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်တာတို့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ စီတန်းလှည့်လည်မှုမှာ နှောင့်ယှက်တာတို့၊ ကျနော်တို့ကို တလျှောက်လုံး ထိုးနှက်မှုတွေများလာတယ်လို့ ကျနော်တို့ အတိ အကျတွေ့ထားတာပေါ့နော်။ အဲတော့ အခုလိုမျိုး ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကတော့ အင်မတန်မှ အောက်တန်းကျ တယ်။ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး။” ကယားပြည်နယ်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ ကယား အမျိုးသားပါတီဟာ မဟာမိတ်ပြုလုပ်ထားပြီး ပြည်နယ်အတွင်း မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/417969
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်နဲ့ မိုးညှင်းမြို့နယ်ကို Stay at Home အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့အကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာတွေ ထပ်မံတွေ့ရှိရမှု၊ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိတဲ့အပြင် အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့လည်း ထိတွေ့တာမရှိဘဲ အချိန် တိုအတွင်း လူနာတွေများလာတာကြောင့် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အဆိုပါ မြို့နယ်တွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ပြည်သူ တွေ မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်မှာ နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။ Stay at Home အမိန့်အရ အစိုးရဌာနက နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတွေ ၂ ပတ်ရုံးတက် ၂ ပတ် အိမ်မှာနေပြီး ရုံးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတွေထဲမှာတော့ ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တွေ၊ ဆေးဆိုင်တွေ၊ ရေသန့်နဲ့ နေ့စဉ် တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းစက်ရုံ ဝန်ထမ်းတွေ၊ စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၊ တာဝါတိုင်နဲ့ ဖိုင်ဘာပြုပြင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကလွဲပြီး ကျန်သူတွေ နေအိမ်မှာ နေထိုင်ရမှာပါ။ မဖြစ်မနေ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့အတွက် တအိမ်တယောက်ပဲ ထွက်ဖို့၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းကို တစ်အိမ် နှစ်ယောက်ပဲသွားဖို့၊ အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ကြဖို့တွေ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်ရင် ယာဉ်ပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းနဲ့ နောက်တယောက်၊ ဆေးရုံဆေးခန်း သွားရင် ယာဉ်ပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းနဲ့ နောက် နှစ်ယောက်ထက် မပိုဖို့ စတာတွေကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ အဆိုပါ မြို့နယ် ၂ ခုကနေ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အဆင်ပြေချောမွေ့ရေးအတွက် ကုန်တင်ယာဉ်တွေ သွားလာမှု စံသတ်မှတ်ချက် ( SOP) အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာပါ။
တခြားအရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ သွားလာဖို့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို သတင်းဖို့ ခွင့်ပြုချက်ယူဖို့နဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ သွားလာသူတွေကလွဲပြီး ရပ်ကွက်ပြင်ပမှ လည်းကောင်း ရပ်ကွက် အတွင်းမှလည်းကောင်း ဝင်ထွက်သွားလာတာတွေခွင့်မပြုဖို့လည်း ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက ၁၁ မြို့နယ်ကို Stay at Home အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ အကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ စွဲနဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ http://burm ese.dvb.no/ar chives/418005
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့တွင် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမည့် ပါတီစုံအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ကရင် အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ -KNDP ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၉ ) လူဦးရေသောင်း နှင့်ချီ၍ မြို့တွင်းနှင့် မြို့ပြင် ကျေးရွာများတွင် အင်အားပြလှည့်လည်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
KNDP ပါတီကို အားပေးထောက်ခံဝန်းရံသူများသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက မြဝတီမြို့ရှိ ကရင်ထာဝရနှစ်ကူးကွင်း ၊ ဝှေ့ရှမ်း မဲ့ပလဲ့ရွာ အစရှိသည့် နေရာအသီးသီးတွင် စုရပ်ပြုလုပ်၍ နံနက် ၉နာရီခွဲခန့်က စတင်၍ မော်တော် ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော် ယာဉ် မြောက်များစွာဖြင့် မြဝတီမြို့ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး တလျှောက်နှင့် ကရင်တိုင်းရင်း သားအများစုနေထိုင်ရာ ကျေးရွာ များတွင် လှည့်လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လှည့်လည်ရာတွင် ကရင်အမျိုးသားအလံထောင်၍ ကရင့်အမျိုးသားသီချင်း နှင့် ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ကာ “တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိဖို့ KNDP ပါတီကို မဲပေးစို့” စသည့် စာတမ်းပါ ရှပ်အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်၍ လှည့်လည်ခဲ့ကြသည်။ KNDP ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်းရံ လှည့်လည်သူများ တွင်ပါဝင်သူ တစ်ဦးက “ကျနော်တို့ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိဖို့က ကရင်လူမျိုးမှန်ရင် ကရင်ပါတီကို မဖြစ်မနေ မဲပေးကြ ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကရင်တိုင်းရင်းသားအများစုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဟာ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရှိမှသာ ကရင်ပြည်နယ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်း မွန်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
“ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို အရင်းခံ နားလည်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားရင် ညှိနှိုင်း ကြမယ်၊ အဖြေရှာကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မျှော်လင့် လို့၊ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်လို့”ဟု ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မြဝတီမြို့ နယ် မဲ ဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)တွင် ဝင်ရောက် ရွေးချယ်ခံ မည့် KNDP မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးနောင်က ပြောသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ မြဝတီခရိုင်တွင် ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(KNDP)အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (USDP) ၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP)၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ တိုင်း ရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (NDF)တို့မှ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စား လှယ် လောင်းတို့မှ အသီးသီး ဝင်ရောက်ယှည်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံကြမည် ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%bb%e1%80%99%e1%81%80%e1%80%90%e1%80%ae%e1%8
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံးဝိုးကျေးရွာ ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၁၇)ရက် မနက်ပိုင်းတွင် အရပ်သား နေအိမ်ခြံဝင်းတွင် လက်နက်ကြီး တလုံးထပ်မံ တွေ့ရှိကြောင်း စုံးစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ လက်နက်ကြီးထပ်မံတွေ့ ရှိသည့် နေရာသည် ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရပ်သားနေအိမ်ခြံထဲတွင် လက်နက်ကြီး တလုံးထပ်မံတွေ့ရှိရပြီး၊ ထိုလက်နက်ကြီးတွေ့ရှိသည့်နေအိမ်ကို လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်မတော် မှ စစ်ကြောင်းဝင်နားခဲ့သည့် နေရာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပုံဝိုးကျေးရွာတွင်နေထိုင်သည့် နန်းအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ဟိုနေ့က ဗုံးတွေ့တဲ့ အိမ်နဲ့နီးတယ်။ ဗုံးကတော့ တပ်မတော်တွေရဲ ဗုံး ဘဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အဲနေရာမှာ က တပ်မတော် စစ်တပ်တွေဘဲနေတာ လေ။ တပ်မတော်က ရွာထဲမှာရှိတော့ သျှမ်းတပ်မတော်တွေက လာလိုမရဘူး” ဟု ဒေသခံ နန်းအောင်ကပြောသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ် ပုံဝိုးကျေးရွာအနီးတဝှိက်တွင် အောက်တိုဘာ ၂ရက် မှစတင်ကာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်ထိ သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA)နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ပွဲအတွင်း အစိုးရတပ်မတော် စစ်ကြောင်းများသည် ပုံဝိုးကျေးရွာအတွင်းသို့ တပ်စခန်းချပြီး နေထိုင် ကြသကဲ့သို့ စစ်ကြောင်းများ ဖြတ်သန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နေရာတခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်တွင်လည်း ပုံဝိုးကျေးရွာ အတွင်း အရပ်သားနေအိမ်ခြံဝင်း၌ မိုင်း၊ဗုံး ၂လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများပြောပြချက် အရသိရသည်။“အခုချိန်ထိ ဗုံးကို အဲ့နေရာမှာပဲ ချထားတယ်။ ဘယ်သူမှ သွားမထိရဲသေးဘူး”ဟု ပုံဝိုးဒေသခံ နန်းအောင် ကဆိုသည်။
ယနေ့အချိန်မှာ RCSS/SSAနှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲသည် ငြိမ်သက်နေသဖြင့် ပုံဝိုးကျေးရွာတွင် တိမ်ရှောင် နေထိုင် သည့် စစ်ရှောင် ပြည်သူ ၇၀၀ ကျော်သည် မိမိနေရပ်ကို ပြန်ရန် အတွက် ပြင်ဆင်နေသည် ဟုလည်း သိရသည်။ သို့သော် စစ်ရှောင်များ မိမိနေရပ်ကို ပြန်သည့်အခါ ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးများ၊ ဗုံးများ ရှိနေမည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရ သည်။ စစ်ရေးပြင်းထန်ခဲ့ပြီး စစ်ရှောင် ၃၅၀၀ကျော်ရှိခဲ့သည့် ကျောက်မဲမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ အုပ်စုကို လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၈)ရက် တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်မပြုကြောင်း အောက်တိုဘာ (၁၆)ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives /18938
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသော မြို့နယ်များတွင် တိုက်ပွဲလုံးဝဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသော မြို့နယ်များ ပါဝင်နေခြင်းအပေါ် ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသော မြို့နယ်များကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၆) တွင် ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၉ ခုနှင့် မြို့နယ်အချို့ရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ “ဒီလို ကွက်ကျား လုပ်တယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ မျှတမှုမရှိ။ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်မှာ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ၊ အစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်တယ်”ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်များဖြစ်သည့် ပေါက်တော၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံနှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ထို့ပြင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၄ အုပ်စု၊ အမ်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၂ အုပ်စု၊ စစ်တွေမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စုနှင့် တောင်ကုတ်မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂ အုပ်စု တွင် ‌ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသတွင် နေထိုင်သော ပြည်သူများ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလိုအပ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခြင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အလှမ်းဝေး ကွာစေနိုင်ပြီး မငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ(AFP) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဇောဦးက ပြော သည်။ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ နိုင်ခြေရှိသည့် နေရာများကို ချန်လှပ်ကာ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီနိုင်ခြေရှိ နေရာများတွင် ရွေးကောက်ပွဲရွေးလုပ်သည့် သဘောမျိုးဖြစ်နေသည်ဟုလည်း ဦးကျော်ဇောဦးက ပြောသည်။
မြို့နယ် ၉ ခုနှင့် မြို့နယ်အချို့ရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၉ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၇ နေရာနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၂၀ နေရာ စုစုပေါင်း လွှတ်တော် နေရာ ၃၆ နေရာ လစ်လပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၈ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၉ ဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ် ၄၁ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့က ၆၄ နေရာစီဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ANP ပါတီက ၆၂ နေရာဖြင့် ဒုတိယ အများဆုံး ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၃ သန်းကျော်ရှိပြီး ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ စာရင်းများအရ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁,၆၄၈,၇၃၇ ဦးရှိသည်။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4740
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ် ထမ္မရာဇ်ရပ်ကွက်အတွင်း ယနေ့ ညနေ ၄နာရီခန့်က လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကာ နှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မြောက်ဦးမြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန် ကပြောဆိုသည်။“ထမ္မရာဇ်ရပ်ကွက်မှာ လက်နက်ကြီးကျည်ကျပြီးတော့ ကလေး တစ်ယောက်သေတယ်။ လူကြီး နှစ်ယောက်က ဒဏ်ရာရတယ်။ အခုဆေးရုံမှာ ညနေ ၄နာရီကျော်လောက်က သေဆုံးသွား တဲ့ သူအမည်တော့ ကျွန်တော်လည်းမသိရသေးဘူး။ ဆေးရုံကနေ သိရတာပါ။ ဘယ်ကပစ်တယ်ဆိုတာလည်း သေချာမသိ ဘူး ” ၎င်းကပြောဆိုသည်။
“ ဟုတ်တယ်။ လက်နက်ကြီး တစ်လုံးကျတယ်။ ထမ္မရာဇ်ရပ်ကွက်ကို ကလေးလေးတစ်ယောက်သေသွားတယ်။ အသက် က ၈ နှစ်လို့ပြောတယ်။ ပွဲချင်းပြီးသေသွားတာ ကလေးလေးက ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို ထိတယ်။ ခြေထောက်တွေလည်း တစ်စစီဖြစ်သွားတယ်။ သူ့အဖေလည်း ထိသွားတယ်။ ဆေးရုံမှာရှိတယ်။ မြောက်ဦးဆေးရုံမှာ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း မြောက်ဦးဆေးရုံမှာရှိတယ်။ သူကတော့ အိမ်ဘေးနားကပေါ့။ ခြံထဲကိုကျတာဆိုတော့ နောက်တစ်ယောက် ခြံဘေးကဆို တော့ ထိသွားတာ ကလေးလေးနဲ့ သူ့အဖေကတော့ ခြံဝန်းထဲမှာပေါ့။ သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးလေး အဖေကလည်း ဒဏ်ရာ အခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်။ သူ့အဖေကတော့ လည်ပင်းနဲ့ ခြေထောက်ကိုထိသွားတယ်။ အိမ်ဘေးက အမျိုးသမီးက ဘယ်နား မှာ ထိသွားလည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာမတွေ့လိုက်ရဘူး။ သူက ဒဏ်ရာအခြေအနေမစိုးရိမ်ရဘူး။ သူတို့ နှစ်ဦးကို မြောက်ဦးဆေးရုံမှာ တင်ထားတယ်။ လက်နက်ကြီးကျတဲ့နေရာက မြောက်ဦးမြို့ထဲက ရပ်ကွက်တစ်ခုပဲ ဘယ်က ပစ်မှန်း ကျွန်တော်တို့လည်း မသိဘူး ” ဟု လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ခဲ့သော နေရာသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့သည့် မြောက်ဦးမြို့ ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးကပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် AA ကြား အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ထိုသို့ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ပစ်ခတ်သည်ကို မသိရှိရသော လက်နက်ကြီးကျည်များ လူနေရပ်ကွက် ကျေးရွာများအတွင်းသို့ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် အရပ်သားပြည်သူများ ထိခိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ဟု ဒေသခံများကပြောဆိုသည်။ https://www.khitthitnews. com/2020/10/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်မယ့် တိုင်းရင်းသားပါတီ ထောက်ခံသူတွေဟာ အပြန် အလှန်ဝန်းရံပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မွန် ၊ ကရင် ၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားပါတီ ဝန်းရံသူတွေက အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်နေ့က သထုံမြို့မှာအင်းအားပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ သထုံမြို့နယ်မှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ မရှိပေမယ့် ပအိုဝ်းနဲ့ကရင် ပါတီဝန်းရံသူတွေ အင်အားပြ လှည့်လည်ရာမှာ မွန်ပါတီထောက်ခံသူတွေကဝန်းရံခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို မွန်တိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားပြုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာ မွန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ကရင်နဲ့ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီတွေကို မဲထည့်ပေးခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသားအမတ်တွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးလိုလားချက်တွေကို ရရှိလာမယ်လို့ မွန်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းလှိုင်ထော က ပြောပါတယ်။“သထုံနဲ့ဘီးလင်းမှာ မွန်မပြိုင်ဘူး၊သို့သော်ငြားလည်း ကရင်နဲ့ပအိုဝ်းပြိုင်တယ်၊ သထုံနဲ့ ဘီးလင်းမှာ ရှိကြတဲ့ မွန်တွေ အဲဒီပါတီကို မဲပေးကြဖို့၊ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၀ အတွင်း ၅ နှစ်ကာလမှာ တိုင်းရင်းသားအသံတွေ ပြောနေ သော်လည်း တစ်ပါတီစနစ်ဖြစ်နေတော့ တိုင်းရင်းသားဘယ်လောက်ပဲတောင်းဆို ပယ်ချခံထိတယ်၊ တိုင်းရင်းသားအမတ် တွေ လွှတ်တော်ထဲ များများရောက်ရှိမှ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ရလာမယ်လို့မြင်တယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်‌တွေစုပေါင်းပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီတွေကို လာရောက်ဝန်းရံတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသရာရောက်လို့ အားရကျေနပ်မိတယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ မယှဉ်ပြိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေက မွန်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ကရင်နဲ့ပအိုဝ်းပါတီကိုသာ မဲပေးဖို့နဲ့ ကရင်နဲ့ ပအိုဝ်းပါတီ မယှဉ်ပြိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ မွန်ပါတီကိုသာ မဲပေးကြဖို့ လူငယ် ကွန်ယက်တွေက အပြန်အလှန်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ လက်ရှိအာဏာရပါတီကို တိုင်းရင်းသားအများစုက ဝန်းရံပေးခဲ့ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့ အခွင့်အရေး တော်တော်များများကို လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရလို့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ပိုမိုအားကောင်းလာတာလို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ် သူတွေက ဆိုပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76374
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖာကန့်မြို့နယ်တွင်းရှိ ဗလခကျေးရွာမှ ဒေသခံများအား မဲရုံသီးသန့်ထားရှိပေးရန်တောင်းဆိုထားကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးခွဲမှ သိရသည်။
မဲရုံအမှတ် ၁၀၁ ဖြစ်သော ဗလခကျေးရွာနှင့်တောင်ပြိုကျေးရွာသည် မဲရုံတစ်ရုံသာရှိပြီး ဗလခကျေးရွာမှ ပြည်သူများသည် လက်ရှိ ဖားကန့်တွင် Covid-19 ပိုးတွေ့အများဆုံးဖြစ်သော တောင်ပြိုအထိ မဲသွားပေးရန်အဆင်မပြေသည့်အတွက် တောင်းဆိုထားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။“မဲရုံ ၁၀၁မှာကျတော့ တောင်ပြိုနဲ့ဗလခကျေးရွာ ၂ ရွာက မဲရုံတစ်ရုံထဲမှာဘဲ မဲပေါင်းပေးရမှာဖြစ်။ ဒါပေမယ့် တောင်ပြိုကျေးရွာကကျတော့ ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် Lockdown ချထားတဲ့ ရွာဖြစ်တယ်။ ပိုးတွေ့လူနာလည်း ၄၀ကျော်တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်တဲ့အတွက် ဗလခ ရွာသားတွေက မဲသွားပေးဖို့ကို စိုးရိမ်တဲ့ အခြေနေရှိနေကြတယ်။ ပြီးတော့ ရောဂါကူးစက်မူလည်းမဖြစ်အောင်ပြီးတော့ လက်ရှိချိန်ထိတောင်ပြိုက ဝင်လို့မရသေးတဲ့ အခြေနေဖြစ်နေတဲ့တွက် ဗလခရွာက မဲရံတစ်ရုံခွဲပေးပါဆိုပြီးတောာင်းဆိုလာကြတယ် အဲကြောင့်ကျနော်တို့လည်း တင်ပြ ထားဆဲဖြစ်တယ်။” ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိ ဦးအောင်ကျော်သူကပြောသည်။
လက်ရှိတောင်ပြိုကျေးရွာသည် မဲပေးပိုင်ခွင့်မဲဆန္ဒရှင် ၈၀၀ကျော်ခန့်ရှိပြီး ဗလခကျေးရွာသည် ၁၃၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး(ခွဲ)သို့ မေးမြန်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ထပ်မံတင်ပြထားကြောင်း ပြောသည်။“ဒီဗလခကျေးရွာက တောင်းဆိုချက်ကို ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တင်ပြထားဆဲဖြစ်တယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မဲရုံပေါင်း ၉၁၈ ရုံရှိတယ်။ အဲမဲရုံထပ်တိုးလာရင်တော့ ၉၂၀ ရှိမယ်။” ဟု ကချင်ပြည်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အရာရှိ ဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကပြောသည်။
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအနေဖြင့် မဲပေးရန် စိုးရိမ်မူများစွာ ရှိနေကြသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပေါင်း ၁သိန်း ၈သောင်းကျော်ရှိကာ မဲရုံပေါင်း ၁၀၄ ရှိပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီပေါင်း ၆ ပါတီရှိကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီပေါင်း ၁၉ပါတီရှိကာ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၁၁သိန်းနီးပါးရှိပြီး မဲရုံ ၉၁၈ ရုံရှိသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/18/l2-11/
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေထဲက စစ်ရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာတွေကိုတော့ မဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးအောင် ပြန်လည်စိစစ်ပေးဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံတွေက လိုလားနေကြပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တခုလုံးတွင် ပုံမှန်ပိတ်ပင်ခံနေရတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေထက် အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ကို တိုးမြှင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတိုးမြှင့်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတွေဟာ စစ်ရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေပြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ အနက်ရောင်နယ်မြေတွေ မဟုတ်ပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်တွေ ဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ရှမ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စုမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စိုင်းလှဝင်း က “ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတော့ဘူးဆိုတော့ မသိတဲ့အဝေးကသူတွေက ဦးလေးတို့ ရွာကို အနက်ရောင်နယ်မြေကြီးလို့ ထင်သွားကြမှာ။ တကယ်က အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလဲ အမြဲဝင်ထွက်ရှိနေတာပဲလေ။ အဲတော့ ပါတီတွေအနေနဲ့ပြန်လည်တောင်းဆိုပေးဖို့တော့ မျှော်လင့်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
RCSS အဖွဲ့ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီကို ထောက်ခံသူ တွေများပြားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု မရှိတဲ့မြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာ ပါတီ ၆ ခု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ၅ ပါတီက လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲဆွယ်ခွင့်ရှိခဲ့ပေမဲ့ RCSS အဖွဲ့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် တအာင်း ပအမျိုးသားပါတီ (TNP) ကတော့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ဟမ်းငိုင်းကျေးရွာဒေသခံ စိုင်းပီး က “ဒီမှာက ဘာစစ်ပွဲမှ မရှိဘူး။ အဲဒါကို တမြို့နယ်လုံး မဲမထည့်ရတော့ဘူးဆိုတော့ ဒါသက်သက်ညစ်တာလို့ပဲ ယူဆတယ်။ ပြည်သူလူထုအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ ငဲ့ညှာပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ မိုင်းရှူးမြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ပေမဲ့ နောင်မှာ သီးသန့် ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ ပွဲမှာ မကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်အပြီးမှာမှ ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ပေးပါက အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်တွေဟာ အရေးပါတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာ စောင့်ကြည့်သူတွေက သုံးသပ်လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်း က “မကျင်းပနိုင်တဲ့ နယ်မြေတွေ များသွားတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးတဲ့အချိန်မှာ NLD အနေနဲ့ မဲပြတ်ပြတ်သားသား မနိုင်ဘူးဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းတဲ့နေရာတွေက အရေးပါတယ်လို့ ပြောရမယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/1 0/19/231946.html
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပေး မပေး စဉ်းစားရာတွင် နိုင်ငံရေးအရစွက်ဖက်၍ မစဉ်းစားရန် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လွတ်လပ်ရေး တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုကာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ခြောက်ခုရှိနယ်မြေအချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း မပြုတော့ ကြောင်း ကြေညာခဲ့ရာတွင် ယင်းနယ်မြေများအနက် စစ်ရေးပဋိပက္ခနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ် စရာမရှိသည့် နယ်မြေများ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ထိုသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ကို ပေးတဲ့မပေး တဲ့ ကိစ္စကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ တကယ့်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ စွက်ဖက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဟေ့ ဆိုရင်တော့မှားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုက ပြီးသွားမှာမဟုတ်ပဲ ပြန်ဖြေရှင်းရလည်း တစ်အားခက်တယ်။ ယုံကြည် မှုတွေ လျော့ကျသွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ၂၀၂၁ မှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စီးပွားရေးကိစ္စတွေရှိတယ်။ အခက်အခဲတွေက အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲတွေအများကြီးကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မှ အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မယုံကြည် ဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ညစ်ပတ် တယ်လို့ ထင်ရင် ၂၀၂၁ မှာရင်ဆိုင်ရမှာတွေ က ပိုပြီးအခက်အခဲကြုံလိမ့်မယ်လို့ သတိပေး ချင်တယ်” ဟု ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောကြား သည်။
“လုံခြုံမှုဆိုတာက စစ်ရေးပဋိပက္ခရှိတဲ့ နေရာမှာမလုံခြုံဘူးဆိုတာ တစ်မျိုးပေါ့နော်။ ရန်ကုန်မြို့လိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြဿနာ တွေ ရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ ကျန်းမာရေး ပြဿနာဆိုတာကလည်း COVID-19 လို ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်တဲ့ပြဿနာပါ။ ကူးစက်ခံရတဲ့ သူတွေလည်း ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံစားရတဲ့ အနေအထားပါ။ နောက်ပြီး အသေ အပျောက်တွေလည်း ရှိလာတဲ့ အနေအထားပါ။ ဆိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာမှာကျတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး တော့ လုံခြုံမှုရှိတဲ့ ပေါက်တောလို မျိုး မိုင်းကိုင်လိုစစ်ရေးပဋိပက္ခမရှိတဲ့ နေရာ မျိုးကျတော့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဘူးဆိုတာ UEC ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တာ ပေါ့”ဟု ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/19 5854
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုတွင် အဓိက အသုံးပြုနေသည့် မြဝတီ နယ်စပ် မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားကို ရက်သတ္တပတ် (၁)ပတ်ခန့် ယာယီပိတ်သွားမည်ဟု ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇) ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှ တာဝန်ရှိ သူများက အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်း ထိုင်းဘက်ခြမ်း မဲဆောက်မြို့တွင် Covid- 19 ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးရာတွင် လာရောက် စစ်ဆေး မှုခံယူကြသူများထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံသား(၂) ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းတို့နှင့်အိမ်နီးခြင်း (၉) ဦးအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ တွင်လည်း နောက်ထပ် ၃ ဦးမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည် ရေးတံတားကို ယာယီပိတ်သိမ်းရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု တာ့ခ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr: Pongrat Piromrat က ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မဲဆောက်မြို့ ပိုင်ရုံးခန်း၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်။“ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ အဓိက အသုံးပြုနေတဲ့ မြန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတား ကို မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ဒါမှမဟုတ် ၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ အသုံးပြုခွင့်ပိတ်သွားပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှု အခြေနေအပေါ်မူတည်ပြီး တံတား ဖွင့်မယ့်အချိန်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု တာ့ခ်ခ ရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြဝတီနယ်စပ်တွင် ယခင် ကိုဗစ်ကာလ မတိုင်မီက ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရားဝင်ကုန်သွယ်သွားလာမှု၌ ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည် ရေး တံတား အမှတ်(၁) နှင့် အမှတ် (၂) ဟူ၍ တံတား ၂ စင်းရှိသလို နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြား သောင်ရင်းမြစ် ကမ်းတစ်လျှောက် တရားမဝင် လှေဂိတ် ၃၀ ကျော်မှလည်း ကုန်သွယ်သွားလာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် Covid-19 ရောဂါပိုးမှာ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ဖြစ်ပေါ်လာချိန် ပြီးခဲ့သည့် မတ် ၂၃ ရက် နှင့် ဧပြီလဆန်းပိုင်းခန့်မှစ၍ အမှတ်(၁) တံတားနှင့် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းတလျှောက်ရှိ နယ်စပ်ဂိတ်များ ကို ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ဘဲ ထိုင်း-မြန်မာအမှတ် ၂ တံတားမှသာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ထိုင်းရောက်နေရပ် ပြန် မြန်မာလုပ်သားများအတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ ထိုင်းဘက်ခြမ်း တာဝန်ရှိသူများ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နံနက်ဖြန် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ မြဝတီ နယ်စပ် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ်(၂) ကို ယာယီပိတ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/202 0/10/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်အထိ ၂ လတိတိ ညမထွက်ရအမိန့်ကို မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေ သက်တမ်းတိုး ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ နာရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက် သူတွေကလွဲပြီး ည ၁၂ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်း နေအိမ်ပြင်ပကို ထွက်ခွာတာ၊ စုဝေးတာတွေ မပြုလုပ်ဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
ပထမကို ဗစ်ကာလ ဧပြီလကနေ စက်တင်ဘာလအထိ ညမထွက်ရအမိန့် ဖောက်ဖျက်တဲ့သူ ၁၈၆ ယောက်ကို အရေးယူ ထားပြီး အခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့ စည်းကမ်း မလိုက်နာခဲ့ရင်လည်း အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ရဲမှူး မြင့်မိုး က ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/418035
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ မေလွမ်းရွာအနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့လယ် ၁ နာရီက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်နက်ကြီးကျည်များ ရွာအနီးကျရောက်သဖြင့် ရွာသားများ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးနေကြရသည်ဟု ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ မေလွမ်းရွာသား တစ်ဦးက “ပေါက်ကွဲသံက နေ့လယ် ၁ နာရီလောက်မှာ တောင်ပုတ်ကေရွာ အနီးက ကျောက်ကြီး တောင်ဘက်က ကြားရပါတယ်။ အဲဒီနေရာကို မေလွမ်းကဆိုရင် ၃ ဖာလုံလောက် ဝေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် ပစ်သံကြားရပြီး ရွာအနီးမှာလည်း လာကျတဲ့ အတွက် ရွာသားတွေလည်း ငိုသူငို ပြေးသူ ပြေးနဲ့ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို ထွက်ပြေးကြပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။ ၎င်းရွာသား၏ အပြောအရ တိုင်းဗဟို (၉) ဘက်မှလည်း လက်နက်ကြီးဖြင့်ထုကြောင်း၊ မြစ်ထဲတစ်လုံးကျ၍ ငါးသလောက်ပိုက်မျောနေသူများ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကြကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
“မေလွမ်းရွာဘက်ကို မင်းပြားဘက်ကနေ ကားလမ်းအတိုင်း လာတဲ့ စစ်ကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အေအေနဲ့ ဖြစ်တာနေမှာပါ။ တိတိကျကျတော့ ကျနော် မပြောတတ်ဘူး။ ပေါက်ကွဲသံတွေကြားရပြီး သေနတ်သံတွေဆက်တိုက်ကြား ရပါတယ်။ မေလွမ်းရွာထဲမှာ သက်ရွယ်ကြီးရွယ်အို အနည်းငယ်ကျန်ခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့လူတွေ ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ ထိုသို့ ပစ်ခတ်သံများကို ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြားရပြီး လက်နက်ကြီးကျည်များ ရွာအနီး ကျသော်လည်း ရွာသား များအား ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။ မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က “ ဟို မေလွမ်းရွာနဲ့ သိပ်မဝေးတော့တဲ့ တောင်ပုတ်ကေ ရွာအနီးမှာ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောတယ်။ ရာမောင်းတံတားနဲ့ မေလွမ်းရွာကြားဖြစ်ပေမယ့် မေလွမ်းဘက်ကို နီးသွားပါပြီ။ မေလွမ်းရွာထဲက အိမ်ခေါင်မိုးတွေကို ကျည်ဆံ လာထိတဲ့အတွက် ရွာသားတွေက ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးကြရတယ်လို့တော့ ရွာသားတွေ အကြောင်းကြားလာပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မင်းပြားမြို့နယ် မေလွမ်းရွာအနီးဝန်းကျင်တွင် တောတောင်များ ထူထပ်ပြီး တောင်ချိုင်များလည်း များသဖြင့် အဆိုပါ ရွာမြောက်ဘက် ကားလမ်းပေါ်တွင် မကြာခဏ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းသို့ ယနေ့ ညနေပိုင်း ၆ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ဝန်းကျင်ခန့်က ဖုန်းသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုသော်လည်း ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ https://www.bnionline.net/ mm/news-76347
ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းခုတ်မြို့မှာ မနေ့ ညနေပိုင်းက ကျပ်သိန်း ၈၀၀၀ လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိုက်စ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို သယ်လာသူမမိဘဲ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မနေ့ ညနေပိုင်းက မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မိုင်းခုတ်မြို့၊ မိုင်းဆတ်-ကျိုင်းတုံ ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၉၆ ကီလိုမီတာနားမှာ မသင်္ကာဖွယ် မော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးဖို့ ရပ်တန့်ခိုင်းတာမှာ မော်တော်ယာဉ်ဟာ လမ်းရဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ တံတားအုတ်ခုံကို ဝင်တိုက်မိပြီး ရပ်တန့်သွားတယ်လို့ ပြည်ထဲရေးသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကားပေါ်မှာပါလာသူ ၂ ယောက်ကတော့ လမ်းဘယ်ဘက် လျှိုထဲကို ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် ကားပေါ်ကို ရှာဖွေရာမှာ ဆာလာအိတ်တွေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ငွေကျပ်သိန်း ၇၈၀၀ တန်ဖိုးရှိ အိုက်စ် ၃၉ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ http://burmese.dvb.n o/archives/417868
နှင်းဆီပါတီဟု လူသိများကြသည့် ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) ဖျက်သိမ်းခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) ထံ စာပို့ကန့်ကွက်သွားမည်ဟု ပါတီ ဗဟိုတွဲဖက်အတွင်းရေး မှူး ဦးသိုက်ထွဏ်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ နှင်းဆီပါတီကို ဖျက်သိမ်းသည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၃၁ ဦးကိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့် ထောင်ပြေးမှုဖြင့် အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု များလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပါတီ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ နှင်းဆီပါတီသည် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)၊ (ဂ)၊ (စ) တို့နှင့် ငြိစွန်းနေခြင်းကြောင့် ဖျက်သိမ်း သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာထားသည်။ နှင်းဆီပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖော်ပြသည့် အချက်များနှင့် မငြိစွန်းသောကြောင့် စာပို့ကန့်ကွက် တုံ့ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးသိုက်ထွဏ်းက ပြောသည်။“ကျွန်တော်တို့ကတော့ လောလာဆယ် UEC ကို စာပို့ပါမယ်။ သူတို့ရဲ့ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ လုပ်တာအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ လက်မခံပါဘူးဆိုတဲ့ ကြေညာစာတမ်း ပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်။ ထုတ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် လိုအပ်လို့ရှိရင် UEC ကို တစ်နိုင်ငံလုံးကနေ တရားစွဲမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်သဖြင့် တရားပြန်စွဲ ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းပေးစဉ်က သွင်းငွေကိုသာ ပြန်တောင်းနိုင်ကြောင်း တရားလွှတ် တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က ဆိုသည်။ “ငွေကိုပြန်ထုတ်ပေးပါ၊ ကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သွင်းထားတာပါဆိုပြီး UEC တော့ သူတို့ပြောပေါ့။ အဲဒီလို မဟုတ်လို့ တရားရုံးကနေ တရားစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ရာဇဝတ်မှုတော့ မစွဲနိုင်ဘူး။ ငွေပြန်ရလိုမှု တရား မကြောင်း အရပဲ ရမယ်လို့ထင်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပါတီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လည်း ပါတီဆိုင်းဘုတ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်းဘုတ်များကို လက်ရှိတွင် ဖြုတ်ချဦးမည် မဟုတ် ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို စောင့်နေကြောင်းလည်း နှင်းဆီပါတီက ပြော သည်။ လမ်းပေါ် ထွက် ဆန္ဒပြခြင်း၊ လူစုလူဝေး ပြုလုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် နှင်းဆီပါတီဝင် ခြောက်သောင်းကျော်ကို မေတ္တာရပ်ခံ ထားကြောင်း လည်း သိရသည်။ နှင်းဆီပါတီကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် စတင် မှတ်ပုံတင် ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တစ်နေရာမျှ အနိုင်ရရှိခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ထောင်ကျော်အထိ ရှိလာခဲ့သည်။ http://www.mizzimaburmese.com/articl e/74614
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရက်ပေါင်း ၄၀ ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)မှ စိုက်ထူထားသည့် အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ၈ ခုထိ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း ANP ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။ ANP အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရသည့် မြို့နယ်များမှာ တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် ၄ ခု၊ အမ်းမြို့နယ်တွင် ၂ ခု၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ရဲယု ကျေးရွာ တွင် ၁ ခု၊ စစ်တွေမြို့ သံဖရာသီးခွဆုံတွင် ၁ ခုတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလ ဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှစပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ANP ပါတီအောင် နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ၈ ခုထိ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ANP ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးကျော်ဝင်းချေက “ကျနော် တို့က တကယ့်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သက်သက်မဲ့ အတိုက်အခံပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာဖြစ်ဖြစ်၊ လူတစ်ယောက် ချင်းရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအရ ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ အရေးယူသွားဖို့ စဉ်းစားထားတာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပါတီတစ်ခုခုက ဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လာရင်တော့ အရေးယူသွားဖို့ စဉ်းစားထားတယ်” ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ANP အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် အမှုဖွင့် အရေးယူရန်လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ဦးကျော်ဝင်းချေက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခြင်းကို လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟု ANP ပါတီ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် စစ်တွေမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြော သည်။“ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖျက်ဆီးတာဟာ ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားတဲ့လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ ဒီလိုဖျက်ဆီးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်မှာ မဟုတ် ဘူး။ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံရေးအရပဲ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုက အခွင့်အရေးလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်၊ကိုယ့်မကြိုက်တာကို ဒီလိုဖျက်ဆီးဖို့မလိုဘဲ မဲ ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်မကြိုက်တဲ့သူကို မရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်း နိုင်ငံသားတိုင်းမှာရှိတယ်” ဟု သူကဆို သည်။
ယင်းအပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD) မှ စိုက်ထူထားသည့် အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခံရမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး တောင်ကုတ်၊မြေပုံ၊မာန်အောင်၊စစ်တွေ၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တို့တွင် စိုက်ထူထားသည့် အောင်နိုင် ရေးဆိုင်းဘုတ် အနည်းဆုံး ၁၅ ခုခန့် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ကာလကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီမှ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၁၂ နာရီအချိန်ထိ ရက်ပေါင်း ၆၀ ခွင့်ပြုကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေငြာထားသည်။ https://www.b nionline.net/mm/news-76344
၁။ တိုငျးရငျးသားမြား မဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးစရေနျ ပေါငျးစညျး တိုငျးရငျးသား ၅ ပါတီ သဘောထားထုတျပွနျ
၂။ NLD ကိုယျစားလှယျလောငျး သုံးဦးကို ဖမျးဆီးထားကွောငျး AA ထုတျပွနျ
၃။ မူဆယျ SNLD ပါတီ စညျးရုံးရေး ကား ရှလေီမွဈထဲကြ ၃ဦး သဆေုံး၊ကလေးတဦးပြောကျဆုံးနဆေဲ
၄။ စဈတှမွေို့၌ ပွုလုပျသညျ့ဆန်ဒပွပှဲတှငျ ဦးဆောငျကြောငျးသားအခြို့ ဖမျးဆီးခံရ
၅။ KPP ဝနျးရံသူ ၂,၀၀၀ ခနျ့ ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျအတှငျး လှညျ့လညျအငျအားပွ
၆။ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ပတျသကျပွီး KBC ဥက်ကဌ ဖွငျ့တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး
၇။ ပလကျဝမွို့တှငျ ဒသေခံနှဈဦးဖမျးဆီးခံရ
၈။ ပွညျသူတို့ကိုခွိမျးခွောကျနသေော လကျနကျကိုငျပွညျသူ့စဈအမညျခံ လူပုဂ်ဂိုလျ၊ အဖှဲ့အစညျးတို့ကို သကျဆိုငျရာမှ အမွနျဆုံးကိုယျတှယျဖွရှေငျးပေးသငျ့ကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီ ကွညောခကျြထုတျ
၉။ မှနျပွညျသဈပါတီ အဖှဲ့ဝငျတဈဦး ပဈခတျခံရပွီး သဆေုံး
၁၀။ နယျမွတေညျငွိမျသညျ့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့မပွု
၁၁။ ရသတေ့ောငျမွို့နယျတှငျ ကြောငျးဆရာ ၁ ဦး လကျနကျကွီး ထိမှနျ သဆေုံး
၁၂။ လှတျလပျခှငျ့ဆိုငျရာ ရှေးကောကျပှဲကတိကဝတျမြား
၁၃။ ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျ တိုကျပှဲကွောငျ့ ပကျြစီးခဲ့သညျ့နအေိမျမြားကို ပွနျပွငျပေးမညျ
၁၄။ ဧရာဝတီတိုငျးအတှငျး ကရငျရေးရာ မဲဆန်ဒရှငျ ၁၀ သိနျးခနျ့ရှိ
၁၅။ ကခငျြပွညျနယျက ကြေးရှာအုပျစု ၁၉၂ စု ဘာကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပလဲ
၁၆။ ဒီးမော့ဆိုတှငျ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီ ၂ ခု၏ ဆိုငျးဘုတျဖကျြဆီးခံရ
၁၇။ ဖားကနျ့နှငျ့ မိုးညှငျးတှငျ Stay at Home အမိနျ့ထုတျပွနျ
၁၈။ မွဝတီမွို့တှငျ KNDP ပါတီအောငျနိုငျရေးအတှကျ လူဦးရသေောငျးခြီ၍ အငျအားပွလှညျ့လညျ
၁၉။ ကြောကျမဲမွို့နယျ လူထုနအေိမျဝငျးထဲ ဗုံး/မိုငျး (၁) လုံးထပျမံ တှရှေိ့
၂၀။ တိုကျပှဲမဖွဈသညျ့မွို့နယျမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပခွငျး လကျခံနိုငျစရာမရှိဟုဆို
၂၁။ မွောကျဦးတှငျ လကျနကျကွီးကညျြထိမှနျ၍ ကလေးငယျ ၁ ဦးပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးပွီး ၂ ဦးဒဏျရာရ
၂၂။ တိုငျးရငျးသားပါတီ ထောကျခံသူတှေ အပွနျအလှနျ ဝနျးရံပွီး မဲဆှယျစညျးရုံး
၂၃။ Covid-19 ကွောငျ့ ဖားကနျ့တှငျ မဲရုံထပျတိုးပေးရနျ တောငျးဆို
၂၄။ ပဋိပက်ခမဖွဈတဲ့ ရှမျးပွညျနယျက မဲဆန်ဒနယျတခြို့ကို မဲပေးခှငျ့ပွုဖို့ တောငျးဆို
၂၅။ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ ပေး မပေး စဉျးစားရာတှငျ နိုငျငံရေးအရ စှကျဖကျ၍ မစဉျးစားရနျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) ပါတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ (၁) ပွောကွား
၂၆။ မွဝတီနယျစပျ မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ(၂)တံတား ယာယီပိတျသှားရနျ စီစဉျ
၂၇။ မွဈကွီးနားတှငျ ဒီဇငျဘာလအထိ ညမထှကျရအမိနျ့ ထုတျပွနျ
၂၈။ မငျးပွားမလှေမျးရှာအနီးတိုကျပှဲဖွဈ၊ ရှာအနီးကညျြကြ၍ ရှာသားမြားကွောကျလနျ့ထှကျပွေး
၂၉။ မိုငျးခုတျတှငျ ကပျြသိနျး ၈၀၀၀ ခနျ့တနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးမြား သယျသူမမိဘဲ သိမျးဆညျးရမိ
၃၀။ ပါတီဖကျြသိမျးခံရမှု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျထံ နှငျးဆီပါတီ စာပို့ကနျ့ကှကျမညျ
၃၁။ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလအတှငျး ANP ပါတီ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရမှု ၈ ခုထိရှိလာ
ရှေးကောကျပှဲကငျြးပပွုလုပျနိုငျခွရှေိသညျ့ဒသေမှ တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြား မဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးရေးအတှကျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ(UEC)အနဖွေငျ့ ပွနျလညျသုံးသပျ ပွငျဆငျပေးရနျ ပေါငျးစညျးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသား ၅ ပါတီက အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ ပူးတှဲသဘောထားထုတျပွနျလိုကျသညျ။ UEC မှ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ ထုတျပွနျခဲ့သော ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခွငျးမပွုမညျ့ နယျမွမြေားစာရငျး ထုတျပွနျကွငွောခဲ့အပွီး ၎င်းငျးတို့မှ ယခုလို သဘောထားထုတျပွနျရခွငျးဖွဈကွောငျး ကရငျအမြိုး သား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDP ဥက်ကဋ်ဌက ပွောသညျ။ KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက “ကရငျ(ပွညျနယျ)မှာက ယခငျပိတျထားတဲ့ မဲဆန်ဒနယျကိုပဲ ထပျပိတျလိုကျ တော့ သိပျပွောစရာမရှိဘူး။ ရခိုငျ၊ ရှမျးတို့မှာ ပိုပိုပွီး ပိတျလာတဲ့အခါ မဲဆန်ဒရှငျတှရေဲ့ မဲပေးခှငျ့ ရရှိရေးအတှကျ သဘောထားထုတျပွနျရခွငျးဖွဈတယျ။” ဟု အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျတှငျ ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ သဘောထား ထုတျပွနျထားသညျ့ ပွညျနယျ ၅ ခုမှ ပေါငျးစညျး ပါတီမြားမှာ ကရငျပွညျနယျမှ KNDP၊ KSPP-က ခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ၊ KySDP-ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ CNLD-ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုက ရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ၊ MUP-မှနျညီညှတျ ရေးပါတီတို့ဖွဈသညျ။
KSPP ဒုဥက်ကဋ်ဌ (၂) ကှမျဂရောငျအောငျခမျးကလညျး “ကနြျောတို့ ကခငျြမှာ ကြေးရှာအုပျစုတှလေောကျပဲ ဖကျြသိမျးတာဖွဈ တယျ။ ရခိုငျမှာဆို ၉ မွို့နယျတောငျ ဖကျြသိမျးတော့ နောကျဆကျတှဲပွဿနာတှအေမြားကွီး ဖွဈ လာနိုငျတယျ။ ဒါကို အမွနျဆုံးပွညျလညျပွငျဆငျပွီးမှ ရှေးကောကျပှဲကို လုပျစခေငျြပါတယျ။” ဟုပွောသညျ။ UEC မှ ယခုလိုလုပျလိုကျခွငျးအား ဖွငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး၊ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေး၊ တရားမြှတရေး၊ ဖကျဒရယျနိုငျငံတညျဆောကျရေး၊ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေးတို့တှငျ ထိခိုကျလာနိုငျကွောငျးလညျး ကှမျဂရောငျအောငျခမျးက ပွောသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ(UEC)တာဝနျရှိသူကို ကအေိုငျစီမှ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့သျောလညျး ဖွကွေားရနျ မအားလပျသေးကွောငျး ပွနျလညျ ပွောဆိုသညျ။
ထို့အပွငျ နိုငျငံသားတိုငျးတနျးတူ အခှငျ့အရေးရရှိပွီး လှတျတျောနိုငျငံရေးတှငျ ပါဝငျခှငျ့ ရစသေညျ့နညျးလမျးဖွငျ့ နိုငျငံရေး ဘောငျကို ခြဲ့ထှငျရနျ မဖွဈမနလေိုအပျနသေညျ့ အနအေထားတှငျ UEC ၏ ထုတျပွနျခကျြသညျ ရှေး ကောကျပှဲ ကငျြးပခွငျး မပွုမညျ့ နယျမွမြေားမှ တိုငျးရငျးသားမြားအား လှတျတျောပွငျပနိုငျငံရေးနညျးလမျးမြား ရှေးခယျြလာစရေနျ တှနျးပို့ရာရောကျ သညျကို ရှုမွငျပါသညျဟု ထပျမံပါရှိသညျ။ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျအတှငျးရှိ အခွစေိုကျ တိုငျးရငျသားပါတီ အမြားအပွား ရှုံးနိမျ့မှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့ပွီးနောကျ ကခငျြ၊ ကယား၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ မှနျပွညျနယျမြားရှိ ပါတီအမြားအပွားမှာ သကျဆိုငျရာပွညျနယျ၌ တဈ ပါတီတညျးအဖွဈ ပွနျလညျပူးပေါငျးလိုကျသလို အဆိုပါ ပေါငျးစညျးပါတီ ၅ ပါတီမှာလညျး အတူတကှ လကျတှဲဆောငျရှကျနသေညျဟု သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80% 90%e1%80%ad %e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့နယျမှာ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးသုံးဦးကို ဖမျးဆီးထားကွောငျး ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA က ထုတျပွနျ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ ဒီကိုယျစားလှယျလောငျးသုံးဦးကို အောကျတိုဘာ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ အမညျမသိ လကျနကျကိုငျလူတဈစုက ရိုကျနှကျ ဖမျးဆီး သှားခဲ့အပွီး ငါးရကျအကွာမှာ AA က အခုလို ဝနျခံပွောကွားလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျညပိုငျးက ထုတျပွနျတဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ရဲ့ ကွညောခကျြမှာ… NLD အစိုးရ အနနေဲ့ ဖမျးဆီး ထားတဲ့ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ အပွဈမဲ့ပွညျသူတှေ၊ ကြောငျးသားတှေ ပွနျလှတျပေးမယျဆိုရငျ ဒီအမတျလောငျး သုံးယောကျ ကိုလညျး ပွနျလှတျပေးမယျလို့ AA က ဒီကနထေု့တျပွနျတဲ့ ကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားတာပါ။ AA အနနေဲ့ စဈသုံ့ပနျး လဲ လှယျရေးမူကို ဆကျပွီးဆုပျကိုငျထားတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ဒီကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဖမျးဆီးထားတာနဲ့ ပတျသကျပွီး AA အဖှဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးခိုငျသုခကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျး ရာမှာ… NLD အစိုးရဟာ ရခိုငျ့ တပျတျော ကို အမွတျဖွတျခမြှေုနျးဖို့နဲ့ ရခိုငျမှာ အစိုးရတပျမတျောက စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျနိုငျအောငျ အမိနျ့ပေးနေ ကွောငျး၊ နိုငျငံတကာက မွနျမာ့တပျမတျောအပျေါ အရေးမယူနိုငျအောငျ NLD အစိုးရက အကာအကှယျ ပေးနကွေောငျး၊ ကိုဗဈကာလမှာ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး နိုငျငံရေးအမွတျထုတျဖို့ NLD အစိုးရက လုပျဆောငျနကွေောငျး ဒါကွောငျ့ ဒီကိုယျ စားလှယျတှကေို ဖမျးဆီး စဈဆေးနဆေဲဖွဈပွီး လိုအပျတဲ့ အခွအေနတေဈခုအထိ ထိနျးသိမျးထားမှာဖွဈကွောငျး RFA ကို ပွောပါတယျ။
AA အဖှဲ့ရဲ့ ပွောဆိုခကျြနဲ့ပတျသကျလို့ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာ ပါတီ ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့က… ဒီလို စဈသုံ့ပနျး လဲလှယျမယျဆိုတဲ့ ကမျးလှမျးခကျြကို လကျခံဖို့ ခကျခဲသလို၊ တပျမတျော ကို NLD အစိုးရက အမိနျ့ပေး စခေိုငျးနတေယျဆိုတဲ့ AA ရဲ့စှပျစှဲခကျြကို ငွငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ ရခိုငျ့တပျတျော AA ဘကျက ပွောဆိုခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့တာဝနျရှိသူတှကေို RFA က ဆကျသှယျ မေးမွနျး နပေမေယျ့ အခုထိ ဆကျသှယျလို့ မရသေးပါဘူး။ အလားတူ သမ်မတရုံး ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေး ကို RFA က မေးမွနျး ထားပမေယျ့ ပွနျလညျဖွဆေိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
တောငျကုတျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောနရောအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒျေါနီနီမမွေငျ့၊ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါခဈြခဈြခြောနဲ့ ပွညျနယျလှတျတျောအတှကျ ယှဉျပွိုငျမယျ့ ဦးမငျးအောငျတို့ သုံးဦး တောငျကုတျ မွို့နယျ ဖောငျးခါးကြေးရှာမှာ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးနခြေိနျ အောကျတိုဘာလ (၁၄) ရကျနမှေ့ာ လကျနကျကိုငျထားတဲ့ AA တပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဖမျးဆီးသှားပွီးနောကျ AA က ဒီကနမှေ့ာ တရားဝငျ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-detains-toungup-nld-10192020090901.html
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့ တှငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ကားတဈစီး ရှလေီမွဈထဲသို့ ထိုးကပြွီး အမြိုးသမီး ၃ ဦး သဆေုံးကာ၊ ကလေးတဦး ပြောကျဆုံးနဆေဲဟု သိရသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ ယနေ့ (အောကျတိုဘာ ၁၈)ရကျ မနကျ ၉ နာရီ တှငျ မူဆယျမွို့ ဖိုငျကြောငျးကြေးရှာ နောငျဟငျလှဆေိပျတှငျ ကားတစီး ရှလေီမွဈ ထဲသို့ ထိုးကကြာ စညျးရုံးရေး ခရီးစဉျ လိုကျပါသှားသညျ့ အမြိုးသမီး (၃)ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး၊ ကလေးငယျတဦး ယခုခြိနျထိ ပြောကျဆုံးနဆေဲဟု SNLD မှ ပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးကြျောသိနျး က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ အဆိုပါကားသညျ (SNLD) နှငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို လိုကျပါ အားဖွညျ့ပေးသညျ့ ကား ဖွဈသညျ။
ထိုကားပျေါတှငျ လူ(၇) ပါရှိကာ ၃ ဦး အသကျရှငျပွီး၊ အမြိုးသမီး ၃ ဦး ရုပျအလောငျးကို ပွနျလညျ ဆယျယူလာနိုငျခဲ့ပွီး ကလေးကို ရှာဖှမေတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး စိုငျးကြျောသိနျး က ပွောသညျ။“ ပွုတျကသြှားတဲ့ခြိနျမှာ (၃) ယောကျကတော့ ထှကျ လာနိုငျတယျ။ ကနြျောဝိုငျးပွီးတော့ ကယျကွတယျ။ ကနျြတာက (၃) ယောကျသဆေုံးသှားပွီး ကလေးငယျ တဈဦး ပြောကျ ဆုံးနတေယျ”ဟု စိုငျးကြျောသိနျးက ပွောသညျ။ လကျရှိပြောကျဆုံးနသေညျ့ ကလေးငယျသညျ အသကျ (၅)နှဈ အရှယျ သာ ရှိသေးကွောငျးသိရသညျ။
ဆကျလကျပွီး စိုငျးကြျောသိနျးက “ စကျလှကေ ဟိုဖကျမှာရှိနတော။ ဒီဖကျမှာ ကနြျောတို့ ကား ၃ စီးကရပျထားတယျ။ စကျလှေ စောငျ့နတော။ အဲဒါကို ဒီဖကျကနကြေျောတကျသှားပွီးတော့ ရထေဲထိုးကသြှားတဲ့ သဘောဖွဈသှားတယျ” ဟု ပွောပွသညျ။ အမြိုးသမီး (၃)ဦး၏ ရုပျအလောငျးကို မူဆယျမွို့ပွညျသူဆေးရုံ ရငျခှဲရုံသို့ ပို့ဆောငျထားကွောငျး ဂရုဏာ လူမှုကူညီရေး အသငျးမှ ဦးသောငျးထှနျးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ SNLD မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကား ပါ။ အရှိနျ ကွောငျ့ ရထေဲ ထိုးကသြှားတယျ။ အမြိုးသားတဦးနဲ့ အမြိုးသမီး ၂ ဦးကတော့ အသကျရှငျတယျ။ အမြိုးသမီး ၃ ဦး ရုပျ အလောငျးကို တှတေ့ယျ။ ကလေးကိုဆကျရှာနတေယျ”ဟု ဦးသောငျးထှနျး ကပွောသညျ။ https://burmese.shann ews.org/archives /18945
ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့တှငျ အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျက ရက်ခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂမှ ဦးဆောငျ၍ တောငျးဆိုဆန်ဒဖျော ထုတျသညျ့အတှကျ ကြောငျးသားအခြို့ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲတှငျ စဈတှမွေို့ အတုလမာရဇိနျ ပွညျလုံးခမျြးသာဘုရားကွီးရှမှေ့ စတငျကာ မွို့တှငျးရှိ လမျးအခြို့တှငျ လှညျ့လညျခဲ့ပွီး အငျးဝဘဏျရှနေ့ားတှငျ ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ရက်ခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂအဖှဲ့မှ တှဲဘကျသတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ကိုဦးသနျးနိုငျ က “ကြှနျတျောတို့ ၉ လပိုငျး၊ ၉ ရကျနကေ့ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့တာရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆန်ဒပွပွီးရငျလညျး အစိုးရက ကြှနျတျောတို့ကို ဖမျးဆီးတယျ။ ဖမျးဆီးတာကတော့ တဈပိုငျးပေါ့။ ထားလိုကျတော့။ နောကျပွီးတော့ ပွညျသူတှကေ ထပျပွီးတော့ သနေတေယျ။ လကျနကျကွီးကလြို့ သနေတေယျ။ နစေ့ဉျနဲ့အမြှသနေတေယျ။ ဒါတှေ ထပျဖွဈနတေဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ အခုလိုမြိုး ထပျလုပျရတာဖွဈတယျ။ အစိုးရက ကြှနျတျောတို့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အသံကို နားမထောငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အခုလိုဆန်ဒပွရတာဖွဈပါတယျ” ဟု မီဒီယာမြားကို ပွောကွားသညျ။ အဆိုပါ ဆန်ဒပွတောငျးဆိုပှဲတှငျ ရက်ခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂအဖှဲ့ဝငျမြား အဓိက ပါဝငျခဲ့ပွီး ရဟနျးသံဃာတျောမြားနှငျ့ စဈတှမွေို့မှ ပွညျသူအခြို့ကလညျး ပူးပေါငျးပါဝငျခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ဆန်ဒထုတျဖျောသညျ့ ကြောငျးသားမြားသညျ Burmese Government Get Out၊ Burmese Army Get Out၊ ရခိုငျ သညျ ကြှနျမဟုတျ စသညျ့အခကျြမြားကို ကွှေးကွျောတောငျးဆိုကွသကဲ့သို့ ဆိုငျးဘုတျ၊ ပိုစတာမြားကိုလညျး ကိုငျဆောငျ ကာ စီတနျးလမျးလြှောကျ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။ ရက်ခိုငျပွညျကြောငျးသားသမဂ်ဂမှ ကိုဦးသနျးနိုငျ (သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ)၊ ကိုမွတျစိုးဝငျး (ကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂ-ကြောကျဖွူပညာရေးကောလိပျ-တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး)၊ ကိုကြျောနိုငျဌေး (သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ) နှငျ့ကိုကောငျးထှနျး (သမဂ်ဂ-တက်ကသိုလျမြား ရနျကုနျ၊အဖှဲ့ဝငျ) တို့ကို ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.co m/article/195866
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျနမှေ့ ၁၆ ရကျနေ့ အထိ ကရငျ ပွညျသူ့ပါတီ -KPP ဝနျးရံသူ လူအငျအား ၂,၀၀၀ ခနျ့မှ မွို့တှငျးအပါအဝငျ KPP ကို ထောကျခံသညျ့ နယျကြေးရှာမြား အတှငျး အငျအားပွလှညျ့လညျမှုမြားပွုလုပျခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမြားအတှကျ ကရငျပွညျ သူ့ပါတီ -KPP မှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားသာ ဝငျရောကျ အရှေး ခယျြခံကွမညျဖွဈပွီး အခွား ကရငျပါတီတဈခုဖွဈသညျ့ ကရငျအမြိုးသားပါတီ-KNP မှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးမရှိသညျ့ မဲဆန်ဒနယျတဈခုလညျးဖွဈသညျ။
အငျအားပွလှညျ့လညျမှုမြားအတှကျ စီစဉျသူတဈဦးဖွဈသညျ့ စလောငျးလောငျးက“ ဒီကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျထဲ မှာရှိတဲ့ ကရငျ ဒသေခံတခြို့ဆို ကိုယျ့ကရငျပါတီရှိတယျဆိုတာတောငျ မသိကွဘူး။ တခြို့လညျး ကရငျပါတီရှိ တာကို သိပမေယျ့ ကိုယျ့ကရငျပါတီအတှကျ မဲထညျ့ဖို့ကို မသိကွတာမြိုးလညျးရှိတယျ။ အဲဒီအတှကျကို စီစဉျ တာဖွဈပါတယျ။ သုံးရကျပေါငျးရငျ ဝနျးရံသူပါ အပါ နှဈထောငျလောကျရှိမယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ အငျအားပွလှညျ့လညျမှုမြားကို အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျနတှေ့ငျ ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျ အမှတျ(၁)မဲ ဆန်ဒနယျ၊ ၁၅ ရကျနေ့ ရနျကုနျပုသိမျကားလမျးမကွီး တဈလြှောကျ မွငျးခါးဆိပျမှ ဒါးကနှငျ့ ၁၆ ရကျနတှေ့ငျ ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျ အမှတျ(၂) မဲဆန်ဒနယျကြေးရှာမြားအထိ ဆိုငျကယျ၊ ကား၊ ထျောလာဂြီမြားဖွငျ့ အငျ အားပွလှညျ့လညျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။
ထိုသို့လှညျ့လညျရာတှငျလညျး လိုကျပါသူမြားအား ဆိုငျကယျ ၁ စီးလြှငျ ၂ ဦးနှုနျးဖွငျ့သာစီးနှငျးရနျ သတျမှတျ ထားသညျ့ အပွငျ အသကျ ၁၈ နှဈမပွညျ့ပါက အငျအားပွလှညျ့လညျရာတှငျ ပါဝငျခှငျ့မပေးဘဲ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ သတျမှတျခကျြမြား နှငျ့အညီ Mask (နှာခေါငျးစညျး) တပျဆငျခွငျး၊ လကျသနျ့ဆေးရညျမြားပေးဝခွေငျး စညျး ကမျးခကျြမြားဖွငျ့ လှညျ့လညျခဲ့ ခွငျးဖွဈသညျဟု စလောငျးလောငျးက ပွောသညျ။ ကနျကွီးဒေါငျ့မွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမြားအတှကျ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ -KPP မှ မနျးစံ ထှနျးက ပွညျသူ့ လှတျတျော၊ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောတှငျ မနျးစံစီဖိုးက ကနျကွီးဒေါငျ့ မွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၁ နှငျ့ မနျးစောလငျးက ကနျကွီးဒေါငျ့ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၂ နရောမြားအတှကျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျကွ မညျဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/kpp%e1% 81%80%e1%80%94%e1%80%b9%e1%8 0%b8%e1%80%9b%e1
ဖွေ။ ။ ကနြျောတို့ အသငျးတျောကလူတှေ ရှေးကောကျပှဲနီးလာပွီဆို မေးခှနျးမေးလာတတျကွတယျ။ ကနြျောတို့ ဘာသာရေး ဦးဆောငျသူတှကေိုလညျး ဘယျပါတီကို မဲထညျ့ရငျကောငျးမလဲဆိုပွီး မေးတာရှိတယျ။ ကနြျောတို့ KBC ကနလေညျး အားလုံးခံယူထားတဲ့အတိုငျး တူပါစဆေိုပွီး ဒါပမေဲ့ တဈယောကျယောကျရဲ့ လှတျလပျစှာရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ကတော့ သူဟာနဲ့သူ တော့ရှိပါစပေေါ့။ ဒါပမေဲ့ကနြျောတို့က အားလုံးစုပေါငျးပွီးတော့ ပညာပေးတဲ့လမျးစဉျအတိုငျးလုပျရအောငျဆိုပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတျခနျ့က ကနြျောတို့ KBC ရဲ့ EC ကနေ အရေးပျေါအစီးအဝေးမှာ ဒါကိုထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိမိကွိုကျတာ ကိုပွောတာတော့ ပွဿနာ မရှိဘူးပေါ့။
ဖွေ။ ။ NLD နဲ့ ကနြျောပွောကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ NLD က ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရလုပျဖို့အတှကျ အစီစဉျမရှိဘူးလို့ ပွောကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ USDP တှကေတော့ ဖွဈနိုငျမဲ့အခွအေနရှေိတယျ။ အရငျသူတို့လကျထကျတုံးကလညျး တခွားတိုငျးရငျးသား ပါတီ တှနေဲ့လညျးသူတို့လကျတှဲချေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမှာတော့ USDP တှအေနနေဲ့က အမှတျရနတောပေါ့။ တိုငျးရငျးသားပါတီ တှနေဲ့ အတူလကျတှဲနိုငျတာက ကောငျးတယျလို့ မွငျမိတယျ။ စဈအာဏာရှငျနဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံတှကေို ဦးဆောငျပွီး NLD က လုပျရမဲ့ အဲ့တာဝနျကို မလုပျနဘေူးလို့ ကနြျောကတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျမိတယျ။
ဖွေ။ ။ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲက အဖွမှော ကနြျောတို့က သငျယူပွီး ဒီနကေ့နြျောတို့ WMR အနနေဲ့လညျး အပွငျက ဘာဖွဈ လာမယျဆိုဒါကို မှနျးဆပွောဆိုတတျတဲ့ ကနြျောတို့ ရပျမိရပျဖတှကေ ပညာမြားမြားယူပွီး ကခငျြပါတီတှေ ပေါငျးစညျးကွပါ ဆိုပွီး အတူပူးပေါငျးလုပျဆောငျခဲ့ပွီးပွီ။ ကနြျောတို့ ကခငျြပါတီတှအေားလုံး မစညျးရုံးနိုငျသေးဘူး။ ပွီးတော့ လူမြိုးစုပါတီတှေ လညျး မစုစညျးနိုငျသေးဘူး။ ကနြျောတို့ WMR အနနေဲ့ကတော့ KSPP ဖွဈဖို့အတှကျ နာမညျသတျမှတျပေးတယျ။ Logo တှေ အလံတှကေို အတညျပွုပေးတာဖွဈတယျ။ ကနြျောကိုယျတိုငျလညျး ပါတီပေါငျးစညျးရေး ဖွဈမွောကျရေးကျောမတီ ၁၇ ဦးမှာ ပါတယျ။ WMR အနနေဲ့ စုစညျးလိုကျရငျ ကောငျးတယျလို့ အမွငျပေးတယျ။ အရေးကွီးဆုံးက ကိုယျတိုငျ မဲကို ထညျ့ ဖွဈ အောငျထညျ့ပါ။ ဒီနကေ့နြျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှေ ဒီမဲထညျ့တဲ့နရောမှာ အရမျးအာနညျးနသေေးတယျ။ မဲစာရငျးမှာ ကိုယျ့နာမညျပါလား မပါလားတောငျ သှားမကွညျ့ကွဘူး။ ဒါကွောငျ့ မဲထညျ့နိုငျအောငျလုပျပါ။ https://burmese.k achinnews.com/2020/10/19/%e1 %80%9b%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1
ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့၊ ပလုပျတောငျရပျကှကျမှ အမြိုးသားနှဈဦးကို တပျမတျောသားမြားမှ ဖမျးဆီးသှား ခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှသိရသညျ။
ဖမျးဆီးခံရသူနှဈဦးမှာ ဦးကြျောမငျးအောငျ (၃၂)နှငျ့ ဦးဌေးလှငျ (၃၃)နှဈတို့ဖွဈကွပွီး အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီခနျ့တှငျ ရတေငျးခှနျကြေးရှာမှ ပလကျဝသို့ ကုနျပစ်စညျးသယျလာစဉျ လမျးတှငျ ဖမျးဆီးခံရခွငျးဖွဈကွောငျး ပလကျဝ ဒသေခံ ဦးအောငျအောငျကပွောသညျ။ “စားဝတျနရေေးအဆငျမပွတေဲ့အတှကျ ရတေငျးခှနျကိုကုနျပစ်စညျးသယျဖို့သှားကွ တာပါ။ အဲကပစ်စညျးတှေ သယျလာတဲ့လမျးမှာ တပျမတျောသားတှကေ ဖမျးဆီးလိုကျတာပါ။ အခုတော့ ရဲစခနျးမှာ ထိနျးသိမျး ထားပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ ဖမျးဆီးခံရသူနှဈဦးမှာ ကွုံရာကဗြနျးလုပျကိုငျစားသောကျနသေူမြားဖွဈပွီး လကျရှိတှငျ ၎င်းငျးတို့နှဈဦးကို ပလကျဝ ရဲစခနျးသို့ လှဲပွောငျးထားသညျဆိုသျောလညျး မိသားစုဝငျမြား တှခှေ့ငျ့မရသေးကွောငျး ဖမျးဆီးခံ ရသူ ဦးကြျောမငျးအောငျ၏ ဇနီး ဒျေါမွရီသနျးကပွောသညျ။
အဆိုပါလမျးတှငျသှားလာမညျဆိုပါက တပျရငျး ၂၈၉ တှငျ ခှငျ့ပွုစာတငျရကွောငျး၊ ယငျးသို့ခှငျ့ပွုစာတငျပွနျ ငှကွေေးအခကျ အခဲရှိသဖွငျ့ စာမတငျဘဲသှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး ဒျေါမွရီသနျးက ဆကျပွောသညျ။ ထိုသို့ ဖမျးဆီးခံရသူနှဈဦးကို ပလကျဝ ရဲစခနျးတှငျ ယာယီထိနျးသိမျးထားခဲ့ခွငျးသာဖွဈပွီး လကျရှိမှာ တပျမတျောသားအခြို့မှ ဖမျးဆီးထားသူနှဈဦးကို ပွနျလညျချေါဆောငျသှားပွီဖွဈကွောငျး ပလကျဝမွို့နယျ ရဲခစနျးမှ စခနျးမှူး ဒုရဲမှူးဝငျးလှငျက ပွောသညျ။“တပျက ခဏလာအပျထားတာပါ။ အခုပွနျချေါသှားပွီ။ ဖမျးဆီးခံရတဲ့လူနှဈယောကျက အရကျဆီတှေ သယျလာ ကွတယျ။ လမျးမှာ တှလေို့ သူတို့ကိုချေါသှားတာပါ။ ဖမျးဆီးထားတဲ့သူနှဈယောကျကို အမှုဖှငျ့ တရားစှဲတာတော့ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ထို့ပွငျ စကျတငျဘာလအတှငျးက ကြောကျတျောမွို့နယျဘကျသို့ ကုနျပစ်စညျးအငှားသယျယူပို့ဆောငျသူ ၄၁ ဦးအား တပျမတျောကဖမျးဆီးကာ တပျရငျး(၂၈၉)သို့ချေါဆောငျးသှားပွီး တဈရကျခနျ့ကွာစဈဆေးခဲ့ပွီးနောကျ ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့ သညျ။ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုမြားရှိနသေညျ့ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ဒသေခံမြားမှ စားဝတျ နရေေးအခကျအခဲကွောငျ့ ကုနျပစ်စညျးအငှားထမျးရနျသှားစဉျ မကွာခဏဖမျးဆီးစဈဆေးခံရမှုမြား ရှိနသေညျ။ https://www .bnionline.net/mm/news-76367
ပွညျသူ့စဈဟုအမညျခံကာ လကျနကျကိုငျဆောငျ၍ ပွညျသူတို့၏အသကျအိုအိမျစညျးစိမျ လုံခွုံရေး၊ ဒသေန်တရအုပျခြုပျရေးနှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးတို့ကို ခွိမျးခွောကျနသေညျ့ လူပုဂ်ဂိုလျ၊ အသငျးအဖှဲ့မြားအား သကျဆိုငျရာမြားမှ အမွနျဆုံးကိုငျတှယျ ဖွရှေငျးပေးရနျ မှနျပွညျသဈပါတီက ကွညောခကျြထုတျပွနျလိုကျသညျ။
“လကျနကျခအြဖှဲ့တှကေို ငွိမျးခမျြးရေးအဖှဲ့ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ မူးယဈဆေးဝါးအထူးနှိမျနငျးရေးအဖှဲ့ဆိုပွီး နာမညျအမြိုးမြိုး ချေါကွပါတယျ၊ အခုဟာက နိုငျရာဇာတို့ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့၊ မလှဲတောငျပျေါမှာ မနှဈကနာမညျကွီးနတေဲ့ စိုးသနျးနိုငျတို့လို ၅ ယောကျတဈဖှဲ့ ၁၀ ယောကျတဈဖှဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးခေါငျးစဉျအောကျမှာ လကျနကျခအြလငျးဝငျတှကေို ဂိတျဖှငျ့ခှငျ့ပွုထားတာ တဈပုံကွီးရှိနတေယျ၊ ရပျရှာတှမှော သနေတျတှကေို နားလညျမှုနဲ့ ကိုငျဆောငျခှငျ့ပွုထားတယျ၊ ခြဲဒိုငျ ဘောလုံးဒိုငျလိုမြိုး တရားမဝငျလုပျငနျးရှငျတှဆေီက လစဉျကွေးတောငျးတယျ၊ သူတို့ရံပုံငှဆေိုပွီး လောငျးကစားပှဲတှလေုပျခှငျ့ရတယျ၊ အကွှေး တှကေို သနေတျပွပွီး အငှားလိုကျတောငျးပေးတယျ၊ ရပျထဲရှာထဲ အာဏာပွ သနေတျပွခွိမျးခွောကျနတောကို သူတို့ ဆရာကွီးတှကေ မကျြစိမှိတျပေးထားလို့ရပမေယျ့ အခုလို လူသတျတဲ့အဆငျ့အထိ ရာဇဝတျပွဈမှုကြူးလှနျလာရငျတော့ ဥပဒအေတိုငျးအရေးယူခံရတာပေါ့”ဟု အမညျမဖျောပွလိုသော ရေးမွို့ပျေါမှ မှနျပွညျသဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီဝငျဟောငျး တဈဦးက ပွောသညျ။
အာယုတောငျကြေးရှာအုပျစု စုံနံ့သာကြေးရှာအနီး ခံသငျးတံတားအနီး အခွစေိုကျသညျ့ မှနျပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ နိုငျရာဇာ ဆိုသူက အောကျတိုဘာ ၁၅ ရကျနေ့ ညပိုငျးတှငျ M-16 သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျသဖွငျ့ ခှငျ့ပွနျလာသညျ့ မှနျပွညျသဈ ပါတီ ခရိုငျကျောမတီဝငျ ဗဟိုသုတသေနဌာန ဒုတိယတာဝနျခံ နိုငျဇျောလတျ(ချေါ) နိုငျဂေးမရော့ သဆေုံးခဲ့သညျ့ဖွဈစဉျ အပျေါ ၂၀၂၀ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီက ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ နိုငျဇျောလတျ နှငျ့ နိုငျရာဇာတို့အဖှဲ့သညျ အခငျးဖွဈပှားသညျ့နရောအနီးတဝိုကျတှငျ အခွအေတငျစကားမြားခဲ့ကွသညျ့ အသံမြား ကွားခဲ့ကွောငျးနှငျ့ ယငျးနောကျ သနေတျပဈခတျသံမြားကွားခဲ့ရကွောငျး၊ နိုငျရာဇာကိုငျဆောငျသညျ့ M-16 အမြိုး အစား သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ရုပျအလောငျးတှငျ ကနျြရဈခဲ့သညျ့ ကညျြဖူးမှတဆငျ့ စဈဆေး အတညျ ပွုနိုငျ ခဲ့သညျဟုဆိုသညျ။ အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ မှနျပွညျသဈပါတီ သထုံခရိုငျအတှငျးရေးမှူး နိုငျခငျအေး တရားလို ပွုလုပျ၍ ရေးမွို့မရဲစခနျးသို့ တိုငျကွားသဖွငျ့ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၀၂ အမှုကွီးအမှတျစဉျ (၂၆/၂၀၂၀) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ပွီး တရားခံ နိုငျရာဇာအား ဖမျးဆီးစဈဆေးလြှကျရှိကွောငျး ရေးမွို့မရဲစခနျးမှ သိရသညျ။
ယငျးသို့ အခငျးဖွဈပှားရာနရောတှငျ အခွအေတငျစကားမြားပွီးနောကျ နိုငျရာဇာမှ ၎င်းငျးကိုငျဆောငျထားသညျ့ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခဲ့သညျ့ ဖွဈရပျမှနျကို လီဆယျ၍ ယငျးအစား မိမိတို့၏စခနျးအား လာရောကျပဈခတျ၍ ခုခံပဈခတျခွငျးဖွဈကွောငျး လကျဦးမှုရယူကာ လိမျလညျ၍ သတငျးထုတျပွနျစခေဲ့ကွောငျး၊ ယငျးဖွဈစဉျကို ရာမညတိုငျး(မျ) သတငျးအဂေငျြစီကို လီဆယျ၍ သတငျးဖွနျ့စခေဲ့ကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီက သုံးသပျထားသညျ။“ရာဇာကို မနကေ့ ရဲဖမျးလိုကျပွီး သူတို့ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့လကျနကျတှကေို စဈတပျက သိမျးထားတယျလို့ကွားတယျ၊ လူသတျမိတယျဆိုတာနဲ့ သတငျးဌာနတှကေို ဆကျသှယျပွီး သူတို့စခနျးကိုပဲ အဖှဲ့အစညျးတဈခုခုက ဝငျပဈသှားသလို သတငျးလှငျ့လိုကျသေးတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အမှုမှနျ ပျေါသှားပွီဆိုတော့ သူတို့ငွငျးလို့မရတော့ဘူး”ဟု အထကျပါ မှနျပွညျသဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီဝငျဟောငျးက ဆကျပွော သညျ။ ပွညျသူ့စဈအမြားစုသညျ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျမြားဖွဈကွပွီး ရပျရှာကာကှယျရေး ပွညျသူ့စဈ၊ တိုငျးရငျးသား လကျ နကျကိုငျအဖှဲ့မှ အသှငျပွောငျး ပွညျသူ့စဈ၊ နယျခွားစောငျ့တပျ စသညျ့ပုံစံမြိုးစုံနှငျ့ ရပျတညျနကွေကွောငျး သိရ သညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/17/%e1%80%95%e 1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%
“သူတို့ခငျြး အခငျြးခငျြး ဖွဈကွတာတှေ၊ ပဈတာခတျတာတှဖွေဈတော့ တဈယောကျ သနေတျထိမှနျပွီး သတေယျ၊ မှနျပွညျသဈပါတီက၊ အဲဒါလေးက တပျကလညျး ကြှနျတျောတို့ဆီ မလှဲသေးဘူး၊ ကြှနျတျောတို့ဆီကို လာတိုငျခကျြလေး တော့ အကွမျးကောကျထားတယျ၊ ဥပဒအေရတော့ ဥပဒနေဲ့အညီတော့ ဆောငျရှကျရမှာပေါ့၊ တဈဖကျကတော့ မှနျအဖှဲ့ တှပေါပဲ။ သူတို့က ပွညျသူ့စဈပုံစံမြိုးနဲ့ မှနျငွိမျးခမျြးကာကှယျရေးတပျက လကျနကျတှေ ထုတျပေးထားတာပေါ့၊ ဟိုဘကျက တော့ သူတို့မှနျဘကျကလညျး သနေကျပါတယျလေ၊ ပစ်စတို၊ ပဈတာကတော့ အဲသဆေုံးတဲ့သူအဖှဲ့က ပဈသှားတာ၊ ဒီဘကျ က ဗိုလျမှူး နိုငျရာဇာအဖှဲ့က မမှနျဘူး။ မမှနျတော့၊ ဒီဘကျက ပဈလိုကျတာ မှနျသှားတာ ဒါပဲ”သဆေုံးသူဟာ မှနျပွညျသဈ ပါတီ သုတသေနဌာနရဲ့ ဒုတိယ တာဝနျခံဖွဈသလို ခရိုငျကျောမတီဝငျအဆငျ့ တာဝနျရှိသူ နိုငျဇျောလတျ ဖွဈပါတယျ။
သဆေုံးသူဟာ ရေးမွို့နယျထဲက သူ့ဇာတိဖွဈတဲ့ ကော့ဒှတျကြေးရှာပွနျဖို့ အောကျတိုဘာ လဆနျးပိုငျးက မှနျပွညျသဈပါတီ မှာ ခှငျ့ယူထားသူဖွဈလို့ သူ့ရဲ့လှုပျရှားမှုကိုတော့ အတိအကြ မသိရသေးပမေယျ့ သဆေုံးသူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါက သနေတျ ဒဏျရာအပျေါမှာ သံသယရှိမိတယျလို့ မှနျပွညျသဈပါတီ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျကျောမတီက နိုငျအောငျမငေးက RFA ကို ပွောပါတယျ။ အခငျးဖွဈပှားတဲ့ညနဲ့ နောကျနေ့ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ မှနျပွညျသူ့စဈဆိုသူ ဗိုလျမှူး နိုငျရာဇာထံ RFA သတငျးဌာနက ဖုနျးဆကျသှယျရာမှာ ဖုနျးမကိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလျမှူး နိုငျရာဇာကို မှနျငွိမျးခမျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ကနေ ထုတျပယျကွောငျးနဲ့ နိုငျငံတျော တညျဆဲဥပဒတှေကေို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျပါက သကျဆိုငျရာ ဌာနတှအေနနေဲ့ လိုအပျ သလို အရေးယူနိုငျကွောငျး မှနျငွိမျးခမျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့က ကော့တုံ ဗဟိုစဈဌာနခြုပျကနေ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မတျလ ၁၁ ရကျနကေ့ ကွညောထားပါတယျ။ မှနျပွညျသဈပါတီကနေ ခှငျ့နဲ့ပွနျခဲ့ကွတဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျတှကေို လကျနကျကိုငျဆောငျဖို့ လုံးဝ ခှငျ့မပွုထားသလို သဆေုံးသူအလောငျးအနီးမှာ ထားရဈခဲ့တဲ့9MM အမြိုးအစား လကျနကျငယျဟာလညျး မှနျပွညျသဈ ပါတီက လကျနကျမဟုတျဘူးလို့ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျမှာ မှနျပွညျသဈပါတီက အသိပေးကွညောခဲ့ပါတယျ။
သဆေုံးသူမှာ ကနျြရှိနတေဲ့သနေတျက မှနျပွညျသဈပါတီက သနေတျမဟုတျတဲ့အပွငျ သနေတျမောငျး မဖွုတျထားသလို သနေတျကညျြဆံ ၁၄ လုံး အပွညျ့ရှိနတောနဲ့ သနေတျပွောငျးမှာ ယမျးငှမေ့ရှိဘူးလို့ စုံစမျးသိရှိထားတဲ့အကွောငျး နိုငျအောငျမငေး က ပွောပါတယျ။ မှနျပွညျသဈပါတီက ရေးမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ နိုငျဇျောလတျ ရုပျအလောငျးကို အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးမှာ မှနျပွညျသဈပါတီ ဝယျဇဉျတပျစခနျးကို သယျဆောငျသှားခဲ့ပွီး နောကျတနမှေ့ာ သင်ျဂွိုဟျခဲ့ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/nmsp-member-shot-dead-10182020215014.html
နယျမွတေညျငွိမျအေးခမျြးပွီး တိုကျပှဲမဖွဈပှားသညျ့ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး မိုငျးကိုငျမွို့နယျ တခုလုံးကို ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျမှ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့မပွုကွောငျး ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး မိုငျးကိုငျမွို့နယျ တခုလုံး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ မပွုသညျ့အပျေါ မဖွဈသငျ့ကွောငျး မိုငျးကိုငျ ပွညျသူ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးဆိုငျမိုငျး ကပွောသညျ။“ကနြျောတို့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျထဲမှာ တိုကျပှဲဖွဈတာလညျး မဟုတျဘူး။ နယျမွအေခွနေဆေိုး နတောလညျးမဟုတျဘူး။ အဲ့တှကျကွောငျ့ ဒါကမဖွဈသငျ့ဘူး။မဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စပါ” ဟု စိုငျးဆိုငျမိုငျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။“မဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စ နိုငျငံသား တဈယောကျရဲ့ မဲပေးပိုငျခှငျ့ကို ဆုံးရှုံးစေ တယျ။ တကယျလို့သာ သူ့တို့သာ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိတယျဆိုလို့ရှိရငျ မဲပေးနိုငျတဲ့ အနအေထား ဖနျတီးပေးရမယျ။ ရှဆေ့ကျ ကနြျောတို့တော့ ညှိနှိုငျးနပေါတယျ။ တိုငျပငျနပေါတယျ” ဟု စိုငျးဆိုငျမိုငျး ကပွောသညျ။
လကျရှိ မဲဆှယျကာလတှငျ RCSS/SSA မှ တအာငျးအမြိုးသားပါတီ (TNP) ကို မိုငျးကိုငျမွို့နယျ အတှငျး မဲဆှယျစညျးရုံး မရ အောငျ အနှောကျအယှကျ ပေး နကွေောငျး လညျး မိုငျးကိုငျမွို့နယျ TNP ဥက်ကဌ မိုငျးနုမျဟနျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွော သညျ။ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ/သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး မှ RCSS/SSA အနဖွေငျ့ တားဆီးပိတျပငျခွငျး မရှိကွောငျး နှငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျ ထိနျးခြုပျသညျ့ နရောမှာ စညျးကမျးခကျြမြား အကနျ့အသတျမြား စဈဆေးသညျ့ ကိစ်စမြားရှိကွောငျး ပွောသညျ။“မဲဆှယျ စညျးရုံးရေး ကာလမှာ အဟနျ့အတားလုပျတာ မရှိဘူး။ အဲ့ဒီ ဒသေမှာ အခွနေေ ငွိမျသကျနတေယျ”ဟု ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က ဆို သညျ။ အရပျသားအစိုးရ လကျတကျတှငျ သြှမျးပွညျအပျေါ လကျရှိပွုမူမှုသညျ အရပျသားအစိုးရကို အယုံအကွညျ ကငျးမဲ့ သညျ့ အနအေထားဖွဈသှားကွောငျး သြှမျးပွညျသူမြားက မှတျခကျြပွုလိုကျသညျ။
သြှမျးပွညျ အတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့မပွုသညျ့ မွို့နယျမြားမှာ မိုငျးလားမွို့နယျ၊ ပနျဆနျးမွို့နယျ၊ နားဖနျးမွို့နယျ၊ မိုငျးမောမွို့နယျ ၊ ပနျဝိုငျမွို့နယျ ၊ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ တို့ မှ မွို့နယျ တခုလုံးဖွဈကွောငျး အောကျတိုဘာ (၁၆)ရကျ တှငျ ပွညျ ထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ က တရားဝငျထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ ကြောကျမဲမွို့နယျ ၊ နောငျခြိုမွို့နယျ၊ နမျ့ဆနျမွို့ နယျ ၊မနျတုံမွို့နယျ၊ မိုငျးခတျမွို့နယျ၊ မိုငျးယနျးမွို့နယျ၊ မိုငျးဖွတျမွို့နယျ၊ မိုငျးယောငျးမွို့နယျ၊ ကှတျခိုငျမွို့နယျ၊ မူဆယျမွို့ နယျ၊ မကျမနျးမွို့နယျ၊ မိုငျးတုံမွို့နယျ၊ တနျ့ယနျးမွို့နယျ၊ လားရှိုးမွို့နယျ၊ ကှမျးလုံမွို့နယျ ကုနျကွမျးမွို့နယျ နှငျ့ ဟိုပနျမွို့ နယျတို့မှ ကြေးရှာအုပျစုမြားစှာ ကငျြးပခှငျ့မပွုကွောငျးလညျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက တရားဝငျ ထုတျပွနျခဲ့ သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18933
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ရှာသဈကေ ကြေးရှာမှ မူလတနျးပွ ကြောငျးဆရာ ၁ ဦး သညျ အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက လကျနကျကွီး ထိမှနျ၍ သဆေုံးသှားခဲ့ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။ အသကျ ၂၀ အရှယျ မူလတနျးပွ ကြောငျးဆရာ ကိုမြိုးဆကျနိုငျဦးသညျ ရှာအနီးရှိ လယျကှငျးတှငျ နှားရတေိုကျရနျ သှားရောကျစဉျ လကျနကျကွီး ကညျြဆနျ ထိမှနျခဲ့ကာ ဝဲဘကျ မကျြလုံး ဖောကျထှကျဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့ပွီး ဒဏျရာ ပွငျးထနျသညျ့အတှကျ ရသတေ့ောငျ ဆေးရုံမှ တဆငျ့ စဈတှဆေေးရုံသို့ စကျလှဖွေငျ့ ပို့ဆောငျစဉျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီ ဝနျးကငျြ အခြိနျ၌ လမျးတှငျ သဆေုံးသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ရသတေ့ောငျဒသေခံ ကြောငျးဆရာတဦးက “သူက ကြောငျးပိတျထားတယျဆိုတော့ မိဘ ကူတဲ့အနနေဲ့ ရှာအနီး မှာ နှားကြောငျးရငျး၊ နှားတှကေို ရသှေားတိုကျတဲ့အခါမှာ လကျနကျကွီးလာကတြာ။
ဒဏျရာက တျောတျောပွငျးတော့ စဈတှဆေေးရုံကို သယျလာတဲ့အခြိနျ လမျးမှာပဲ ဆုံးသှားတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ရသတေ့ောငျမဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျက “ကနြျောကို ရှာသားတှေ ပွောပွ တာကတော့ တိုကျပှဲလညျး မရှိဘူး။ လကျနကျကွီးက ရသတေ့ောငျတပျရငျးက ပဈတာလို့ ပွောတယျ။ လကျနကျကွီးမှနျတဲ့ ကြောငျးဆရာ ကတော့ မကျြလုံးဖောကျထှကျပွီးတော့ ဦးနှောကျထိသှားပွီးတော့ လမျးမှာ ဆုံးသှားရှာတယျ” ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပွောသညျ။ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီမှ တပျမတျောသတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးအား ဆကျသှယျ ခဲ့ရာ ယနေ့ အဆိုပါ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အတှငျး တိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျးမြား မရှိသလို မညျသညျ့ လကျနကျကွီး ပဈခတျမှုမှလညျး မရှိကွောငျး ပွောသညျ။ သဆေုံးသှားသူ ကြောငျးဆရာ ကိုမြိုးဆကျနိုငျသညျ ကြောကျဖွူ ပညာရေး ကောလိပျ ကြောငျးဆငျးတဦးဖွဈပွီး ၎င်းငျးသဆေုံးရခွငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျ ကြောငျးသားသမဂ်ဂမှ မိသားစုနှငျ့အတူ ဝမျးနညျးကွောငျးနှငျ့ တပျမတျော၏ လုပျရပျမြားကို အားပေး အားမွှောကျလုပျနသေော အစိုးရအပျေါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရှုတျခကြွောငျး ကြောငျးသားသမဂ်ဂ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှ ထုတျပွနျထားသညျ။
ကိုဗဈကာလအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ AA တို့၏ နှဈဖကျတိုကျပှဲကွောငျ့ ကြောကျတျော၊ ရသတေ့ောငျ၊ မွောကျဦးမွို့နယျ တို့တှငျ စဈရှောငျအရအေတှကျ ၃ သောငျးကြျော ထပျမံ တိုးပှားလာကာ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျး မွို့နယျမြားတှငျ စဈရှောငျအရအေတှကျ ၂၂၀၀၀၀ ကြျောထိ မြားပွားလာကွောငျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြား အစညျး အရုံး (REC) က အောကျတိုဘာ ၁ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျထားသညျ။ https://burma.irra waddy.com/news/2020/10/19/231962.html
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ကတိကဝတျတှကေို နှိုငျးယှဉျရာမှာ လှတျလပျခှငျ့တှနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူ့ပါတီနဲ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျတို့က အမြားဆုံး ကတိပွုထားတယျလို့ လလေ့ာခကျြ တခုက ဆိုပါ တယျ။ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခွငျး မွနျမာ (FEM) အဖှဲ့က လုပျထားတဲ့ လလေ့ာခကျြမှာ လကျရှိအာဏာရပါတီ အနျအယျလျဒီဟာ ခေါငျးစဉျ ၇ ခုထဲက ၁ ခုမှာပဲ တခွားနှိုငျးယှဉျပါတီတှထေကျ သာလှနျပွီး ၆ ခကျြမှာတော့ သိသိသာသာ ကို လြော့နညျးနပေါတယျ။ အထှထှေသေောလူ့အခှငျ့အရေး၊ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ အမုနျးစကား၊ မီဒီယာ လှတျလပျခှငျ့၊ ဆန်ဒထုတျဖျောခှငျ့၊ သတငျးအခကျြအလကျ ရယူဖွနျ့ဝနေိုငျခှငျ့နဲ့ ဒဈဂဈြတယျ အခှငျ့အရေးဆိုတဲ့ လှတျလပျခှငျ့ ခေါငျးစဉျ ၇ ခုအကွောငျး ရှေးကောကျပှဲကတိကဝတျတှမှော ဘယျလိုဖျောပွထားလဲ ဆိုတာကို လလေ့ာထားတာပါ။ အနျ အယျလျဒီဟာ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ သတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့၊ သတငျး အခကျြအလကျ ရယူပိုငျခှငျ့တို့ကို ဘာကတိမှာပေးမထားဘဲ အမုနျးစကားနဲ့ ဆန်ဒဖျောထုတျခှငျ့တို့ အပျေါမှာတော့ အားအလှနျနညျးတဲ့ ကတိပေးထားပါတယျ။
ကွံ့ခိုငျရေးပါတီကတော့ လူ့အခှငျ့အရေး၊ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ ဆန်ဒထုတျဖျောခှငျ့တို့ရဲ့ တစိတျတပိုငျးကိုပဲ ကတိပွုထားပွီး အမုနျးစကားနဲ့ သတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ကို အားအလှနျနညျးတဲ့ ကတိ၊ သတငျးအခကျြအလကျရယူပိုငျ ခှငျ့၊ ဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေးတို့ကို ဘာကတိမှာ မပေးထားပါဘူး။ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) ဟာ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့တို့ကို နိုငျငံတကာစံမီကတိပေးထားပွီး သတငျးအခကျြအလကျရ ယူပိုငျ ခှငျ့နဲ့ အမုနျးစကားတို့အပျေါ အသငျ့အတငျ့ခိုငျမာတဲ့ ကတိကဝတျ၊ ဆန်ဒထုတျဖျောခှငျ့နဲ့ သတငျးမီဒီယာလှတျလပျခှငျ့ကို အသငျ့အတငျ့အားနညျးတဲ့ကတိပေးထားပါတယျ။ တခွားတိုငျးရငျးသားပါတီတျောတျောမြားမြားဟာ ဒီခေါငျးစဉျတှအေပျေါ မှာ ကတိပေးထားတာ မရှိကွဘဲ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ၊ မှနျညီညှတျရေးပါတီနဲ့ လီဆူအမြိုးသား ဖှဲ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီတို့ကပဲ တခြို့ကို တစိတျတပိုငျး ကတိပွုထား တာတှရေ့ပါတယျ။
FEM ရဲ့ ဒါရိုကျတာ ဒျေါယဉျရတနာသိနျးကလညျး “ကမြတို့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတျတှအေကွောငျး ပွညျ့စုံတဲ့၊ အခကျြအလကျတိုကျဆိုငျစဈဆေးထားတဲ့၊ ကတိကဝတျ တှကေို နှိုငျးယှဉျပွပေးထားတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ၊ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ပတျသတျပွီး ကတိ ကဝတျ ပွုထားခွငျး မရှိတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ကို မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူတှထေံ ပေးပို့ဖို့ပါပဲ။ နိုငျငံရေး ပါတီတှရေဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှဟော ရှငျးလငျးသခြောတဲ့ ကတိကဝတျတှကေို ရရှိလိုတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျတှရေဲ့ ဆန်ဒကို မဖွညျ့နိုငျဘဲ၊ ဝဝေဝေါးဝါး အာမခံခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archi ves/417960
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ နမျ့မဟငျရှာမှာ တိုကျပှဲကာလအတှငျး ပကျြစီးခဲ့တဲ့နအေိမျတှကေို ပွနျလညျ ပွုပွငျပေးဖို့ ရှိနတေယျလို့ မွို့နယျသဘာဝဘေး စီမံခနျ့ခှဲရေးကျောမတီက သိရပါတယျ။
အခု အောကျတိုဘာလအတှငျး ကြောကျမဲမွို့နယျထဲက ကြေးရှာတှထေဲမှာ တပျမတျောနဲ့ RCSS-SSA ရှမျးလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တှေ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး နမျ့မဟငျရှာမှာတော့ အိမျခွပေေါငျး ၃၅ အိမျရှိတဲ့ နမျ့မဟငျရှာမှာ အိမျတိုငျးနီးပါး ပကျြစီးနတေဲ့အပွငျ နအေိမျတှငျး ပစ်စညျးတှပေါ ပကျြစီး ပြောကျဆုံးတာတှေ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကြှဲ၊ နှားတှလေညျး သဆေုံး ခဲ့တာ ကွကျ၊ ဝကျ ပြောကျဆုံးတာတှအေားလုံး စာရငျးပွုစုခိုငျးထားပွီး ဘေးစီမံကျောမတီက အလုံးစုံမဟုတျတောငျ အတတျ နိုငျဆုံး ပွနျလညျပွုပွငျပေးကာ ဖွညျ့ဆညျးပေးမှာဖွဈတယျလို့ မွို့နယျသဘာဝဘေး စီမံခနျ့ခှဲရေးကျောမတီဝငျ ကိုသားဇျော က ပွောပါတယျ။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှကေို လှူဒါနျးဖို့သှားရငျး နမျ့မဟငျရှာကို ဝငျကွညျ့တဲ့အခါ တပျမတျောက ရှိနတောကွောငျ့ ဝငျခှငျ့မသာခဲ့ပါဘူးလို့လညျး သူက ဆိုပါတယျ။ လကျရှိ တာဝနျကလြုံခွုံရေးတပျရငျးတပျဖှဲ့ဟာ အခုမှ ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့သူတှဖွေဈပွီး ကြေးရှာနဈနာမှုအတှကျ သူတို့အနနေဲ့ ကပျြ ၃ သိနျး ထောကျပံ့ခဲ့ပွီးပွီလို့ ကိုသားဇျောက ဆိုပါတယျ။ တိုကျပှဲအတှငျး လကျနကျကွီးထိမှနျကာ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့လူနာတှကေိုလညျး ကွညျ့ရှု စောငျ့ရှောကျပေးစေ ခငျြတယျလို့ ကြောကျမဲဒသေခံတဦးက ပွောပါတယျ။ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးတိုကျနယျက ဘုနျးကွီးကြောငျးတှမှော လကျကနျြစဈဘေးရှောငျ ၁,၀၀၀ လောကျခိုလှုံနကွေပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archiv es/417861
ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီး လှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာအတှကျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျဦးရမှော အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနစေ့ာရငျးအရ ၁၀ သိနျးခနျ့ရှိကွောငျးသိရသညျ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ကရငျရေးရာကိုယျစားလှယျလောငျးဖွဈသူ ကရငျအမြိုးသားပါတီ -KNPမှ မနျးမငျးရဲထှေးက “ တိုငျး ကျောမရှငျကို ဒီနေ့ စုံစမျးကွညျ့တော့ အကွမျးဖငျြးအနနေဲ့အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့ စာရငျးအရ ကရငျရေးရာ မဲဆန်ဒရှငျ က စုစုပေါငျး (၉၉၉,၅၃၁) ဦးလို့ သိရတယျ။ အခြုပျကတော့ မလာသေးဘူး။ အတိုး အလြှော့တော့ရှိမယျ။ အတိုးနညျးနညျး အဆုတျနညျးနညျးပါပဲတဲ့။ ၁၀ သိနျးလောကျ တော့ဖွဈ ကောငျးဖွဈ သှားနိုငျတယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျး ရရှိထားသညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့ စာရငျးမြားအရ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး အတှငျး ကရငျလူမြိုးအမြားစုနေ ထိုငျရာ မွို့နယျမြားဖွဈသညျ့ ပနျးတနျောတှငျ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျ ၁ သိနျးကြျော၊ ဝါးခယျမ ၉၂,၀၀၀ ကြျော၊ မွောငျးမွ ၈၅,၀၀၀ ထောငျကြျော၊ ကြုံပြျော ၈၁,၀၀၀ ထောငျကြျော၊ အိမျမဲ ၇၅,၀၀၀ ကြျော၊ ညောငျတုနျး ၆၇,၀၀၀ ကြျော၊ ငပုတော ၆၅,၀၀၀ ကြျော၊ ကနျကွီးထောငျ့ ၆၂,၀၀၀ ကြျောရှိသညျဟု အကွမျး ဖငျြး သိရှိရသညျ။
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနဖွေငျ့ မဲဆန်ဒရှငျစာရငျးမြားကို ဇူလိုငျ ၂၅ ရကျမှ သွဂုတျလ ၁၄ ရကျနတှေ့ငျ ပထမအကွိမျအဖွဈ ထုတျပွနျခဲ့ပွီဖွဈပွီး အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျမှ ၁၄ ရကျနအေ့ထိကို နောကျဆုံး အကွိမျအဖွဈ သတျမှတျထားသညျ့အတှကျ ၎င်းငျးကာလအတှငျး မဲဆန်ဒရှငျဦးရအေပွောငျးအလဲအနညျးငယျ ရှိနိုငျသညျဟုလညျး ရေးရာကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက သုံးသပျပွောဆိုသညျ။ အောကျတိုဘာလ ၁၃ ရကျနကေ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ အတှငျး ရေးမှူး ဦးမွငျ့နိုငျထံ ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြအရ ဇူလိုငျ ၂၅ ရကျမှ သွဂုတျလ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ ပထမအကွိမျ ကရငျရေးရာ မဲဆန်ဒရှငျ စုစုပေါငျးမှာ( ၉၈၆,၉၈၄ )ဦးရှိသညျဟု သိရသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈတှငျ ကောကျယူထားသညျ့ ပွညျလုံးကြှတျသနျးခေါငျစာရငျးအရ မွို့နယျပေါငျး ၂၆ မွို့နယျရှိသညျ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ကရငျအပါအဝငျ လူဦးရေ စုစုပေါငျး ၆,၁၈၄,၈၂၉ (ခွောကျသနျး) ကြျော ဦးရှိသညျဟု သိရပွီး လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကရငျရေးရာ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၆ ဦးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ အရှေးခယျြခံမညျလညျး ဖွဈသညျ။ http://kicnews.o rg/2020/10/%e1%80%a7%e1%80%9b%e1%80%ac%e1 %81%80%e1%80%90%e1%8
ကခငျြပွညျနယျတှငျး ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ နရောမြား သတျမှတျခွငျးကို နယျမွအေုပျခြုပျရေး၊ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ တပျဖှဲ့မြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပွီး လုံခွုံရေးအပျေါ မူတညျကာ သတျမှတျခွငျး ဖွဈသညျဟု ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲရုံး၊ အတှငျးရေးမှူး ဦးထှနျးအောငျခိုငျက ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။
ဦးထှနျးအောငျခိုငျက “ဒီတိုငျး စိတျကူးနဲ့ ထညျ့ခငျြထညျ့၊ မထညျ့ခငျြ မထညျ့ဘူးဆိုပွီး ဘလခြီးနနျးလုပျထားတာ မဟုတျဘူး။ ဘယျမွို့နယျ၊ ဘယျကြေးရှာအုပျစုလဲပွောရငျ ဘာ့ကွောငျ့ဆိုတာ ပွောပွလို့ရတယျ။ ဝဖေနျတာက သူတို့အလုပျပဲ။ ထငျကွေး နဲ့ လြှောကျပွီး ဝဖေနျ နတော ထငျရာမွငျရာပဲ။ တိတိကကြပြွောဆို ထှကျမလာတော့ဘူး။ တို့ လုပျထားတာက သခြော စီစဈပွီး လုပျထားတာ”ဟု ပွောသညျ။ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ မဲဆန်ဒနယျမွမြေား သတျမှတျရာတှငျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) က အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာနမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာ နယျမွေ အလိုကျ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ စာရငျးမြားကို တောငျးပွီး သုံးသပျကာ ကွငွောခွငျး ဖွဈပါ သညျဟု ဦးထှနျးအောငျခိုငျက ဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျး ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ နရောမြားမှာ အငျဂနျြးယနျမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၆၁ စု၊ ဆှမျပရာ ဘှမျ မွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၃၁ စု၊ ဝိုငျးမျောမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၁၃ စု၊ ဆော့လျောမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၈ စု၊ ခြီဖှမွေို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၉ စု၊ မခမျြးဘောမွို့နယျမှကြေးရှာအုပျစု ၁၅ စု၊ မိုးမောကျမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၂၁ စု၊ ရှကေူမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၉ အုပျစု ၊ မံစီမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၂၂ စု၊ တနိုငျးမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၂ စု နှငျ့ ခေါနျလနျဖူးမွို့နယျမှ ကြေးရှာအုပျစု ၁ စု တို့ဖွဈသညျ။ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျ(၁) တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျ ဦးဂဲနကျဈက “၁၃ နရောမှာ ၈ နရော၊ ၉ နရောက ရှာပကျြတှေ လူမရှိတဲ့ နရောတှလေို့ ပွောလို့ ရပါတယျ။ ၂၀၁၅ ပုံစံအတိုငျး သတျမှတျပွီး ဖကျြခသြှားတာက အေးခမျြးတညျငွိမျနတေဲ့ နရောတှေ ၃ ခု ၊ ၄ ခု ပါသှားတော့ နထေိုငျတဲ့ လူဦးရတှေေ မဲပေးနိုငျတဲ့ လူဦးရကေ ရာဂဏနျးရှိပါတယျ။ ကနြေျာ့အနနေဲ့ဆို ဇီးကြှနျး၊ စနျပိုငျပါသှားပါတယျ။ မဲပေါငျး ၃၀၀ ကြျော နဈနာသှားပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) ၏ ဒုဥက်ကဋ်ဌ တဦးဖွဈပွီး ဆှမျပရာဘှမျ မွို့နယျ၊ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျတှငျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျးက UEC က ထုတျပွနျကွငွောခဲ့သညျ့ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပ နိုငျသညျ့ နယျမွမြေားမှာ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အားကောငျးပွီး အာဏာရ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (NLD) အား မကောငျးသညျ့ နယျမွမြေား ဖွဈသညျဟု ဝဖေနျသညျ။ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျး က “အခုလို ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျတာက အနာဂတျအတှကျ ရှေးကောကျပှဲ ၊ တရားမြှတပွီး ပှငျ့လငျးတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို တငျဖို့ကတော့ ခကျခဲသှားပါပွီ။ ကနြျောတို့ အနာဂတျ ပွနျလညျသငျ့မွတျရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေး၊ ဖကျဒရယျ တညျဆောကျဖို့ကိုလညျး အလှမျးဝေးစတေဲ့ အခကျြတှေ ပါပါလိမျ့မယျ။ ရှေးကောကျပှဲက လှတျလှတျလပျလပျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ ရှိရမယျဆိုတဲ့ အခကျြပျေါမှာ လုပျခဲ့တယျ။ အခု NLD က လုပျတဲ့ပုံစံက ကနြေျာ့အတှကျ မနှဈမွို့စရာ ၊ နိုငျငံတကာက ထောကျပွစရာလညျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ” ဟု ပွော သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/n ews/2020/10/1 7/231847.html
ကယားပွညျနယျ၊ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအနောကျခွမျးက ကယနျးအမြိုးသားပါတီနဲ့ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတီပါတီ ကိုယျစား လှယျလောငျးတှရေဲ့ မဲဆှယျဆိုငျးဘုတျ အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျနကေ့ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ အနောကျ ခွမျးက ဆောငျဒူရှာက ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဖကျြဆီးသူတှဟော ရပျကြေးအဆငျ့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတယျလို့သိရကွောငျး ဒီမော့ဆိုမွို့နယျက ပါတီရုံးအဖှဲ့မှူး ခှနျးသောမတျက ပွောပါတယျ။“ဟုတျတယျသူ က ရပျကြေးက ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျလညျးဟုတျသလို အနျအယျဒီပါတီရဲ့ အမာအခံလညျးဟုတျနေ တယျပေါ့လေ။ ကနြျောတို့ ပါတီကိုထောကျခံတဲ့လူတှေ၊ တခြို့ရှာသားတှရေဲ့ ပွောစကားအရဆိုရငျ သူကိုယျတိုငျပဲလုပျနေ တယျပေါ့လေ။ ကနြျောတို့ ဆီမှာတော့ အသံဖိုငျတှေ၊ ဓာတျပုံတှေ သကျသအေမြားကွီးရှိတာပေါ့။ ”
အဆိုပါ ဆိုငျးဘုတျမှာ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂) ကိုယျစားလှယျလောငျး ခှနျးမွငျ့နိုငျ၊ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါအယျလျမာနဲ့ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီက ပွညျသူ့ လှတျတျောကိုယျစား လှယျလောငျး စောခူးတလေ (ခ) ပိုးရယျတို့ရဲ့ ရုပျပုံနဲ့ အကွောငျးတှရေေးထားတာဖွဈပွီး အဲဒီဆိုငျး ဘုတျကို အောကျခွကေနေ ခုတျလှဲထားတာလို့ ပွောပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး ရပျကြေးကျောမရှငျအဖှဲ့ကို အသိပေး ထားပွီးဖွဈပွီး နောကျနောငျဒါမြိုး တှမေလုပျမိအောငျ တိတိကကြ သတိပေးဖို့ ပွောဆိုခဲ့ကွောငျးနဲ့ ကျောမရှငျဘကျလညျး ရဲအရေးပိုငျ အမှုဖွဈတာကွောငျး ရဲကိုတိုငျဖို့ အကွောငျးပွနျခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှာသားခငျြးဖွဈတာမို့ အမှုမဖှငျ့ ဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
ကယနျးအမြိုးသားပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခှနျးဘီထူးက “ ရှေးကောကျပှဲက ပွိုငျနတေဲ့ဟာတှေ ပွငျးထနျလာတယျ။ ကနြျောတို့နားလညျ သလောကျပွောရရငျ ကနြျောတို့တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ အခွအေနတှေကေောငျးလာတယျ။ အဲဒီလိုနရောမြိုးမှာ တခွား ပါတီဘကျက ကနြျောတို့ကို ပွိုငျဖို့ အားနညျးသှားတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ကနြျောတို့ပျေါမှာ ဆိုငျးဘုတျဖကျြတာတို့၊ ကနြျောတို့ရဲ့ စီတနျးလှညျ့လညျမှုမှာ နှောငျ့ယှကျတာတို့၊ ကနြျောတို့ကို တလြှောကျလုံး ထိုးနှကျမှုတှမြေားလာတယျလို့ ကနြျောတို့ အတိ အကတြှထေ့ားတာပေါ့နျော။ အဲတော့ အခုလိုမြိုး ဆိုငျးဘုတျဖကျြတဲ့ လုပျရပျတှကေတော့ အငျမတနျမှ အောကျတနျးကြ တယျ။ ဒါမဖွဈသငျ့ဘူး။” ကယားပွညျနယျနယျအခွစေိုကျပါတီတှဖွေဈတဲ့ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီနဲ့ ကယား အမြိုးသားပါတီဟာ မဟာမိတျပွုလုပျထားပွီး ပွညျနယျအတှငျး မဲဆန်ဒနယျအားလုံးမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/417969
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့မွို့နယျနဲ့ မိုးညှငျးမွို့နယျကို Stay at Home အစီအစဉျမှာ အကြုံးဝငျတဲ့အကွောငျး ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ဒီကနေ့ အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျနစှေဲ့နဲ့ အမိနျ့ထုတျပွနျပါတယျ။ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ဓာတျခှဲ အတညျပွုလူနာတှေ ထပျမံတှရှေိ့ရမှု၊ ခရီးသှားရာဇဝငျမရှိတဲ့အပွငျ အတညျပွုလူနာတှနေဲ့လညျး ထိတှတေ့ာမရှိဘဲ အခြိနျ တိုအတှငျး လူနာတှမြေားလာတာကွောငျ့ ရောဂါကူးစကျပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အဆိုပါ မွို့နယျတှမှော နထေိုငျတဲ့ ပွညျသူ တှေ မိမိတို့ရဲ့ နအေိမျမှာ နထေိုငျဖို့ လိုအပျတယျလို့ လညျးဆိုပါတယျ။ Stay at Home အမိနျ့အရ အစိုးရဌာနက နိုငျငံ့ ဝနျထမျးတှေ ၂ ပတျရုံးတကျ ၂ ပတျ အိမျမှာနပွေီး ရုံးလုပျငနျးတှဆေောငျရှကျရမှာဖွဈပါတယျ။
ပုဂ်ဂလိက လုပျငနျးတှထေဲမှာတော့ ဘဏျနဲ့ငှကွေေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှေ၊ စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျတှေ၊ ဆေးဆိုငျတှေ၊ ရသေနျ့နဲ့ နစေ့ဉျ တဈကိုယျရသေုံးပစ်စညျးစကျရုံ ဝနျထမျးတှေ၊ စာတိုကျလုပျငနျး၊ အငျတာနကျဝနျဆောငျမှု၊ တာဝါတိုငျနဲ့ ဖိုငျဘာပွုပွငျ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးတှကေလှဲပွီး ကနျြသူတှေ နအေိမျမှာ နထေိုငျရမှာပါ။ မဖွဈမနေ ဈေးဝယျထှကျဖို့အတှကျ တအိမျတယောကျပဲ ထှကျဖို့၊ ဆေးရုံ ဆေးခနျးကို တဈအိမျ နှဈယောကျပဲသှားဖို့၊ အပွငျထှကျရငျ နှာခေါငျးစညျးတပျကွဖို့တှေ လုပျဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ဈေးဝယျထှကျရငျ ယာဉျပျေါမှာ ယာဉျမောငျးနဲ့ နောကျတယောကျ၊ ဆေးရုံဆေးခနျး သှားရငျ ယာဉျပျေါမှာ ယာဉျမောငျးနဲ့ နောကျ နှဈယောကျထကျ မပိုဖို့ စတာတှကေို ညှနျကွားထားပါတယျ။ အဆိုပါ မွို့နယျ ၂ ခုကနေ ကုနျစညျစီးဆငျးမှု အဆငျပွခြေောမှရေ့ေးအတှကျ ကုနျတငျယာဉျတှေ သှားလာမှု စံသတျမှတျခကျြ ( SOP) အတိုငျးလိုကျနာဆောငျရှကျရမှာပါ။
တခွားအရေးပျေါကိစ်စတှနေဲ့ သှားလာဖို့ရှိပါက သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ကို သတငျးဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြယူဖို့နဲ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့အနနေဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျဖို့ သှားလာသူတှကေလှဲပွီး ရပျကှကျပွငျပမှ လညျးကောငျး ရပျကှကျ အတှငျးမှလညျးကောငျး ဝငျထှကျသှားလာတာတှခှေငျ့မပွုဖို့လညျး ညှနျကွားထားပါတယျ။ မှနျပွညျနယျ၊ မန်တလေးတိုငျး၊ ပဲခူးတိုငျးနဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးက ၁၁ မွို့နယျကို Stay at Home အစီအစဉျမှာ အကြုံးဝငျတဲ့ အကွောငျး ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ဒီကနေ့ စကျတငျဘာ ၂၅ ရကျနေ့ စှဲနဲ့ အမိနျ့ထုတျပွနျထားပါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/archives/418005
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံအထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ၌ ကရငျ အမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ -KNDP ပါတီအောငျနိုငျရေးအတှကျ ယနေ့ (အောကျတိုဘာ ၁၉ ) လူဦးရသေောငျး နှငျ့ခြီ၍ မွို့တှငျးနှငျ့ မွို့ပွငျ ကြေးရှာမြားတှငျ အငျအားပွလှညျ့လညျမှု ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။
KNDP ပါတီကို အားပေးထောကျခံဝနျးရံသူမြားသညျ ယနေ့ နံနကျပိုငျးက မွဝတီမွို့ရှိ ကရငျထာဝရနှဈကူးကှငျး ၊ ဝှရှေ့မျး မဲ့ပလဲ့ရှာ အစရှိသညျ့ နရောအသီးသီးတှငျ စုရပျပွုလုပျ၍ နံနကျ ၉နာရီခှဲခနျ့က စတငျ၍ မျောတျော ဆိုငျကယျ၊ မျောတျော ယာဉျ မွောကျမြားစှာဖွငျ့ မွဝတီမွို့ ဘုရငျ့နောငျလမျးမကွီး တလြှောကျနှငျ့ ကရငျတိုငျးရငျး သားအမြားစုနထေိုငျရာ ကြေးရှာ မြားတှငျ လှညျ့လညျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့ လှညျ့လညျရာတှငျ ကရငျအမြိုးသားအလံထောငျ၍ ကရငျ့အမြိုးသားသီခငျြး နှငျ့ ပါတီမဲဆှယျစညျးရုံးရေး သီခငျြးမြား ဖှငျ့လှဈကာ “တနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေးရရှိဖို့ KNDP ပါတီကို မဲပေးစို့” စသညျ့ စာတမျးပါ ရှပျအင်ျကြီမြား ဝတျဆငျ၍ လှညျ့လညျခဲ့ကွသညျ။ KNDP ပါတီအောငျနိုငျရေးအတှကျ ဝနျးရံ လှညျ့လညျသူမြား တှငျပါဝငျသူ တဈဦးက “ကနြျောတို့ တနျးတူညီမြှ အခှငျ့အရေးရရှိဖို့က ကရငျလူမြိုးမှနျရငျ ကရငျပါတီကို မဖွဈမနေ မဲပေးကွ ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကရငျတိုငျးရငျးသားအမြားစုကို ကိုယျစားပွုတဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ ဟာ လှတျတျောထဲ ရောကျရှိမှသာ ကရငျပွညျနယျ၏ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စတဲ့လုပျငနျးစဉျတှေ ပိုမိုတိုးတကျ ကောငျး မှနျလာမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ”ဟု ပွောသညျ။
“ဒီတိုငျးရငျးသားတှဟော လှတျတျောထဲ ရောကျလာမယျဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေးကတော့ တျောတျောလေးကို အဆငျပွသှေား မှာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ခံစားခကျြကို အရငျးခံ နားလညျတဲ့ ကိုယျစားလှယျတှကေ လှတျတျောထဲ ရောကျသှားရငျ ညှိနှိုငျး ကွမယျ၊ အဖွရှောကွမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့ မွနျမာ နိုငျငံရဲ့ အနာဂတျဟာ မြှျောလငျ့ လို့၊ မှနျးဆလို့ ရပါတယျလို့”ဟု ကရငျပွညျနယျလှတျတျော မွဝတီမွို့ နယျ မဲ ဆန်ဒနယျ အမှတျ(၁)တှငျ ဝငျရောကျ ရှေးခယျြခံ မညျ့ KNDP မှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးစိုးနောငျက ပွောသညျ။
လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံအထှထှေရှေေးကောကျပှဲ၌ မွဝတီခရိုငျတှငျ ကရငျအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ(KNDP)အပွငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD)ပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (USDP) ၊ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP)၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ တိုငျး ရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေး ပါတီ (တစည)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအငျအားစုပါတီ (NDF)တို့မှ ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြားနှငျ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစား လှယျ လောငျးတို့မှ အသီးသီး ဝငျရောကျယှညျပွိုငျ အရှေးခယျြခံကွမညျ ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1% 80%bb%e1%80%99%e1%81%80%e1%80%90%e1%80%ae%e1%8
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံးဝိုးကြေးရှာ ယနေ့(အောကျတိုဘာ ၁၇)ရကျ မနကျပိုငျးတှငျ အရပျသား နအေိမျခွံဝငျးတှငျ လကျနကျကွီး တလုံးထပျမံ တှရှေိ့ကွောငျး စုံးစမျးသိရသညျ။ အဆိုပါ လကျနကျကွီးထပျမံတှေ့ ရှိသညျ့ နရောသညျ ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးကြေးရှာ အတှငျးရှိ အရပျသားနအေိမျခွံထဲတှငျ လကျနကျကွီး တလုံးထပျမံတှရှေိ့ရပွီး၊ ထိုလကျနကျကွီးတှရှေိ့သညျ့နအေိမျကို လှနျခဲ့သညျ့ရကျပိုငျးတှငျ အစိုးရတပျမတျော မှ စဈကွောငျးဝငျနားခဲ့သညျ့ နရောဖွဈ ကွောငျးလညျး ပုံဝိုးကြေးရှာတှငျနထေိုငျသညျ့ နနျးအောငျ က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ဟိုနကေ့ ဗုံးတှတေဲ့ အိမျနဲ့နီးတယျ။ ဗုံးကတော့ တပျမတျောတှရေဲ ဗုံး ဘဲဖွဈမယျထငျတယျ။ အဲနရောမှာ က တပျမတျော စဈတပျတှဘေဲနတော လေ။ တပျမတျောက ရှာထဲမှာရှိတော့ သြှမျးတပျမတျောတှကေ လာလိုမရဘူး” ဟု ဒသေခံ နနျးအောငျကပွောသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျ ပုံဝိုးကြေးရှာအနီးတဝှိကျတှငျ အောကျတိုဘာ ၂ရကျ မှစတငျကာ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျထိ သြှမျးပွညျ ပွနျလညျ ထူ ထောငျရေးကောငျစီ၊သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA)နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲ ပွငျးထနျခဲ့သညျ့ နရောဖွဈသညျ။ ထိုတိုကျပှဲအတှငျး အစိုးရတပျမတျော စဈကွောငျးမြားသညျ ပုံဝိုးကြေးရှာအတှငျးသို့ တပျစခနျးခပြွီး နထေိုငျ ကွသကဲ့သို့ စဈကွောငျးမြား ဖွတျသနျးမှု ပွုလုပျခဲ့သညျ့နရောတခုလညျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လှနျခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာ ၁၄ရကျတှငျလညျး ပုံဝိုးကြေးရှာ အတှငျး အရပျသားနအေိမျခွံဝငျး၌ မိုငျး၊ဗုံး ၂လုံးကို တှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။“အခုခြိနျထိ ဗုံးကို အဲ့နရောမှာပဲ ခထြားတယျ။ ဘယျသူမှ သှားမထိရဲသေးဘူး”ဟု ပုံဝိုးဒသေခံ နနျးအောငျ ကဆိုသညျ။
ယနအေ့ခြိနျမှာ RCSS/SSAနှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲသညျ ငွိမျသကျနသေဖွငျ့ ပုံဝိုးကြေးရှာတှငျ တိမျရှောငျ နထေိုငျ သညျ့ စဈရှောငျ ပွညျသူ ၇၀၀ ကြျောသညျ မိမိနရေပျကို ပွနျရနျ အတှကျ ပွငျဆငျနသေညျ ဟုလညျး သိရသညျ။ သို့သျော စဈရှောငျမြား မိမိနရေပျကို ပွနျသညျ့အခါ ကြေးရှာအတှငျး လကျနကျကွီးမြား၊ ဗုံးမြား ရှိနမေညျကို စိုးရိမျနကွေကွောငျးသိရ သညျ။ စဈရေးပွငျးထနျခဲ့ပွီး စဈရှောငျ ၃၅၀၀ကြျောရှိခဲ့သညျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ အုပျစုကို လာမညျ့ နိုဝငျဘာ (၈)ရကျ တှငျ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့မပွုကွောငျး အောကျတိုဘာ (၁၆)ရကျတှငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ က ကွညောခကျြထုတျလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives /18938
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိသော မွို့နယျမြားတှငျ တိုကျပှဲလုံးဝဖွဈပှားခွငျးမရှိသော မွို့နယျမြား ပါဝငျနခွေငျးအပျေါ ရခိုငျနိုငျငံရေးပါတီမြားက ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျသညျ။ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိသော မွို့နယျမြားကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ယမနျနေ့ (အောကျတိုဘာ ၁၆) တှငျ ထုတျ ပွနျကွညောခဲ့ရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျရှိ မွို့နယျ ၉ ခုနှငျ့ မွို့နယျအခြို့ရှိ ကြေးရှာအုပျစုမြား ပါဝငျခဲ့သညျ။ “ဒီလို ကှကျကြား လုပျတယျဆိုတာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနနေဲ့ မြှတမှုမရှိ။ ဒါဟာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုယျတိုငျမှာ လှတျလပျစှာ လုပျပိုငျခှငျ့မရှိ၊ အစိုးရရဲ့ဖိအားပေးမှုပါတယျ။ နိုငျငံရေးပါတယျလို့ ကြှနျတျောတို့ သုံးသပျတယျ”ဟု ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးခိုငျပွညျစိုးက ပွောသညျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၏ ထုတျပွနျခကျြအရ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး မွို့နယျမြားဖွဈသညျ့ ပေါကျတော၊ ပုဏ်ဏားကြှနျး၊ ရသတေ့ောငျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော၊ ကြောကျတျော၊ မငျးပွား၊ မွပေုံနှငျ့ မွောကျဦးမွို့နယျမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျခွငျး မရှိပေ။ ထို့ပွငျ ကြောကျဖွူမွို့နယျရှိ ကြေးရှာအုပျစု ၅၄ အုပျစု၊ အမျးမွို့နယျရှိ ကြေးရှာအုပျစု ၃၂ အုပျစု၊ စဈတှမွေို့နယျရှိ ကြေးရှာအုပျစု ၄ အုပျစုနှငျ့ တောငျကုတျမွို့နယျရှိ ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာအုပျစု ၆၂ အုပျစု တှငျ ‌ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျမညျ မဟုတျပေ။ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားနသေညျ့ ဒသေတှငျ နထေိုငျသော ပွညျသူမြား အတှကျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားလိုအပျပွီး ယခုကဲ့သို့ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျခွငျးက ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ အလှမျးဝေး ကှာစနေိုငျပွီး မငွိမျမသကျမှုမြားဖွဈပျေါစနေိုငျသညျဟု ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ(AFP) ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောဇောဦးက ပွော သညျ။ ရခိုငျနိုငျငံရေးပါတီမြား နိုငျခွရှေိသညျ့ နရောမြားကို ခနျြလှပျကာ အာဏာရ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီနိုငျခွရှေိ နရောမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲရှေးလုပျသညျ့ သဘောမြိုးဖွဈနသေညျဟုလညျး ဦးကြျောဇောဦးက ပွောသညျ။
မွို့နယျ ၉ ခုနှငျ့ မွို့နယျအခြို့ရှိ ကြေးရှာအုပျစုမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျမညျ မဟုတျသောကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ တှငျ ပွညျသူ့လှတျတျော ၉ နရော၊ အမြိုးသားလှတျတျော ၇ နရောနှငျ့ ပွညျနယျလှတျတျော ၂၀ နရော စုစုပေါငျး လှတျတျော နရော ၃၆ နရော လဈလပျမညျဖွဈသညျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ၌ နိုငျငံရေးပါတီ ၁၈ ခုမှ ကိုယျစားလှယျ ၃၃၉ ဦးနှငျ့ တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျ ၄၁ ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျကာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ NLD နှငျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီတို့က ၆၄ နရောစီဖွငျ့ အမြားဆုံးဖွဈပွီး ANP ပါတီက ၆၂ နရောဖွငျ့ ဒုတိယ အမြားဆုံး ဝငျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ ၂၀၁၄ သနျးခေါငျစာရငျးအရ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ လူဦးရေ ၃ သနျးကြျောရှိပွီး ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ၏ စာရငျးမြားအရ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၁,၆၄၈,၇၃၇ ဦးရှိသညျ။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4740
ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျဦးမွို့နယျ ထမ်မရာဇျရပျကှကျအတှငျး ယနေ့ ညနေ ၄နာရီခနျ့က လကျနကျကွီးကညျြ ကရြောကျခဲ့ခွငျး ကွောငျ့ ကလေးငယျတဈဦး ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးသှားကာ နှဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး မွောကျဦးမွို့နယျ ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးသာစိနျ ကပွောဆိုသညျ။“ထမ်မရာဇျရပျကှကျမှာ လကျနကျကွီးကညျြကပြွီးတော့ ကလေး တဈယောကျသတေယျ။ လူကွီး နှဈယောကျက ဒဏျရာရတယျ။ အခုဆေးရုံမှာ ညနေ ၄နာရီကြျောလောကျက သဆေုံးသှား တဲ့ သူအမညျတော့ ကြှနျတျောလညျးမသိရသေးဘူး။ ဆေးရုံကနေ သိရတာပါ။ ဘယျကပဈတယျဆိုတာလညျး သခြောမသိ ဘူး ” ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
“ ဟုတျတယျ။ လကျနကျကွီး တဈလုံးကတြယျ။ ထမ်မရာဇျရပျကှကျကို ကလေးလေးတဈယောကျသသှေားတယျ။ အသကျ က ၈ နှဈလို့ပွောတယျ။ ပှဲခငျြးပွီးသသှေားတာ ကလေးလေးက ကိုယျခန်ဓာတဈခုလုံးကို ထိတယျ။ ခွထေောကျတှလေညျး တဈစစီဖွဈသှားတယျ။ သူ့အဖလေညျး ထိသှားတယျ။ ဆေးရုံမှာရှိတယျ။ မွောကျဦးဆေးရုံမှာ နောကျတဈယောကျကလညျး မွောကျဦးဆေးရုံမှာရှိတယျ။ သူကတော့ အိမျဘေးနားကပေါ့။ ခွံထဲကိုကတြာဆိုတော့ နောကျတဈယောကျ ခွံဘေးကဆို တော့ ထိသှားတာ ကလေးလေးနဲ့ သူ့အဖကေတော့ ခွံဝနျးထဲမှာပေါ့။ သဆေုံးသှားတဲ့ ကလေးလေး အဖကေလညျး ဒဏျရာ အခွအေနစေိုးရိမျရတယျ။ သူ့အဖကေတော့ လညျပငျးနဲ့ ခွထေောကျကိုထိသှားတယျ။ အိမျဘေးက အမြိုးသမီးက ဘယျနား မှာ ထိသှားလညျးတော့ ကြှနျတျောလညျး သခြောမတှလေို့ကျရဘူး။ သူက ဒဏျရာအခွအေနမေစိုးရိမျရဘူး။ သူတို့ နှဈဦးကို မွောကျဦးဆေးရုံမှာ တငျထားတယျ။ လကျနကျကွီးကတြဲ့နရောက မွောကျဦးမွို့ထဲက ရပျကှကျတဈခုပဲ ဘယျက ပဈမှနျး ကြှနျတျောတို့လညျး မသိဘူး ” ဟု လကျနကျကွီးကညျြ ကရြောကျခဲ့သော နရောသို့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျကွညျ့ရှု့ခဲ့သညျ့ မွောကျဦးမွို့ ဒသေခံပွညျသူတဈဦးကပွောဆိုသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ AA ကွား အပွနျအလှနျတိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားနပွေီး ထိုသို့ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးက ပဈခတျသညျကို မသိရှိရသော လကျနကျကွီးကညျြမြား လူနရေပျကှကျ ကြေးရှာမြားအတှငျးသို့ ကရြောကျခွငျးကွောငျ့ အရပျသားပွညျသူမြား ထိခိုကျသဆေုံးမှု ဖွဈပှားလကျြရှိသညျဟု ဒသေခံမြားကပွောဆိုသညျ။ https://www.khitthitnews. com/2020/10/%e1%80%99%e1%80%bc%e1% 80%b1%e1%80%ac%e1%80%
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ မှနျပွညျနယျအတှငျး ယှဉျပွိုငျမယျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီ ထောကျခံသူတှဟော အပွနျ အလှနျဝနျးရံပွီး မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို ဆောငျရှကျနကွေပါတယျ။ ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ မှနျ ၊ ကရငျ ၊ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားပါတီ ဝနျးရံသူတှကေ အောကျတိုဘာလ(၁၈)ရကျနကေ့ သထုံမွို့မှာအငျးအားပွလှညျ့လညျခဲ့ကွပါတယျ။ သထုံမွို့နယျမှာ မှနျညီညှတျရေးပါတီက ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတာ မရှိပမေယျ့ ပအိုဝျးနဲ့ကရငျ ပါတီဝနျးရံသူတှေ အငျအားပွ လှညျ့လညျရာမှာ မှနျပါတီထောကျခံသူတှကေဝနျးရံခဲ့ကွပါတယျ။
အခုလို မှနျတိုငျးရငျးသားပါတီကိုယျစားပွုဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးမရှိတဲ့နရောမှာ မှနျပွညျသူလူထုအနနေဲ့ ကရငျနဲ့ ပအိုဝျး တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွုပါတီတှကေို မဲထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားအမတျတှေ လှတျတျောထဲရောကျလာခဲ့ရငျ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးလိုလားခကျြတှကေို ရရှိလာမယျလို့ မှနျတိုငျးရငျးသားလူငယျတဈဦးဖွဈတဲ့ မငျးလှိုငျထော က ပွောပါတယျ။“သထုံနဲ့ဘီးလငျးမှာ မှနျမပွိုငျဘူး၊သို့သျောငွားလညျး ကရငျနဲ့ပအိုဝျးပွိုငျတယျ၊ သထုံနဲ့ ဘီးလငျးမှာ ရှိကွတဲ့ မှနျတှေ အဲဒီပါတီကို မဲပေးကွဖို့၊ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၀ အတှငျး ၅ နှဈကာလမှာ တိုငျးရငျးသားအသံတှေ ပွောနေ သျောလညျး တဈပါတီစနဈဖွဈနတေော့ တိုငျးရငျးသားဘယျလောကျပဲတောငျးဆို ပယျခခြံထိတယျ၊ တိုငျးရငျးသားအမတျ တှေ လှတျတျောထဲ မြားမြားရောကျရှိမှ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးရငျးသားတှေ လိုလားနတေဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို ရလာမယျလို့မွငျတယျ”လို့ ဆိုပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားလူငယျ‌တှစေုပေါငျးပွီး တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွုပါတီတှကေို လာရောကျဝနျးရံတဲ့အခါမှာ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး စညျးလုံးညီညှတျမှုကို ပွသရာရောကျလို့ အားရကနြေပျမိတယျလို့ လညျး ဆိုပါတယျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ မယှဉျပွိုငျတဲ့ မဲဆန်ဒနယျတှကေ မှနျတိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ ကရငျနဲ့ပအိုဝျးပါတီကိုသာ မဲပေးဖို့နဲ့ ကရငျနဲ့ ပအိုဝျးပါတီ မယှဉျပွိုငျတဲ့ မဲဆန်ဒနယျတှမှောလညျး တိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ မှနျပါတီကိုသာ မဲပေးကွဖို့ လူငယျ ကှနျယကျတှကေ အပွနျအလှနျတိုကျတှနျးထားကွပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ လကျရှိအာဏာရပါတီကို တိုငျးရငျးသားအမြားစုက ဝနျးရံပေးခဲ့ပမေယျ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ တိုငျးရငျးသားတှလေိုလားနတေဲ့ အခှငျ့အရေး တျောတျောမြားမြားကို လဈြလြူရှုခံခဲ့ရလို့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ ပိုမိုအားကောငျးလာတာလို့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျ သူတှကေ ဆိုပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76374
မဲရုံအမှတျ ၁၀၁ ဖွဈသော ဗလခကြေးရှာနှငျ့တောငျပွိုကြေးရှာသညျ မဲရုံတဈရုံသာရှိပွီး ဗလခကြေးရှာမှ ပွညျသူမြားသညျ လကျရှိ ဖားကနျ့တှငျ Covid-19 ပိုးတှအေ့မြားဆုံးဖွဈသော တောငျပွိုအထိ မဲသှားပေးရနျအဆငျမပွသေညျ့အတှကျ တောငျးဆိုထားကွခွငျးဖွဈကွောငျး ဆိုသညျ။“မဲရုံ ၁၀၁မှာကတြော့ တောငျပွိုနဲ့ဗလခကြေးရှာ ၂ ရှာက မဲရုံတဈရုံထဲမှာဘဲ မဲပေါငျးပေးရမှာဖွဈ။ ဒါပမေယျ့ တောငျပွိုကြေးရှာကကတြော့ ပိုးတှလေူ့နာအမြားဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျ Lockdown ခထြားတဲ့ ရှာဖွဈတယျ။ ပိုးတှလေူ့နာလညျး ၄၀ကြျောတှခေဲ့တဲ့ရှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဗလခ ရှာသားတှကေ မဲသှားပေးဖို့ကို စိုးရိမျတဲ့ အခွနေရှေိနကွေတယျ။ ပွီးတော့ ရောဂါကူးစကျမူလညျးမဖွဈအောငျပွီးတော့ လကျရှိခြိနျထိတောငျပွိုက ဝငျလို့မရသေးတဲ့ အခွနေဖွေဈနတေဲ့တှကျ ဗလခရှာက မဲရံတဈရုံခှဲပေးပါဆိုပွီးတောာငျးဆိုလာကွတယျ အဲကွောငျ့ကနြျောတို့လညျး တငျပွ ထားဆဲဖွဈတယျ။” ဟု မွို့နယျရှေးကောကျပှဲအရာရှိ ဦးအောငျကြျောသူကပွောသညျ။
လကျရှိတောငျပွိုကြေးရှာသညျ မဲပေးပိုငျခှငျ့မဲဆန်ဒရှငျ ၈၀၀ကြျောခနျ့ရှိပွီး ဗလခကြေးရှာသညျ ၁၃၀၀ ခနျ့ရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာမှ သိရသညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ကခငျြပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံး(ခှဲ)သို့ မေးမွနျးရာတှငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျသို့ ထပျမံတငျပွထားကွောငျး ပွောသညျ။“ဒီဗလခကြေးရှာက တောငျးဆိုခကျြကို ကနြျောတို့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို တငျပွထားဆဲဖွဈတယျ။ ခုလောလောဆယျတော့ ကခငျြပွညျနယျမှာ မဲရုံပေါငျး ၉၁၈ ရုံရှိတယျ။ အဲမဲရုံထပျတိုးလာရငျတော့ ၉၂၀ ရှိမယျ။” ဟု ကခငျြပွညျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ အရာရှိ ဦးထှနျးအောငျခိုငျကပွောသညျ။
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ Covid-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မဲပေးရနျ စိုးရိမျမူမြားစှာ ရှိနကွေသညျ။ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ မဲဆန်ဒပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူပေါငျး ၁သိနျး ၈သောငျးကြျောရှိကာ မဲရုံပေါငျး ၁၀၄ ရှိပွီး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီပေါငျး ၆ ပါတီရှိကွောငျး ဖားကနျ့မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ပါတီပေါငျး ၁၉ပါတီရှိကာ မဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၁၁သိနျးနီးပါးရှိပွီး မဲရုံ ၉၁၈ ရုံရှိသညျ။ https://burmese.kachin news.com/2020/10/18/l2-11/
လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ကငျြးပခှငျ့ပိတျပငျခံလိုကျရတဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွတှေထေဲက စဈရေးပဋိပက်ခ ဖွဈပှားမှုမရှိတဲ့ မွို့နယျနှငျ့ ကြေးရှာတှကေိုတော့ မဲပေးပိုငျခှငျ့မဆုံးရှုံးအောငျ ပွနျလညျစိစဈပေးဖို့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးအတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ ပိတျပငျခံခဲ့ရတဲ့ ဒသေခံတှကေ လိုလားနကွေပါတယျ။
ရှမျးပွညျနယျတခုလုံးတှငျ ပုံမှနျပိတျပငျခံနရေတဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွတှေထေကျ အခုလာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ကြေးရှာအုပျစုပေါငျး (၁၀၀) ကြျောကို တိုးမွှငျ့ပိတျပငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတိုးမွှငျ့ခွငျးခံလိုကျရတဲ့ ကြေးရှာအုပျစုတှဟော စဈရေးပဋိပက်ခ ဖွဈပှားနပွေီး မငွိမျမသကျဖွဈနတေဲ့ အနကျရောငျနယျမွတှေေ မဟုတျပမေဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှေ လှုပျရှားနယျမွတှေဖွေဈပွီး လကျနကျကိုငျတှေ ဝငျထှကျသှားလာနကွေတဲ့ ကြေးရှာအုပျစုတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့ပိတျပငျခံခဲ့ရတဲ့ထဲမှာပါဝငျတဲ့ ရှမျပွညျနယျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ ပနျလော့ကြေးရှာအုပျစုမှ အုပျစုအုပျခြုပျရေးမှူး စိုငျးလှဝငျး က “ဒီမှာရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပတော့ဘူးဆိုတော့ မသိတဲ့အဝေးကသူတှကေ ဦးလေးတို့ ရှာကို အနကျရောငျနယျမွကွေီးလို့ ထငျသှားကွမှာ။ တကယျက အဲလိုမဟုတျဘူး။ အစိုးရဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးတှလေဲ အမွဲဝငျထှကျရှိနတောပဲလေ။ အဲတော့ ပါတီတှအေနနေဲ့ပွနျလညျတောငျးဆိုပေးဖို့တော့ မြှျောလငျ့တယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။
RCSS အဖှဲ့ လှမျးမိုးထားတဲ့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျမှာ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) ပါတီကို ထောကျခံသူ တှမြေားပွားပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ စဈရေးပဋိပက်ခဖွဈပှားမှု မရှိတဲ့မွို့နယျတခုဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမဲဆန်ဒနယျမှာ ပါတီ ၆ ခု ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရာမှာ ၅ ပါတီက လှတျလှတျလပျလပျမဲဆှယျခှငျ့ရှိခဲ့ပမေဲ့ RCSS အဖှဲ့၏ ခွိမျးခွောကျမှုကွောငျ့ တအာငျး ပအမြိုးသားပါတီ (TNP) ကတော့ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ၊ ဟမျးငိုငျးကြေးရှာဒသေခံ စိုငျးပီး က “ဒီမှာက ဘာစဈပှဲမှ မရှိဘူး။ အဲဒါကို တမွို့နယျလုံး မဲမထညျ့ရတော့ဘူးဆိုတော့ ဒါသကျသကျညဈတာလို့ပဲ ယူဆတယျ။ ပွညျသူလူထုအခှငျ့အရေးမဆုံးရှုံးအောငျ နိုငျငံ့အကွီးအကဲတှအေနနေဲ့ ငဲ့ညှာပေးဖို့ တောငျးဆိုခငျြတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားနတေဲ့ မိုငျးရှူးမွို့နယျမှာ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျပမေဲ့ နောငျမှာ သီးသနျ့ ပွနျလညျကငျြးပခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အခု ၂၀၂၀ ပှဲမှာ မကငျြးပနိုငျတဲ့နရောတှမှောလညျး ရှေးကောကျပှဲ ရလာဒျအပွီးမှာမှ ပွနျလညျကငျြးပခှငျ့ပေးပါက အဲဒီမဲဆန်ဒနယျတှဟော အရေးပါတဲ့နရောတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ မွနျမာ့နိုငျငံရေးလလေ့ာ စောငျ့ကွညျ့သူတှကေ သုံးသပျလာကွပါတယျ။ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးရဲထှနျး က “မကငျြးပနိုငျတဲ့ နယျမွတှေေ မြားသှားတယျဆိုရငျ နိုငျငံတျောသမ်မတရှေးတဲ့အခြိနျမှာ NLD အနနေဲ့ မဲပွတျပွတျသားသား မနိုငျဘူးဆိုရငျ ရှေးကောကျပှဲ ရှဆေို့ငျးတဲ့နရောတှကေ အရေးပါတယျလို့ ပွောရမယျ”လို့ ဆိုပါတယျ။ https://burma.irrawad dy.com/news/2020/1 0/19/231946.html
ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့ပေး မပေး စဉျးစားရာတှငျ နိုငျငံရေးအရစှကျဖကျ၍ မစဉျးစားရနျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) ပါတီ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုငျးညှနျ့လှငျက ပွောကွားသညျ။
အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက လှတျလပျရေး တရားမြှတသောရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိဟုဆိုကာ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျ ခွောကျခုရှိနယျမွအေခြို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခွငျး မပွုတော့ ကွောငျး ကွညောခဲ့ရာတှငျ ယငျးနယျမွမြေားအနကျ စဈရေးပဋိပက်ခနှငျ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာစိုးရိမျ စရာမရှိသညျ့ နယျမွမြေား ပါဝငျခဲ့ခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဦးစိုငျးညှနျ့လှငျက ထိုသို့ပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။“ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့ကို ပေးတဲ့မပေး တဲ့ ကိစ်စကိုစဉျးစားတဲ့အခါမှာ တကယျ့ကို ဓမ်မဓိဋ်ဌာနျကကြ စဉျးစားစခေငျြပါတယျ။ နိုငျငံရေးအရ စှကျဖကျပွီးစဉျးစားမယျဟေ့ ဆိုရငျတော့မှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီအကြိုးသကျရောကျမှုက ပွီးသှားမှာမဟုတျပဲ ပွနျဖွရှေငျးရလညျး တဈအားခကျတယျ။ ယုံကွညျ မှုတှေ လြော့ကသြှားတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ၂၀၂၁ မှာ ရငျဆိုငျရတဲ့ စီးပှားရေးကိစ်စတှရှေိတယျ။ အခကျအခဲတှကေ အမြားကွီးရှိတယျ။ အဲဒီအခကျအခဲတှအေမြားကွီးကို ရငျဆိုငျကြျောလှားဖို့ ဖွရှေငျးဖို့ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ လကျတှဲဆောငျရှကျနိုငျမှ အောငျမွငျမှုရနိုငျမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မယုံကွညျ ဘူး။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျညဈပတျ တယျလို့ ထငျရငျ ၂၀၂၁ မှာရငျဆိုငျရမှာတှေ က ပိုပွီးအခကျအခဲကွုံလိမျ့မယျလို့ သတိပေး ခငျြတယျ” ဟု ဦးစိုငျးညှနျ့လှငျက ပွောကွား သညျ။
“လုံခွုံမှုဆိုတာက စဈရေးပဋိပက်ခရှိတဲ့ နရောမှာမလုံခွုံဘူးဆိုတာ တဈမြိုးပေါ့နျော။ ရနျကုနျမွို့လိုမြိုး ကနျြးမာရေးပွဿနာ တှေ ရှိနတေဲ့အခွအေနပေေါ့နျော။ ကနျြးမာရေး ပွဿနာဆိုတာကလညျး COVID-19 လို ကူးစကျမှုနှုနျးမွနျတဲ့ပွဿနာပါ။ ကူးစကျခံရတဲ့ သူတှလေညျး ပွငျးထနျတဲ့ ဝဒေနာတှေ ခံစားရတဲ့ အနအေထားပါ။ နောကျပွီး အသေ အပြောကျတှလေညျး ရှိလာတဲ့ အနအေထားပါ။ ဆိုတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး လုံခွုံမှုမရှိတဲ့နရောမှာကတြော့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပပွီး တော့ လုံခွုံမှုရှိတဲ့ ပေါကျတောလို မြိုး မိုငျးကိုငျလိုစဈရေးပဋိပက်ခမရှိတဲ့ နရော မြိုးကတြော့ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပဘူးဆိုတာ UEC ကိုမေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈတာ ပေါ့”ဟု ဦးစိုငျးညှနျ့လှငျက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/19 5854
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကုနျသှယျမှုတှငျ အဓိက အသုံးပွုနသေညျ့ မွဝတီ နယျစပျ မွနျမာ-ထိုငျးအမှတျ(၂) ခဈြကွညျရေး တံတားကို ရကျသတ်တပတျ (၁)ပတျခနျ့ ယာယီပိတျသှားမညျဟု ယနေ့ (အောကျတိုဘာ ၁၇) ထိုငျးနိုငျငံဘကျခွမျးမှ တာဝနျရှိ သူမြားက အရေးပျေါအစညျးအဝေး ပွုလုပျကာ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ရကျပိုငျး ထိုငျးဘကျခွမျး မဲဆောကျမွို့တှငျ Covid- 19 ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ စဈဆေးပေးရာတှငျ လာရောကျ စဈဆေး မှုခံယူကွသူမြားထဲမှ မွနျမာနိုငျငံသား(၂) ဦးတှငျ ကိုဗဈပိုးတှရှေိ့ခဲ့ပွီး ယငျးတို့နှငျ့အိမျနီးခွငျး (၉) ဦးအား ချေါယူစဈဆေးရာ တှငျလညျး နောကျထပျ ၃ ဦးမှာ ကိုဗဈပိုးတှရှေိ့ခဲ့သဖွငျ့ ရောဂါကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျရေးအတှကျ ထိုငျး-မွနျမာခဈြကွညျ ရေးတံတားကို ယာယီပိတျသိမျးရနျ စီစဉျနခွေငျးဖွဈသညျဟု တာ့ချခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး Mr: Pongrat Piromrat က ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ မဲဆောကျမွို့ပိုငျရုံးခနျး၌ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ ပွုလုပျကာ ပွောကွားခဲ့သညျ။“ မွနျမာ-ထိုငျး နယျစပျ ကုနျသှယျရေးမှာ အဓိက အသုံးပွုနတေဲ့ မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ(၂) ခဈြကွညျ ရေး တံတား ကို မနကျဖွနျ အောကျတိုဘာလ ၁၈ ရကျနေ့ ဒါမှမဟုတျ ၁၉ ရကျနမှေ့စ၍ အသုံးပွုခှငျ့ပိတျသှားပွီး ရောဂါထိနျးခြုပျနိုငျမှု အခွနေအေပျေါမူတညျပွီး တံတား ဖှငျ့မယျ့အခြိနျကို ပွနျလညျသုံးသပျ သှားမှာဖွဈပါတယျ”ဟု တာ့ချခ ရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောကွားခဲ့သညျ။
မွဝတီနယျစပျတှငျ ယခငျ ကိုဗဈကာလ မတိုငျမီက ထိုငျးနိုငျငံနှငျ့ တရားဝငျကုနျသှယျသှားလာမှု၌ ထိုငျး-မွနျမာ ခဈြကွညျ ရေး တံတား အမှတျ(၁) နှငျ့ အမှတျ (၂) ဟူ၍ တံတား ၂ စငျးရှိသလို နှဈနိုငျငံနယျခွား သောငျရငျးမွဈ ကမျးတဈလြှောကျ တရားမဝငျ လှဂေိတျ ၃၀ ကြျောမှလညျး ကုနျသှယျသှားလာမှု ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ သို့သျော Covid-19 ရောဂါပိုးမှာ ကမ်ဘာ့ ကပျရောဂါအသှငျဖွငျ့ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှု ဖွဈပျေါလာခြိနျ ပွီးခဲ့သညျ့ မတျ ၂၃ ရကျ နှငျ့ ဧပွီလဆနျးပိုငျးခနျ့မှစ၍ အမှတျ(၁) တံတားနှငျ့ သောငျရငျးမွဈကမျးတလြှောကျရှိ နယျစပျဂိတျမြား ကို ဖွတျသနျးသှားလာခှငျ့မပွုတော့ဘဲ ထိုငျး-မွနျမာအမှတျ ၂ တံတားမှသာ ကုနျသှယျမှုနှငျ့ ထိုငျးရောကျနရေပျ ပွနျ မွနျမာလုပျသားမြားအတှကျသာ အသုံးပွုခဲ့ကွသညျ။ ယနေ့ ထိုငျးဘကျခွမျး တာဝနျရှိသူမြား၏ အစညျးအဝေးဆုံးဖွတျခကျြအရ နံနကျဖွနျ အောကျတိုဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့စ၍ မွဝတီ နယျစပျ ထိုငျး-မွနျမာ ခဈြကွညျရေးတံတား အမှတျ(၂) ကို ယာယီပိတျသှားမညျဟု သိရသညျ။ http://kicnews.org/202 0/10/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
ကခငျြပွညျနယျ၊ မွဈကွီးနားမွို့မှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ဖွဈပှားသူ မြားပွားလာတဲ့အတှကျကွောငျ့ အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျမှ ဒီဇငျဘာ ၁၈ ရကျအထိ ၂ လတိတိ ညမထှကျရအမိနျ့ကို မွို့နယျအထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနကနေ သကျတမျးတိုး ထုတျပွနျပါတယျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကွိုတငျကာကှယျထိနျးခြုပျနိုငျရေးအတှကျ ဌာနဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူတှေ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ နာရေးကိစ်စ ဆောငျရှကျ သူတှကေလှဲပွီး ည ၁၂ နာရီမှ မနကျ ၄ နာရီအတှငျး မွဈကွီးနားမွို့နယျအတှငျး နအေိမျပွငျပကို ထှကျခှာတာ၊ စုဝေးတာတှေ မပွုလုပျဖို့ တားမွဈထားပါတယျ။
ပထမကို ဗဈကာလ ဧပွီလကနေ စကျတငျဘာလအထိ ညမထှကျရအမိနျ့ ဖောကျဖကျြတဲ့သူ ၁၈၆ ယောကျကို အရေးယူ ထားပွီး အခုစဈဆေးတှရှေိ့လို့ စညျးကမျး မလိုကျနာခဲ့ရငျလညျး အရေးယူသှားမှာဖွဈပါတယျလို့ မွဈကွီးနားမွို့နယျ ရဲမှူး မွငျ့မိုး က ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb. no/archives/418035
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မငျးပွားမွို့နယျ၊ မလှေမျးရှာအနီးတှငျ အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျနလေ့ယျ ၁ နာရီက တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီး လကျနကျကွီးကညျြမြား ရှာအနီးကရြောကျသဖွငျ့ ရှာသားမြား ကွောကျလနျ့ထှကျပွေးနကွေရသညျဟု ရှာသားတဈဦးက ပွောသညျ။ မလှေမျးရှာသား တဈဦးက “ပေါကျကှဲသံက နလေ့ယျ ၁ နာရီလောကျမှာ တောငျပုတျကရှော အနီးက ကြောကျကွီး တောငျဘကျက ကွားရပါတယျ။ အဲဒီနရောကို မလှေမျးကဆိုရငျ ၃ ဖာလုံလောကျ ဝေးပါတယျ။ အဲဒီနောကျ လကျနကျကွီးလကျနကျငယျ ပဈသံကွားရပွီး ရှာအနီးမှာလညျး လာကတြဲ့ အတှကျ ရှာသားတှလေညျး ငိုသူငို ပွေးသူ ပွေးနဲ့ မွဈတဈဖကျကမျးကို ထှကျပွေးကွပါတယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။ ၎င်းငျးရှာသား၏ အပွောအရ တိုငျးဗဟို (၉) ဘကျမှလညျး လကျနကျကွီးဖွငျ့ထုကွောငျး၊ မွဈထဲတဈလုံးကြ၍ ငါးသလောကျပိုကျမြောနသေူမြား ကွောကျလနျ့ထှကျပွေးကွကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။
“မလှေမျးရှာဘကျကို မငျးပွားဘကျကနေ ကားလမျးအတိုငျး လာတဲ့ စဈကွောငျးနဲ့ ဖွဈကွတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အအေနေဲ့ ဖွဈတာနမှောပါ။ တိတိကကြတြော့ ကနြျော မပွောတတျဘူး။ ပေါကျကှဲသံတှကွေားရပွီး သနေတျသံတှဆေကျတိုကျကွား ရပါတယျ။ မလှေမျးရှာထဲမှာ သကျရှယျကွီးရှယျအို အနညျးငယျကနျြခဲ့ပွီး ကနျြတဲ့လူတှေ ထှကျပွေးနကွေရပါတယျ”ဟု ပွောကွားသညျ။ ထိုသို့ ပဈခတျသံမြားကို ၁၅ မိနဈခနျ့ကွားရပွီး လကျနကျကွီးကညျြမြား ရှာအနီး ကသြျောလညျး ရှာသား မြားအား ထိခိုကျမှု မရှိကွောငျး ပွောကွားသညျ။ မငျးပွားမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျက “ ဟို မလှေမျးရှာနဲ့ သိပျမဝေးတော့တဲ့ တောငျပုတျကေ ရှာအနီးမှာ ဖွဈကွတယျလို့ ပွောတယျ။ ရာမောငျးတံတားနဲ့ မလှေမျးရှာကွားဖွဈပမေယျ့ မလှေမျးဘကျကို နီးသှားပါပွီ။ မလှေမျးရှာထဲက အိမျခေါငျမိုးတှကေို ကညျြဆံ လာထိတဲ့အတှကျ ရှာသားတှကေ ကွောကျပွီး ထှကျပွေးကွရတယျလို့တော့ ရှာသားတှေ အကွောငျးကွားလာပါတယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ မငျးပွားမွို့နယျ မလှေမျးရှာအနီးဝနျးကငျြတှငျ တောတောငျမြား ထူထပျပွီး တောငျခြိုငျမြားလညျး မြားသဖွငျ့ အဆိုပါ ရှာမွောကျဘကျ ကားလမျးပျေါတှငျ မကွာခဏ တိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားလရှေိ့သညျဟု သိရှိရသညျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးသို့ ယနေ့ ညနပေိုငျး ၆ နာရီ မိနဈ ၄ဝ ဝနျးကငျြခနျ့က ဖုနျးသုံးကွိမျ ချေါဆိုသျောလညျး ဖုနျးလကျခံ ဖွဆေိုခွငျး မရှိခဲ့ပါ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76347
ရှမျးပွညျနယျ မိုငျးခုတျမွို့မှာ မနေ့ ညနပေိုငျးက ကပျြသိနျး ၈၀၀၀ လောကျ တနျဖိုးရှိတဲ့ အိုကျဈမူးယဈဆေးဝါးတှကေို သယျလာသူမမိဘဲ သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပါတယျ။
မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးနှိမျနငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှဟော မနေ့ ညနပေိုငျးက မိုငျးဆတျမွို့နယျ မိုငျးခုတျမွို့၊ မိုငျးဆတျ-ကြိုငျးတုံ ကားလမျး မိုငျတိုငျအမှတျ ၉၆ ကီလိုမီတာနားမှာ မသင်ျကာဖှယျ မျောတျောယာဉျကို စဈဆေးဖို့ ရပျတနျ့ခိုငျးတာမှာ မျောတျောယာဉျဟာ လမျးရဲ့ ညာဘကျမှာရှိတဲ့ တံတားအုတျခုံကို ဝငျတိုကျမိပွီး ရပျတနျ့သှားတယျလို့ ပွညျထဲရေးသတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။
ကားပျေါမှာပါလာသူ ၂ ယောကျကတော့ လမျးဘယျဘကျ လြှိုထဲကို ထှကျပွေးသှားတာကွောငျ့ ကားပျေါကို ရှာဖှရောမှာ ဆာလာအိတျတှနေဲ့ ထညျ့ထားတဲ့ ငှကေပျြသိနျး ၇၈၀၀ တနျဖိုးရှိ အိုကျဈ ၃၉ ကီလို သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပွီး မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ http://burmese.dvb.n o/archives/417868
နှငျးဆီပါတီဟု လူသိမြားကွသညျ့ ညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (UDP) ဖကျြသိမျးခံရမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ တရားမြှတမှု မရှိခွငျးကွောငျ့ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) ထံ စာပို့ကနျ့ကှကျသှားမညျဟု ပါတီ ဗဟိုတှဲဖကျအတှငျးရေး မှူး ဦးသိုကျထှဏျးက မဇ်ဈိမကို ပွောသညျ။ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနေ့ ထုတျပွနျခကျြအရ နှငျးဆီပါတီကို ဖကျြသိမျးသညျ့အပွငျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၁၃၁ ဦးကိုပါ ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျးမှ ပယျဖကျြခဲ့သညျ။
နှငျးဆီပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောမွငျ့ ထောငျပွေးမှုဖွငျ့ အဖမျးခံရပွီးနောကျပိုငျး ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ ငှကွေေးဆိုငျရာ စဈဆေးမှု မြားလုပျဆောငျခဲ့ပွီး နောကျဆကျတှဲအဖွဈ ပါတီ ဖကျြသိမျးကွောငျး ကွညောခံရခွငျး ဖွဈသညျ။ နှငျးဆီပါတီသညျ နိုငျငံရေး ပါတီမြား မှတျပုံတငျခွငျး ဥပဒမြေား၊ နညျးဥပဒေ ၁၅၊ နညျးဥပဒခှေဲ (ခ)၊ (ဂ)၊ (စ) တို့နှငျ့ ငွိစှနျးနခွေငျးကွောငျ့ ဖကျြသိမျး သညျဟု ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ကွညောထားသညျ။ နှငျးဆီပါတီအနဖွေငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဖျောပွသညျ့ အခကျြမြားနှငျ့ မငွိစှနျးသောကွောငျ့ စာပို့ကနျ့ကှကျ တုံ့ပွနျရခွငျးဖွဈကွောငျး ဗဟိုတှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ဦးသိုကျထှဏျးက ပွောသညျ။“ကြှနျတျောတို့ကတော့ လောလာဆယျ UEC ကို စာပို့ပါမယျ။ သူတို့ရဲ့ တရားမြှတမှုမရှိဘဲ လုပျတာအပျေါမှာ ကြှနျတျောတို့ လုံးဝ လကျမခံပါဘူးဆိုတဲ့ ကွညောစာတမျး ပွနျထုတျပေးပါမယျ။ ထုတျပွီးတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျ လိုအပျလို့ရှိရငျ UEC ကို တဈနိုငျငံလုံးကနေ တရားစှဲမှာပါ” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
သို့သျော ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒအေရ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၏ ဆုံးဖွတျခကျြသာ အတညျဖွဈသဖွငျ့ တရားပွနျစှဲ ရနျ မဖွဈနိုငျကွောငျး၊ ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျးပေးစဉျက သှငျးငှကေိုသာ ပွနျတောငျးနိုငျကွောငျး တရားလှတျ တျောရှနေ့ေ ဦးကွီးမွငျ့က ဆိုသညျ။ “ငှကေိုပွနျထုတျပေးပါ၊ ကြှနျတျောတို့ငှနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ သှငျးထားတာပါဆိုပွီး UEC တော့ သူတို့ပွောပေါ့။ အဲဒီလို မဟုတျလို့ တရားရုံးကနေ တရားစှဲမယျဆိုရငျတော့ ရာဇဝတျမှုတော့ မစှဲနိုငျဘူး။ ငှပွေနျရလိုမှု တရား မကွောငျး အရပဲ ရမယျလို့ထငျတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ပါတီကို ဖကျြသိမျးခဲ့သျောလညျး ပါတီဆိုငျးဘုတျမြား၊ ကိုယျစားလှယျ ဆိုငျးဘုတျမြားကို လကျရှိတှငျ ဖွုတျခြဦးမညျ မဟုတျ ဘဲ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ ညှနျကွားခကျြကို စောငျ့နကွေောငျးလညျး နှငျးဆီပါတီက ပွော သညျ။ လမျးပျေါ ထှကျ ဆန်ဒပွခွငျး၊ လူစုလူဝေး ပွုလုပျခွငျးမြား မပွုလုပျကွရနျ နှငျးဆီပါတီဝငျ ခွောကျသောငျးကြျောကို မတ်ေတာရပျခံ ထားကွောငျး လညျး သိရသညျ။ နှငျးဆီပါတီကို ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ စတငျ မှတျပုံတငျ ထူထောငျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈနှငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲမြားတှငျ တဈနရောမြှ အနိုငျရရှိခွငျး မရှိခဲ့ပေ။ သို့သျော ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ အတှကျ ကိုယျစားလှယျလောငျး တဈထောငျကြျောအထိ ရှိလာခဲ့သညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/articl e/74614
မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ရကျပေါငျး ၄၀ ကာလအတှငျး ရခိုငျပွညျနယျတှငျရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP)မှ စိုကျထူထားသညျ့ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ၈ ခုထိ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရကွောငျး ANP ဗဟိုအောငျနိုငျရေးကျောမတီမှ သိရသညျ။ ANP အောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရသညျ့ မွို့နယျမြားမှာ တောငျကုတျမွို့နယျတှငျ ၄ ခု၊ အမျးမွို့နယျတှငျ ၂ ခု၊ ရမျးဗွဲမွို့နယျ ရဲယု ကြေးရှာ တှငျ ၁ ခု၊ စဈတှမွေို့ သံဖရာသီးခှဆုံတှငျ ၁ ခုတို့ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ကာလ ဖွဈသညျ့ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနမှေ့စပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနအေ့ထိ ANP ပါတီအောငျ နိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ၈ ခုထိ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ ANP ဗဟိုအောငျနိုငျရေးကျောမတီ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဦးကြျောဝငျးခကြေ “ကနြျော တို့က တကယျ့ကို ရညျရှယျခကျြရှိရှိ သကျသကျမဲ့ အတိုကျအခံပုံစံမြိုးမဟုတျဘဲနဲ့ လမျးသှားလမျးလာဖွဈဖွဈ၊ လူတဈယောကျ ခငျြးရဲ့ စိတျဆန်ဒအရ ဖကျြဆီးသှားတဲ့အပျေါမှာတော့ အရေးယူသှားဖို့ စဉျးစားထားတာမရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပါတီတဈခုခုက ဖွဈဖွဈ၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခုခုက ဖွဈဖွဈ လုပျလာရငျတော့ အရေး ယူသှားဖို့ စဉျးစားထားတယျ” ဟု ပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ ANP အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး တောငျကုတျမွို့နယျတှငျ အမှုဖှငျ့ အရေးယူရနျလုပျဆောငျနေ ကွောငျး ဦးကြျောဝငျးခကြေ ဆိုသညျ။
ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျမြား ဖကျြဆီးခွငျးကို လကျခံနိုငျစရာအကွောငျးမရှိဟု ANP ပါတီ ကိုယျစားပွုအဖွဈ စဈတှမွေို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ဦးထှနျးအောငျကြျောက ပွော သညျ။“ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျတှကေို ဖကျြဆီးတာဟာ ကနြျောတို့ လကျခံနိုငျစရာ အကွောငျးမရှိဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ နိုငျငံရေးယဉျကြေးမှု မွငျ့မားတဲ့လူတှရေဲ့ စိတျဓာတျဟာ ဒီလိုဖကျြဆီးတဲ့ လုပျရပျတှကေို လုပျမှာ မဟုတျ ဘူး။ နိုငျငံရေးယဉျကြေးမှု ထှနျးကားတယျဆိုလို့ရှိရငျ နိုငျငံရေးအရပဲ ယှဉျပွိုငျဖို့လိုအပျတယျလို့ မွငျတယျ။နောကျတဈခုက အခှငျ့အရေးလညျးရှိပွီးသားဖွဈတယျ၊ကိုယျ့မကွိုကျတာကို ဒီလိုဖကျြဆီးဖို့မလိုဘဲ မဲ ပေးပွီးတော့ ကိုယျ့မကွိုကျတဲ့သူကို မရှေးခယျြနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးလညျး နိုငျငံသားတိုငျးမှာရှိတယျ” ဟု သူကဆို သညျ။
ယငျးအပွငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD) မှ စိုကျထူထားသညျ့ အောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျမြား ဖကျြဆီးခံရမှု ဆကျတိုကျဖွဈပှားနပွေီး တောငျကုတျ၊မွပေုံ၊မာနျအောငျ၊စဈတှေ၊ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတို့တှငျ စိုကျထူထားသညျ့ အောငျနိုငျ ရေးဆိုငျးဘုတျ အနညျးဆုံး ၁၅ ခုခနျ့ ဖကျြဆီးခံခဲ့ရသညျ။ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျကငျြးပမညျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ ကာလကို စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ နံနကျ ၆ နာရီမှ နိုဝငျဘာလ ၆ ရကျနေ့ ညနေ ၁၂ နာရီအခြိနျထိ ရကျပေါငျး ၆၀ ခှငျ့ပွုကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ ကွငွောထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76344